NEWS COLLECTION: April 2010
မွန်ပြည်သစ်ထိန်းချုပ်ဒေသအတွင်း စစ်အစိုးရက လုံခြုံရေးတိုးမြှင့်ချထား
မွန်ပြည်သစ် ပါတီ ထိန်းချုပ်ရာ မြို့ပေါ် ဒေသအချို့တွင် စစ်အစိုးရ တပ်မှ ကြိုတင်ကာ ကွယ်သည့် အနေဖြင့် လုံခြုံရေး တိုးမြှင့် ချထား သည်ဟု မွန်ပြည်သစ် ပါတီကပြောသည်။
မွန်ပြည်သစ်ပါတီက နယ်ခြားစောင့်တပ်(သို့မဟုတ်) ဌာနေပြည်သူ့စစ်ဖွဲ့ရန် ငြင်းဆိုခဲ့သည့်အပေါ် စစ်အစိုးရ၏ တုန့်ပြန်မှုမည်သို့ရှိမည်ကို မသိရသေးသော်လည်း သတ်မှတ်ရက် ကုန်ဆုံးသည့် ယနေ့တွင် ဘုရားသုံးဆူမြို့ ပေါ်ရှိ စစ်အစိုးရတပ်က မြို့ပေါ်လုံခြုံရေး တိုးမြှင့် ချထားသည်ဟု အမည်မဖော်လိုသည့် မွန်ပြည်သစ်ပါတီမှ အ ရာရှိတစ်ဦးက ယခုလိုပြောသည်။
“သူတို့(စစ်အစိုးရတပ်)ကတော့ အခုကျနော်ရောက်နေတဲ့ သုံးဆူမှာတော့ သုံးဆူမြို့ကို မြို့လုံခြုံရေး ကတော့ တိုးချထားတယ်။”
အလားတူ ရေးမြို့ပေါ်ရှိ တံတားများတွင်လည်း ယခင်ကထက် လုံခြုံရေးပိုမိုတိုးမြှင့်ထား ကြောင်း ၎င်းကဆက် ပြောသည်။
“ပုံမှန်ထက်တော့ နည်းနည်းပိုတယ်။ ပိုတယ်ဆိုတာက လုံခြုံရေးကို ပိုပြီးတော့ ဂရုစိုက်လာတာပေါ့။ ဥ ပမာ ရေးတံတားဖြူမှာဆိုရင် ကတုတ်တွေ၊ ခံကတုတ်ကျင်းတွေ ဆောက်ထားတယ်။ တံတားလုံခြုံရေး အတွက်။ အရင်တုန်းက ဒီကတုတ်ကျင်းတွေမရှိဘူးလေ။ မွန်ပြည်သစ်နဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးရယူတုန်းက တော့ ဒီကတုတ်ကျင်းတွေမရှိဘူး။ အခုကျတော့ ဒီခံကတုတ်ကျင်းတွေ လုပ်ပြီးတော့ သူ့ရဲဘော်တွေ စောင့်နေရတာပေ့ါ။ ”
အကယ်၍ တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားလာပါက ပြည်ပတွင်ရောက်ရှိနေသည့် မွန်ပြည်သစ်ပါတီ တပ်ဖွဲ့ ၀င်ဟောင်းများ အနေ နှင့် မိခင်တပ်ဖွဲ့သို့ ပြန်လည်ဝင်ရောက်လာမည်ဟု ကြားသိရကြောင်း မွန်ပြည်သစ်နှင့် နယ်မြေခြင်းထိစပ်နေပြီး ဒေသအတွင်းအခြေအနေကို စောင့်ကြည့်လေ့လာ နေသူ KNU တပ်မဟာ(၆)နယ်မြေမှ ဗိုလ်ကြီးစောထဲနေက ယခုလိုပြောသည်။
“မွန်ပြည်သစ်ပါတီကတော့ အခုတလောမှာ ဟိုးအရင်က တပ်မှူးဟောင်းတွေ ရဲဘော်ဟောင်းတွေ၊ တပ်ထွက်ဟောင်းတွေဟာ၊ ထိုင်းမှာအလုပ်လုပ်နေတဲ့သူတွေဟာ ပြန်ပြီးတော့ ဆက်သွယ်မေးမြန်း တယ်။ သေနတ်သံ ပြန်ပေါက်ပြီလား ပေါက်ပြီဆိုလို့ရှိရင် သူတို့က ပြန်ပြီးတော့ ပြန်လာပူးပေါင်းမယ်။”
ထို့အပြင် စစ်အစိုးရဖက်မှ ပြင်ဆင်ထားပုံနှင့်ပတ်သက်၍ “ကျနော်တို့ ကြားမိသလောက်ကတော့ သူတို့(စစ်အစိုးရတပ်)ပြင်ဆင်တဲ့တပ်တွေက တနင်္သာရီကမ်းရိုးတန်းက စကခ(၈) ရယ်၊ ရေးမြို့က စကခ(၁၉)ရယ်၊ ပြီးလို့ရှိရင် ကော့ကရိတ်က စကခ (၁၂) တစ်ခုရယ် စကခ သုံးခု မွန်ပြည်သစ်ပါတီကို ၀ိုင်း ထားပိတ်ဆို့မယ်လို့ ကျနော်တို့ ကြိုပြီးတော့ သတင်းရ ထားတယ်။” ဟု ၎င်းကပြောသည်။
မွန်ပြည်သစ်ပါတီနှင့် စစ်အစိုးရတပ်ဖွဲ့အကြားဖြစ်ပေါ်နေသည့် အခြေအနေနှင့်ပတ်သက်၍ တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားမည် ကိုစိုးရိမ်ပြီး ယခုရက်ပိုင်းအတွင်း ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်ရှိ ဒုက္ခသည်စခန်းများ သို့ ထွက်ပြေးလာသူ ဒေသခံရွာသား ငါးရာကျော်ရှိပြီး ထပ်မံထွက်ပြေးလာရန် ရှိသေးသည်ဟု သိရသည်။
ပြီးခဲ့သည့်အပတ် ဧပြီလ ၂၂ ရက်နေ့က စစ်အစိုးရ၏ စစ်ဖက်ရေးရာအရာရှိချုပ် ဒုဗိုလ်ချုပ်ကြီး ရဲမြင့်နှင့် မွန် ပြည်သစ်ပါတီမှ ခေါင်းဆောင်များ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ပြီး မွန်ပြည်သစ်ပါတီမှ အသွင်ပြောင်း ရေးကိစ္စကို လက်မခံ ပဲငြင်းဆိုခဲ့သည်။
လတ်တလောအခြေအနေအရ နှစ်ဖက်တပ်ဖွဲ့များအနေနှင့် သိသာထင်ရှားသည့်လှုပ်ရှားမှုများ မရှိသော်လည်း စစ်အစိုးရခေါင်းဆောင်ပိုင်းက အသွင်ပြောင်းရေးနှင့်ပတ်သက်၍ လက်မခံပါက မတရားအသင်းကြေငြာမည်ဟု ပြောဆိုထားသည့်အပေါ် မည်သို့တုန့်ပြန်လာမည်ကို မွန်ပြည်သစ်ပါတီက စောင့်ကြည့်နေသည်။
အလားတူ အခြားအပစ်ရပ်အဖွဲ့များဖြစ်သည့် ကချင်၊ ၀နှင့် ရှမ်းပြည်အရှေ့ပိုင်း မိန်းလား အဖွဲ့တို့သည်လည်း စစ် အစိုးရတောင်းဆိုထားသည့် နယ်ခြားစောင့်တပ် အသွင်ပြောင်းရေးကို ငြင်းဆန်ထားပြီး ယနေ့သည် သတ် မှတ်ရက်နောက်ဆုံးနေ့ဖြစ်သည်။
(၀)နှင့် မိန်းလားအဖွဲ့အတွင်းရှိ ဒေသခံများ စစ်ရေးပြင်ဆင်ထားရန် စစ်အစိုးရပြော
၀ပြည်သွေးစည်းညီညွတ်ရေးတပ်မတော် UWSA မြောက်ပိုင်းနှင့် အမျိုးသား ဒီမိုကရက် တစ် မဟာမိတ်တပ်မ တော် (မိန်းလားအဖွဲ့) နယ်မြေအတွင်းရှိ ဒေသခံများအား ကာကွယ်ရေးအရ ပြင်ဆင်မှု ပြုလုပ်ထားရန် စစ် အစိုးရတပ်ကပြောသည်။
ရှမ်းပြည်အရှေ့ပိုင်း မိန်းခတ်မြို့နယ်အတွင်းရှိ UWSA နှင့် မိန်းလားအဖွဲ့တို့ ပူးတွဲလှုပ်ရှားရာ ဒေသအတွင်း ကျေး ရွာသားများအား ယခုရက်ပိုင်းအတွင်း စစ်ရေးပြင်ဆင်မှု ပြုလုပ်ထားရန် စစ်အစိုးရကပြောကြောင်း ရှမ်းသံတော် ဆင့်သတင်း အယ်ဒီတာ ဦးစိန်ကြည်က ယခုလို ပြောသည်။
“၀တပ်၊ မိန်းလားတပ်နဲ့ မျက်နှာချင်းဆိုင်ဖက်မှာ နအဖတပ်ဖက်က ဒေသခံကျေးလက်လူထုကို က တုတ်ကျင်းတွေ၊ ဘာတွေတူးထားဖို့ ညွှန်ကြားတယ်။ ဒီရက်ပိုင်းအတွင်းမှာ။ သူတို့ တပ်မိသားစုတွေ ဘယ်မှာရွှေ့ထားမလဲ၊ ဘာညာနေရာတွေဘာတွေ ရှာထားခိုင်းတယ်။ ရုတ်တရက်တိုက်ပွဲတွေ ဘာတွေ ဖြစ်လာရင်ပေ့ါ။”
ထိုဒေသအတွင်း မိန်းခတ်နှင့် မိန်းဖျန်ကြားရှိ လွယ်ဖာလမ်တောင်ကြောပေါ်တွင် လွန်ခဲ့သည့် ၁၅ ရက်ခန့်က တည်းက စစ်အစိုးရတပ်မှ အဝေးပစ်လက်နက်ကြီးများ သယ်ပို့ထားသည်ဟု ဆက်ပြောသည်။
ထို့အပြင် လွန်ခဲ့သည့်နှစ်ရက်ခန့်ကလည်း သံချပ်ကာကား အစီးနှစ်ဆယ်ခန့် မိုင်းတုံမြို့ သို့ရောက်ရှိလာသည်ဟု ဒေသခံများကပြောကြောင်း ၎င်းကဆက်ပြောသည်။
“လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ရက်လောက်ကထင်တယ်။ သံချပ်ကာကား အစီးနှစ်ဆယ်လောက် မိန်းတုံကို ရောက်လာ တယ်တဲ့။ နောက်ပြီးတော့ သံလွင်မြစ် အနောက်ဖက်ကမ်းမှာတော့ တပ်ဖျောက် ထားတဲ့ နအဖတပ် တွေ အင်အားဖြည့်လာတာ တော်တော်များများရှိတယ်ပြောတယ်။”
အလားတူ သံလွင်မြစ် အရှေ့ဖက်ခြမ်း UWSA တပ်များလှုပ်ရှားရာ တာ့ဆန်းဒေသ တ၀ိုက်တွင် ယခုရက်ပိုင်း အတွင်း စစ်အစိုးရတပ်က အင်အားပိုဖြည့်ထားသည်ဟု ရှမ်းပြည်တပ်မတော်တောင်ပိုင်း SSA-S အဖွဲ့မှ အမည် မဖော်လိုသည့် တပ်မှူးတစ်ဦးက ယခုလိုပြောသည်။
“အဲဒီမြောက်ပိုင်းဝဖက်ပဲတိုးတယ်။ စကခ ၁၆ ၀င်ထားတယ်၊ ၉၉ ၀င်ထားတယ်။ နောက် ၄၄ လား၊ ၇၇ လားမသိဘူး ၀င်ထားတာ တပ်မတစ်ခုရှိတယ်။ ပြီးတော့ ၅၅ ကအဲဒီကို ပြန်သွားမယ် ပြောတယ်။ မနည်းဘူးအဲ့ဒီဖက်မှာ တအားဖြည့်ထားတာ။”
အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးနှင့် ငြိမ်းချမ်းရေးယူထားသည့်အဖွဲ့များသည် နယ်ခြားစောင့်တပ် ဖွဲ့စည်းရေးနှင့်ပတ်သက်၍ ယခုလ ၂၈ ရက်နေ့ နောက်ဆုံးထား အကြောင်းပြန်ကြားရန် စစ်အစိုးရက ပြောကြားခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်း ယခုလို စစ်ရေးပြင်ဆင်မှုပြုလုပ်လာခြင်းဖြစ်သည်။
အပစ်ရပ်အဖွဲ့များသည် နယ်ခြားစောင့်တပ်အဖြစ်အသွင်ပြောင်းရန် လက်မခံပါက မတရား အသင်းအဖြစ် ကြေ ညာမည်ဟု စစ်အစိုးရက ဆိုသော်လည်း ၀ပြည်သွေးစည်းညီညွတ်ရေး တပ်မတော်၊ အမျိုးသားဒီမိုကရက်တစ် မဟာမိတ်တပ်မတော် (မိန်းလားအဖွဲ့)၊ ကချင်ပြည် လွတ်မြောက်ရေးအဖွဲ့နှင့် မွန်ပြည်သစ်ပါတီအဖွဲ့တို့မှ ဆက် လက်ငြင်းဆန်နေဆဲဖြစ်သည်။
ယခုလ ၂၂ ရက်နေ့က ရှမ်းပြည်တပ်မတော်မြောက်ပိုင်းအဖွဲ့မှ ဥက္ကဌ အပါအ၀င် ဗဟိုကော်မတီ ၁၀ ဦးကျော် တို့က ဌာနေပြည်သူ့စစ်ဖွဲ့စည်းရေးကို လက်ခံခဲ့သော်လည်း စစ်ဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်ပန်ဖက လက်မခံသေးဟု သိရ သည်။
စိုးမိုး/ ၃၀ ဧပြီ ၂ဝ၁ဝ
နိုင်ငံရေး ပါတီအဖြစ် အသွင်ပြောင်း လိုက်သော ကြံ့ဖွံ့က ရန်ကုန်မြို့ကို ကွန်ကရစ် လမ်းခင်း ပေးမည်ဟု တရားဝင် မဲဆွယ် စည်းရုံး လိုက်သည်။
ပြည်ထောင်စု ကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးအသင်းကို ယမန်နေ့က တရားဝင် နိုင်ငံရေးပါတီအဖြစ် အသွင်ပြောင်းလိုက်ပြီးနောက် ချက်ချင်းပင် ကြံ့ဖွံ့ခေါင်းဆောင် ဗိုလ်ချုပ်ကြီး သိန်းစိန် တဖြစ်လဲ ဦးသိန်းစိန်က ရန်ကုန်မြို့တော်ကို ကွန်ကရစ်လမ်းများအဖြစ် တည်ဆောက်ပေးမည်ဟု ပြောကြားလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။
“ယမန်နေ့က ဖွင့်လှစ်လိုက်သည့် ဘိလပ်မြေစက်ရုံမှ ထုတ်လုပ်သည့် ဘိလပ်မြေဖြင့် ရန်ကုန်မြို့ရှိလမ်းများအား ကွန်ကရစ်လမ်းများအဖြစ် အဆင့်မြှင့်တင် ဆောင်ရွက်ပေးသွားမည်” ဟု စစ်အစိုးရ အာဘော် နိုင်ငံပိုင်သတင်းစာများတွင် ယနေ့ဖော်ပြသည်။
မန္တလေးတိုင်း သာစည်မြို့နယ် ပြည်ညောင်ကျေးရွာတွင် တရုတ် အကူအညီဖြင့် တည်ဆောက်သည့် အဆိုပါ ဘိလပ်မြေစက်ရုံကို ယမန်နေ့က နအဖ၀န်ကြီးချုပ်၊ ပြည်ထောင်စု ကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီခေါင်းဆောင် ဦးသိန်းစိန်နှင့် စက်မှု (၁) ၀န်ကြီး၊ ကြံ့ဖွံ့ပါတီအမှုဆောင် ဦးအောင်သောင်း၊ ရန်ကုန်မြို့တော်ဝန်၊ ကြံ့ဖွံ့ပါတီ ရန်ကုန်တိုင်း တာဝန်ခံ ဦးအောင်သိန်းလင်းတို့ တက်ရောက် ဖွင့်လှစ်ပေးခဲ့သည်။
ယင်း ဘိလပ်မြေစက်ရုံမှာ ရန်ကုန်မြို့တော် စည်ပင်သာယာပိုင်ဟု သတင်းတွင် ဖော်ပြသော်လည်း ကြံ့ဖွံ့အသင်း ရန်ကုန်တိုင်း တာဝန်ခံ ဗိုလ်မှူးချုပ် အောင်သိန်းလင်းမှ ယခု ဦးအောင်သိန်းလင်းအဖြစ် ပြောင်းလဲလိုက်သည့် ရန်ကုန်မြို့တော်ဝန်က ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင် လုပ်ငန်းများအဖြစ် ကြေညာကာ ကြံ့ဖွံ့လုပ်ငန်းများအဖြစ် လုပ်ကိုင်နေခြင်းဖြစ်သည်ဟု ရန်ကုန်မြို့တော် စည်ပင်သာယာရေး အင်ဂျင်နီယာတဦးက ဆိုသည်။
“စည်ပင်လုပ်ငန်းဆို ပြောထားပေမယ့် အုတ်စက်ရုံရှိတယ်။ နောက် ဆေးရုံဆောက်နေတာ ရှိတယ်။ ရန်ကုန်မှာ စည်ပင် ပိုက်ဆံနဲ့ လမ်းပြင် တံတားဆောက် အကုန်လုံးကို ကြံ့ဖွံ့နာမည် တပ်တယ်ဗျာ။ ၂၀၀၈ လောက်ကတည်းက ဒီ စည်ပင် ရေပိုက်လိုင်း ပြင်ပေးတာကစ ကြံ့ဖွံ့အသင်းဝင် အဆိုပြုလွှာ ဘယ်လောက်ကောက်ပေးရမယ်ဆိုတာမျိုးတွေ လုပ်နေတာ ဖြစ်ပါတယ်” ဟု ၎င်းက ပြောသည်။
ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးအသင်းကို ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး စောမောင်ကို အာဏာဖြုတ်ချပြီး စစ်ခေါင်းဆောင်ဖြစ်လာသည့် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး သန်းရွှေလက်ထက် ၁၉၉၃ စက်တင်ဘာတွင် ဖွဲ့စည်းခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
မြန်မာတနိုင်ငံလုံးရှိ မြို့နယ်ပေါင်း (၃၂၅) မြို့နယ်အနက် မြို့နယ် (၃၂၀) တွင် မြို့နယ် ကျေးရွာ အသင်းခွဲများအထိ ဖွင့်လှစ်ပြီး သက်ဆိုင်ရာဒေသတွင် စီးပွားရေး လုပ်ကိုင်ခွင့်များ၊ လေလံလုပ်ကွက်များ၊ ငွေချေးလုပ်ငန်းများကို နှစ်ရှည်လများ လုပ်ကိုင်နေသည့် အဖွဲ့အဖြစ် လူသိများသည်။
ရန်ပိုင် Friday, April 30, 2010
အင်အား ၅၀၀၀ ခန့် ပါဝင်သည့် တရုတ်စစ်တပ်က တရုတ်-မြန်မာ နယ်စပ် တလျှောက်တွင် ယခုရက်ပိုင်း အတွင်း တပ်စွဲ ထားကြောင်း သိရသည်။
အဆိုပါ တရုတ် စစ်တပ်သည် ၀ပြည်နယ် မြို့တော် ပန်ဆန်းနှင့် ကပ်လျက်ရှိသည့် နယ်စပ် တလျောက်တွင် တပ်စွဲထားပြီး လေယာဉ်ပစ် အမြောက် များလည်း ပါဝင်သည်ဟု ၀ပြည် သွေးစည်း ညီညွတ်ရေး အဖွဲ့ (UWSA) အရာရှိ တဦးက ဧရာဝတီသို့ ပြောသည်။
“အစိုးရတပ်တွေ ၀ယ်ထားတဲ့ လေယာဉ်တွေကို အရမ်းသုံးလို့ မရတော့ဘူး၊ လေယာဉ်ပစ် အမြောက်တွေကို တရုတ်က နယ်စပ်နားမှာ ချထားတာ”ဟု ၎င်းကဆိုသည်။
UWSA တပ်ဖွဲ့များ အနေဖြင့် စစ်ရေးသတိ အမြဲရှိနေကြောင်း၊ တောင်တန်းများ ပေါ်တွင် အခြေစိုက်သည့် မိုင်းပေါက်၊ ၀ိန်းကောင်၊ မိုင်းမော စသည့် စစ်စခန်းများတွင် ပြင်ဆင်မှုများ ပိုမိုပြုလုပ်ထားကြောင်း အဆိုပါ အရာရှိက ဆက်လက်ပြောပြသည်။
တရုတ်နိုင်ငံအနေဖြင့် နယ်စပ်ဒေသများ၌ တိုက်ပွဲများ ဖြစ်ပွားခဲ့လျှင် တရုတ်နိုင်ငံဘက်သို့ ဒုက္ခသည်များ ထွက်ပြေး လာမည်ကို လည်း စိုးရိမ်ကြောင်း ၎င်းကရှင်းပြသည်။
ယမန်နှစ်က ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် ကိုးကန့်ဒေသ တိုက်ပွဲများတွင် ဒုက္ခသည် စုစုပေါင်း ၃၇၀၀၀ ခန့် တရုတ်နိုင်ငံထဲသို့ ထွက်ပြေးခဲ့သည်။
ယခုကဲ့သို့ တရုတ်စစ်တပ်များ ချထားသည့် အချိန်သည် စစ်အစိုးရနှင့် UWSA အဖွဲ့အကြား နယ်ခြားစောင့်တပ် ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်း ရေးနှင့် ပတ်သက်၍ တင်းမာနေချိန်နှင့် တိုက်ဆိုင်နေသည်။
စစ်အစိုးရအနေဖြင့် လူအင်အား လက်နက်အင်အား အလုံးအရင်းဖြင့် တိုက်ခိုက်လျှင် အပစ်ရပ်အဖွဲ့များ၏ နယ်မြေများကို သိမ်း နိုင်မည်ဖြစ်သော်လည်း အဆိုပါ နယ်မြေများကို ရေရှည်တွင် ဆက်လက်ထိန်းချုပ်ထားရန် မလွယ်ကူကြောင်း၊ တရုတ်-မြန်မာနယ် စပ် စစ်ရေးလေ့လာသူ ဦးအောင်ကျော်ဇောကလည်း သုံးသပ်ပြောဆိုသည်။
အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေး အဖွဲ့များကို စစ်အစိုးရက ပြီးခဲ့သည့် ဧပြီလ၂၈ ရက်နေ့ နောက်ဆုံးထား၍ နယ်ခြားစောင့် တပ်အဖြစ် ပြောင်းလဲရန် ပြောကြားထားသည်။
သို့သော် ပြီးခဲ့သည့် တနင်္ဂနွေနေ့က(SSA–N) အဖွဲ့ အခြေစိုက်ရာ ရှမ်းပြည်နယ် မြောက်ပိုင်း သီပေါ မြို့နယ်ရှိ စိန်ဂျော့စခန်းတွင် ရှမ်းပြည် တပ်မတော်(မြောက်ပိုင်း) (SSA–N) ဥက္ကဋ္ဌ ဦးလွယ်မောင်းနှင့် တပ်ဖွဲ့ဝင်တချို့က ဌာနေပြည်သူ့စစ်ပြုလုပ်ရန် လက်ခံ ခဲ့ကြောင်း သျှမ်းသံတော်ဆင့် သတင်းစဉ်တွင် ရေးသားထားသည်။
ကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော်(KIA)မှ အရာရှိတဦးကလည်း စစ်အစိုးရက နယ်ခြားစောင့် တပ်ဖွဲ့စည်းရေးကို အတင်းအကျပ် လုပ်ဆောင်ခြင်း မရှိတော့ကြောင်း၊ ယမန်နေ့ကလည်း မြစ်ကြီးနား မြို့တွင် ပြုလုပ်သည့် ခရစ်ယာန်ဘာသာရေး ခေါင်းဆောင် များနှင့် စစ်အစိုးရ ဖွဲ့စည်းထားသည့် ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံဖြိုးရေး အသင်း( ကြံ့ဖွံ့)တို့ တွေ့ဆုံကြကြောင်း ဧရာဝတီသို့ ပြောသည်။
အဆိုပါတွေ့ဆုံပွဲကို စစ်အစိုးရ ၀န်ကြီးများဖြစ်သည့် ဆက်သွယ်ရေး၊ စာတိုက်နှင့်ကြေးနန်း ၀န်ကြီးဌာန ၀န်ကြီး ဗိုလ်မှူးချုပ် သိန်းဇော် အပြင် အမှတ် ၁ စက်မှု ၀န်ကြီးဌာန ၀န်ကြီး ဦးအောင်သောင်းလည်း တက်ရောက်ကြောင်း သိရသည်။
NEJ/ ၃၀ ဧပြီ ၂ဝ၁ဝ
အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် (အန်အယ်လ်ဒီ) အထွေထွေ အတွင်း ရေးမှူး ဒေါ်အောင်ဆန်း စုကြည်နှင့် အန်အယ်လ်ဒီ ပြည်သူ့ လွှတ်တော် ကိုယ်စား လှယ်များက စစ် အစိုးရအား တရားစွဲဆို လျှောက်ထားမှုများကို တရားရုံးချုပ်က အကြောင်း ပြန်ကြားမည်ဟု ပြောဆို လိုက်သည်။
ယနေ့ နေ့လယ် (၁) နာရီတွင် တရားရုံးချုပ်သို့သွားရောက်ခဲ့သည့် ရှေ့နေဦးဉာဏ်ဝင်းက “တရားရုံးချုပ် ဒုတိယ ညွှန်ကြားရေးမှူးကနေပြီးတော့ သူတို့ဒီကိစ္စကို ဆက်လက်ဆောင်ရွက်နေတယ်၊ အခြေအနေကို ကျနော်တို့ဆီကို အကြောင်းကြားပေးပါ့မယ်လို့ ပြောပြီး ဖုန်းနံပါတ်နဲ့လိပ်စာလေးတွေ ရေးပေးခဲ့ပါဆိုလို့ ကျနော်တို့ ပေးခဲ့ပါတယ်” ဟု ပြောသည်။
မှတ်ပုံတင်ပြီးသား ပါတီတခုအနေဖြင့် ဆက်လက်ရပ်တည်ခွင့်နှင့် ၁၉၉၀ ရွေးကောက်ပွဲအနိုင်ရ ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်များ တရားဥပဒေအရ ဆက်လက်ရပ်တည်ခွင့်တို့အတွက် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်များက တရားရုံးချုပ်သို့ ယမန်နေ့က လျှောက်ထားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ၎င်း၏အမည်ဖြင့် ပါတီများမှတ်ပုံတင်ခြင်းဥပဒေပုဒ်မ (၂၅) ကိုဖျက်သိမ်းရန် လျှောက်ထားခဲ့ကြောင်း ဦးဉာဏ်ဝင်းက ပြောသည်။
“ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က စွဲတာတမှု သူ့နာမည်နဲ့စွဲတာ။ အဲဒါစွဲတာက သီးခြားသက်သာခွင့် အက်ဥပဒေပုဒ်မ (၄၅) နဲ့ (၅၄) အရ စွဲတာ။ အဲဒါက ဘာကို စွဲတာလည်းဆိုတော့ ပါတီမှတ်ပုံတင်ခြင်းဥပဒေ (၂၅) မှာ ရက်ပေါင်း (၆၀) ကျော်လို့ ပါတီထပ်မံ မှတ်ပုံမတင်ရင် အလိုအလျှောက် ပျက်စီးတယ်လို့ မှတ်ယူရမယ်လို့ ဖော်ပြထားတယ်။ အဲတော့ ကျနော်တို့က ဒီမှာပြောတာက အန်အယ်လ်ဒီဟာ နဂိုကတည်းက ၈၈ ဥပဒေအရ တရားဝင်မှတ်ပုံတင်ထားတဲ့ ပါတီဖြစ်တယ်။ ဒီလိုတရားဝင် မှတ်ပုံတင်ထားတဲ့ ပါတီကို ဒီလိုဆောင်ရွက်ခွင့်မရှိဘူး။ တရားဥပဒေနည်းလမ်းမကျဘူး။ ဒါကြောင့် ဒီပြဋ္ဌာန်းချက်ဟာ အန်အယ်လ်ဒီပါတီပေါ်မှာ အကျိုးသက်ရောက်မှုမရှိကြောင်း တားမြစ်မိန့်ထုတ်ပေးပါဆိုပြီးတော့ လျှောက်တာတခုပါ” ဟု ဦးဉာဏ်ဝင်းက ပြောသည်။
နောက်တမှုမှာ အန်အယ်လ်ဒီပါတီဥက္ကဋ္ဌ ဦးအောင်ရွှေခေါင်းဆောင်ပြီး ၁၉၉၀ ရွေးကောက်ပွဲအနိုင်ရ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် (၂၆) ဦးက လျှောက်ထားခြင်းဖြစ်သည်ဟု ၎င်းက ပြောသည်။
“နောက်တမှုက ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် (၂၆) ယောက်က သူတို့ဟာ ၁၉၉၀ ရွေးကောက်ပွဲမှာ အနိုင်ရထားတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်တဲ့အတွက် တရားဥပဒေအရ ရပ်တည်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်။ အဲတော့ အခုထုတ်တဲ့ ပြည်သူ့လွှတ်တော် ရွေးကောက်ပွဲ ဥပဒေပုဒ်မ (၇၁) မှာကျတော့ (၉၀) ခုနှစ်ရလဒ်တွေကို ပျက်ပြယ်ပြီလို့ ထည့်ပြီးတော့ ရေးထားတယ်။ အဲဒါပျက်ပြယ်ခြင်း မရှိကြောင်း၊ အမတ်တွေရဲ့ရပ်တည်ခွင့်ကို ပျက်ပြယ်ခြင်းမရှိကြောင်း ကြေညာပေးဖို့နဲ့ နောက်ဆက်တွဲအကျိုးဆက် သက်သာခွင့်အဖြစ် ပြည်သူ့လွှတ်တော်ခေါ်ပေးပါလို့ လျှောက်တာပါ။ အဲဒါကတော့ တရားမကြီးအမှုပေါ့။ ပုဒ်မ (၄၂) နဲ့” ဟု ဦးဉာဏ်ဝင်းက ပြောသည်။
ပြီးခဲ့သည့် မတ် (၂၃) ရက်၌ အန်အယ်လ်ဒီက စစ်အစိုးရ ထုတ်ပြန်သည့် ရွေးကောက်ပွဲဥပဒေများတွင် တရားမျှတမှု မရှိခြင်းကြောင့် ပါတီ၏ထိခိုက်နစ်နာမှုများအတွက် စစ်အစိုးရကို အရေးယူပေးပါရန် ဗဟိုတရားရုံးချုပ်သို့ လျှောက်ထားခဲ့သော်လည်း တရားရုံးချုပ်က လက်မခံဘဲ ပယ်ချခဲ့သည်။
ထိုသို့ပယ်ချခဲ့ခြင်းမှာ တရားဥပဒေနှင့် မညီသည့်အတွက် အန်အယ်လ်ဒီက တရားသူကြီးချုပ်ထံ တရားဥပဒေကြောင်းအရ ဆောင်ရွက်ရန် ဧပြီ (၈) ရက်နေ့က အကြောင်းကြားခဲ့ခြင်းကိုလည်း တရားသူကြီးချုပ်က ပယ်ချခဲ့သည်။
ယင်းသို့ ပယ်ချခဲ့ပြီးနောက် ယမန်နေ့က ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က တရားလိုပြုကာ အန်အယ်လ်ဒီပါတီ ဆက်လက် ရပ်တည်ခွင့်အတွက် တရားရုံးချုပ်တွင် တရားစွဲဆိုလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။
နအဖ နိုင်ငံရေးပါတီ ထောင်
နအဖ စစ်ခေါင်းဆောင် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး သန်းရွှေ နာယကအဖြစ် တာဝန်ယူထားသော ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးအသင်းက ယမန်နေ့တွင် တရားဝင် နိုင်ငံရေးပါတီအဖြစ် ပြောင်းလဲလိုက်ပြီး ယင်းပါတီကို စစ်အစိုးရ ၀န်ကြီးချုပ် ဦးသိန်းစိန်က ဦးဆောင်သည်။
ယမန်နေ့တွင် နိုင်ငံပိုင်သတင်းဌာနများက ကြံ့ဖွံ့ကို ပါတီပြောင်းကြောင်း ကြေညာခဲ့ပြီးနောက် လာမည့် ရွေးကောက်ပွဲတွင် ၀င်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ရန်အတွက် နိုင်ငံရေးပါတီအဖြစ် လျှောက်ထားကြောင်း “ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ လျှောက်ထားသူ ဦးသိန်းစိန်ပါ (၂၇) ဦး” ဟု ယနေ့ စစ်အစိုးရအာဘော် နိုင်ငံပိုင် သတင်းစာများမှတဆင့် ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်က ထုတ်ပြန်သည်။
၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲအတွက် ပြင်ဆင်နေသည့် နိုင်ငံရေးပါတီ (၂၅) ခုတွင် ကိုယ်စားလှယ် (၂၇) ဦးဖြင့် အင်အားအကောင်းဆုံး ပါတီအဖြစ် ရပ်တည်နေသည်။ ရွေးကောက်ပွဲရက် အတိအကျ မသတ်မှတ်ထားသည့် ရွေးကောက်ပွဲဥပဒေအရ နိုင်ငံရေးပါတီ မှတ်ပုံတင်ခွင့်ကို လာမည့် မေလ (၆) ရက် နောက်ဆုံးနေ့ သတ်မှတ်ထားရာ စစ်အစိုးရက သတ်မှတ်ရက် ကုန်ခါနီးတွင် မှတ်ပုံတင်လိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။
ကြံ့ဖွံ့အသင်းနာယကကြီးဖြစ်သူ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး သန်းရွှေ မိန့်ကြားသော သြ၀ါဒများအား မိမိတို့ လုပ်ငန်းလမ်းညွှန်အဖြစ် ခံယူလိုက်နာကျင့်သုံးရေးဟူ၍ ပါတီမူဝါဒ ချမှတ်ထားသည်။
ကြံ့ဖွံ့ပါတီဥက္ကဋ္ဌအဖြစ် လက်ရှိ နအဖစစ်အစိုးရ ၀န်ကြီးချုပ် ဦးသိန်းစိန်က တာဝန်ယူပြီး စစ်အစိုးရ အဖွဲ့ဝင်ဝန်ကြီးများ၊ ဒု-၀န်ကြီးများနှင့် မြို့တော်ဝန်များက ပါတီအမှုဆောင်များအဖြစ် ကြံ့ဖွံ့ဖွဲ့စည်းပုံအတိုင်း တာဝန်ယူလိုက်သည်။
နအဖစစ်အစိုးရ ၀န်ကြီးချုပ် ဦးသိန်းစိန် အပါအ၀င် စစ်အစိုးရအဖွဲ့ဝင် ၀န်ကြီးများ စုစုပေါင်း (၂၇) ဦးက ယခုလ (၂၆) ရက်တွင် စစ်တပ်ရာထူးများမှ နုတ်ထွက်ပြီးနောက် ယခုကဲ့သို့ နိုင်ငံရေးပါတီ ထူထောင်ကြောင်း ကြေညာလိုက်ခြင်းလည်း ဖြစ်သည်။
ယခု ပါတီအဖြစ် အသွင်ပြောင်းလိုက်သည့် ကြံ့ဖွံ့အသင်းကို ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး သန်းရွှေ၊ ဒု-ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မောင်အေး၊ နအဖ ၀န်ကြီးချုပ် ဦးသိန်းစိန် (ဗိုလ်ချုပ်ကြီး)၊ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး သူရရွှေမန်း၊ အတွင်းရေးမှူး (၁) ဗိုလ်ချုပ်ကြီး သီဟသူရ တင်အောင်မြင့်ဦး တို့က နာယကအဖြစ် တာဝန်ယူထားကြသည်။
အသင်းနာယကအဖွဲ့ဝင်တဦးဖြစ်သည့် နအဖ၀န်ကြီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်ကြီး သိန်းစိန်က စစ်တပ်ရာထူးမှ နုတ်ထွက်ပြီး အသွင်ပြောင်း ကြံ့ဖွံ့ပါတီဥက္ကဋ္ဌအဖြစ် တာဝန်ယူလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။
လယ်ဆည်ဝန်ကြီး ဦးဌေးဦး (ဗိုလ်ချုပ်) က အသင်း အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး၊ တွဲဖက်အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးအဖြစ် အမှတ် (၁) လျှပ်စစ်ဝန်ကြီး ဦးဇော်မင်း (ဗိုလ်မှူးချုပ်)၊ အတွင်းရေးမှူး အဖွဲ့ဝင်များအဖြစ် သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီး ဦးသောင်း၊ သမ၀ါယမ၀န်ကြီး ဦးတင်ထွဋ် (ဗိုလ်ချုပ်)၊ စက်မှူ (၁) ၀န်ကြီး ဦးအောင်သောင်း၊ ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီး ဦးသိန်းဇော် (ဗိုလ်မှူးချုပ်)၊ ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီး ဦးကျော်ဆန်း (ဗိုလ်မှူးချုပ်) တို့ဖြစ်သည်။
ကျန် နအဖစစ်အစိုးရအဖွဲ့ဝင် ၀န်ကြီးများနှင့် ဒု-၀န်ကြီးများ၊ မြို့တော်ဝန်တို့ကို အလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့ဝင်များအဖြစ် တာဝန်ယူထားသည်။
ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးအသင်းကို ၁၉၉၃ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ စစ်အစိုးရ စိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်သူများနှင့် ကျင်းပသည့် အမျိုးသားညီလာခံစတင်ချိန်တွင် ဖွဲ့စည်းခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
ယင်းညီလာခံမှ ထွက်ပေါ်လာသည့် ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ ထွက်ပေါ်လာပြီးချိန်မှစပြီး ကြံ့ဖွံ့အသင်းအမှုဆောင်များ အဖြစ် တာဝန်ယူထားသည့် နအဖစစ်အစိုးရ အဖွဲ့ဝင်များက ပြည်သူလူထုအတွင်း စည်းရုံးရေးလုပ်ငန်းများ လုပ်ဆောင်နေသည်။ ၂၀၀၉ ခုနှစ်တွင် စည်းရုံးရေးလုပ်ငန်းများ လူသိရှင်ကြား ထင်ထင်ပေါ်ပေါ် လုပ်ဆောင်လာပြီး စက်မှု (၁) ၀န်ကြီး ဦးအောင်သောင်းနှင့် ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီး ဗိုလ်မှူးချုပ် ကျော်ဆန်းတို့ တက်တက်ကြွကြွ စည်းရုံးရေးဆင်းခဲ့သည်။
ရန်ကုန်မြို့တော်ဝန် ဗိုလ်မှူးချုပ် အောင်သိန်းလင်းက ကြံ့ဖွံ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကို ဦးဆောင် ဆောင်ရွက်လာပြီး မြို့တော် စည်ပင်လုပ်ငန်းများကို ကြံ့ဖွံ့စာတန်းထိုးပြီး လုပ်ဆောင်နေသည်။
လက်ရှိ ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးအသင်းမှ နိုင်ငံရေးပါတီအဖြစ် အသွင်ပြောင်းလိုက်ချိန်တွင် ပြည်နယ်နှင့် တိုင်းအဆင့် အသင်း (၁၇) သင်း၊ ခရိုင်အဆင့် အသင်း (၆၆) သင်း၊ မြို့နယ် အသင်း (၃၂၀)၊ ရပ်ကွက်၊ ကျေးရွာအုပ်စု အသင်း (၁၅,၄၂၁) သင်းရှိနေပြီဟု ကြံ့ဖွံ့စာရင်းများအရ သိရသည်။
လိုင်ဇာ ကုန်ကားအ၀င်နည်း ၊ အခြားနေရာများ ပုံမှန်ရှိ
တရုတ်နယ်စပ်အနီးရှိ ကချင်ပြည်လွတ်လပ်ရေးအဖွဲ့ (ကေအိုင်အို) ဋ္ဌာနချုပ်ရှိရာ လိုင်ဇာမြို့တွင် ဧပြီလ ၂ဂ ရက်နေ့မှစ၍ ကုန်ကား အ၀င်အထွက် နည်းပါးနေပြီး လွယ်ဂျယ် - ဗန်မော်နှင့် မူဆယ် (၁၀၅) မိုင် ကုန်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းမှာ ပုံမှန် ရှိကြောင်း သိရသည်။
နယ်ခြားစောင့်တပ် ဖွဲ့စည်းရေး နောက်ဆုံးသတ်မှတ်ရက် ဖြစ်သည့် ဧပြီလ ၂ဂ ရက်နေ့ နောက်ပိုင်း ဒေသခံ ကုန်သယ်များ ၏ စိုးရိမ်မှုကြောင့် ကုန်ကားအ၀င်နည်းခြင်း ဖြစ်ကြောင်း လိုင်ဇာဒေသခံတစ်ဦးက သျှမ်းသံတော်ဆင့်သို့ ပြောသည်။
မြစ်ကြီးနား ဗန်းမော်မြို့များနှင့် ကားလမ်းဆက်သွယ်ထားသော လိုင်ဇာမြို့တွင် ကုန်ကားများအ၀င်နည်းသွားသည့်တိုင် ခရီးသည်တင် ဗင်ကားများ အ၀င် အထွက်ရှိဆက်နေကြောင်း သူက ပြောသည်။
“ ကုန်ကားအ၀င်ကတော့ တော်တော်နည်းသွားတယ် လူစီးဗင်ကားတွေတော့ဝင်တယ် လမ်းကြောင်းမှာ ဂိတ်တိုင်းလိုလို မှာ စစ်ဆေးမှုတွေ များလာတာပေါ့ မနေ့ကစပြီး အ၀င်နည်းသွားတာ” လို့ သူကပြောသည်။
ယခုရက်ပိုင်းအတွင်း လိုင်ဇာမြို့၏ အခြေအနေမှာ ကုန်ကားအ၀င်နည်းခြင်းကြောင့် ခြောက်ကပ်နေသော်လည်း ပုံမှန်တည်ငြိမ်လျှက်ရှိကြောင်း သိရသည်။
ကချင်ပြည်နယ် ဗန်းမော် - လွယ်ဂျယ် တရုတ်နယ်စပ် ကုန်သွယ်ရေးလမ်းမှာ ယခုရက်အတွင်း ကုန်စည်စီးဆင်းမှု ပိုမိုကောင်းမွန်ကြောင်း လွယ်ဂျယ်ဒေသခံကုန်သယ်တစ်ဦးက ပြောသည်။
“အရင်တုန်းက တရုတ်ကုန်တွေပိတ်ထားတယ် ကားတွေညပိုင်းမောင်းခွင့်မရှိဘူး အခုဖွင့်ပေးလိုက်ပြီ ကားတွေလည်း ပုံမှန်အသွားအလာမပျက်ရှိပါတယ် အခုက နေ့ရောညရော ကားတွေသွားလာနိူင်တယ် အရင်ထက်ပိုကောင်းလာတယ် ” လို့ သူက ဆိုသည်။
တရုတ်နယ်စပ် လွယ်ဂျယ်အနီး မိုင်ဂျာယန်ရွာတွင် ကေအိုင်အိုတပ်မဟာ ၃ တပ်စခန်းရှိသော်လည်း ကုန်သွယ်ရေး လမ်းကြောင်းနှင့် ဆက်စပ်မှုမရှိနိူင်ကြောင်း သူက ဆက်ပြောသည်။
“ ကေအိုင်အေစခန်းတော့ လွယ်ဂျယ်နားမှာရှိတယ် ဒါပေမဲ့ နအဖဘက်က ဒီစခန်းထက်စာရင် လိုင်ဇာတို့ လိုင်စင်တို့ကို ပိုပြီး အာရုံစိုက်မှာပေါ့လေ ဒီဘက်က သူတို့လူ (နအဖ) ကပိုများတော့ သိပ်အဓိကမထားလောက်ဘူး ဘာမှထူးထူးခြားခြား မရှိဘူး ပုံမှန်ပါပဲ ” လို့ ဆိုသည်။
အလားတူ တရုတ် - မြန်မာနယ်စပ် အဓိက ကုန်သွယ်ရေးစခန်း ဖြစ်သည့် သျှမ်းပြည် (မြောက်ပိုင်း) မူဆယ် (၁၀၅) မိုင် လမ်းကြောင်းတွင် သင်္ကြန်ကာလအပြီး ကုန်စည်စီးဆင်းမှု အရှိန်တက်နေကြောင်း မူဆယ်မြို့ ဒေသခံကုန်သယ်တစ်ဦး က ဆိုသည်။
“လောလောဆယ်က သင်္ကြန်ကာလအပြီးဆိုတော့ တကယ်ဟော့တာပေါ့ ကောင်းလာတာပေါ့ အသွားအလာက ကျောင်းဖွင့်ခါနီးဆိုတော့ တရုတ်ဘက်က ကျောင်းသားသုံးပစ္စည်းတွေများတာပေါ့ ပိတ်တာဘာညာလည်း မရှိပါဘူး ” လို့သူက ဆိုသည်။
ဖူးကစ်ဆရာမီ ပန်းကန်လုံးစက်ရုံ အလုပ်သမားအခွင့်အရေးတိုက်ပွဲ
မဲဆောက်မြို့မှာ အလုပ်သမားအများစုဟာ အထည်ချုပ်စက်ရုံတွေ၊ သိုးမွေးစက်ရုံတွေမှာ လုပ်ကြတာမှန်ပေမယ်လို့ အဲဒီစက်ရုံတွေလိုပဲ တခြားစက်ရုံတွေမှာ ကျနော်တို့ မြန်မာအလုပ်သမားတွေ ရှိပါတယ်။ အဲဒီအထဲကမှ ပန်းကန်လုံး စက်ရုံတခုရဲ့ အလုပ်သမားတိုက်ပွဲအကြောင်းကို တင်ပြချင်ပါတယ်။
မဲဆောက်မြို့မှာ ကျနော်တို့ အလုပ်သမားတွေအတွက် သက်သာဈေးလို့ခေါ်ရင်လည်း မမှားတဲ့ သောကြာဈေး၊ စနေဈေး၊ တနင်္ဂနွေဈေးဆိုပြီး နယ်မြေအလိုက် ညနေဈေးကလေးတွေ ဖွင့်လှစ်ပြီး ဈေးနှုန်းချိုချိုနဲ့ ရောင်းချတာတွေ ရှိပါတယ်။ အခုလက်ရှိမှာတော့ သောကြာနဲ့ စနေဈေးကို တနေရာတည်းမှာ (၂) ရက်ဆက်ပြီး ရောင်းပေးပါတယ်။ အဲဒီဈေးရဲ့ဘေးမှာ ပန်းကန်လုံးစက်ရုံဟု လူသိများတဲ့ စက်ရုံတရုံရှိပါတယ်။ အလုပ်သမားတွေအခေါ် ဖူးကစ်ဆရာမီ ပန်းကန်လုံးစက်ရုံလို့ ခေါ်ပါတယ်။ စက်ရုံရဲ့သူဌေးက တိုင်ဝမ်တရုတ်သူဌေးဖြစ်ပြီး ထိုင်းနိုင်ငံသားတဦးနဲ့ ဖက်စပ်လုပ်ပါတယ်။ စက်ရုံကိုတော့ အဲဒီတရုတ်သူဌေးကပဲ တိုက်ရိုက်အုပ်ချုပ်ပါတယ်။ မိန်းကလေးနဲ့ ယောက်ျားလေး အလုပ်သမားဦးရေ (၁၅၀) ကျော်လောက်ပဲ ရှိပါတယ်။
စက်ရုံရဲ့လုပ်ငန်းခွင်အဆင့်ဆင့်ကို အနည်းငယ် ပြောပြချင်ပါတယ်။ အပြားအထူ လက် (၄) လုံးလောက်ရှိပြီး ထမင်းစား၊ စားပွဲဝိုင်းနီးပါးလောက်ကျယ်တဲ့ ဓာတုဗေဒဆေးစပ်ပြီးသား ရွှံ့အပြားကြီးတွေကို စက်နဲ့ အရည်ဖျော်ရပါတယ်။ အရည်ဖျော်ထားတဲ့ ရွှံ့ရည်တွေကို ပိုက်နဲ့သွယ်ပြီး မိုလို့ခေါ်တဲ့ ပုံစံခွက်ထဲကို လောင်းထည့်ရပါတယ်။ အရုပ်တရုပ်အတွက် ပုံစံခွက်နှစ်ခြမ်းလောင်းရပါတယ်။ အဲဒီလိုလောင်းပြီးသား နှစ်ခြမ်းကို ပြန်ဆက်ရပါတယ်။ ပိုနေတဲ့ အစတွေကို လှီးထုတ်ရပါတယ်။ ရေဆေးရပါတယ်။ အလုပ်သမားတွေကတော့ ရေချိုးတယ်လို့ ခေါ်ပါတယ်။ ပြီးရင် မီးအကြမ်းဖုတ်ရပါတယ်။ မီးဖုတ်တဲ့နေရာမှာ ဂက်စ်ကို အသုံးပြုပါတယ်။ မီးဖိုပေါ်မှာ စင်တွေနဲ့ ဖုတ်ရပါတယ်။ အကြမ်းမီးဖုတ်ပြီးသားတွေကို အချောပြန်ဆေးရပါသေးတယ်။ ပြီးရင် ဖိုကြီးနဲ့ ပြန်ဖုတ်ရပါတယ်။ ဖိုကြီးဆိုတာက အရုပ်တွေအများကြီး ထည့်ဖုတ်နိုင်တဲ့ မီးဖိုကြီးပါ။ ဖိုကြီးနဲ့ ဖုတ်ပြီးသားတွေကို ကြွေရည်စိမ်၊ ဆေးခြယ်၊ စတစ်ကာကပ်ရပါတယ်။ ပြီးရင် မီးပြန်ဖုတ်ရပါသေးတယ်။ မီးဖုတ်ပြီးသားတွေကို QC (Quality Control) စစ်ပြီးရင် နောက်ဆုံးအဆင့် ပါကင်ထုပ်ရပါတယ်။
အဲဒီလိုလုပ်ငန်းတွေ အဆင့်ဆင့်ရှိသလို အလုပ်သမားတွေရဲ့ လုပ်အားခတွေကလည်း မတူကြပါဘူး။ အားလုံးကတော့ နေ့စားအလုပ်သမားတွေပဲ ဖြစ်ကြပါတယ်။ မီးဖုတ်တဲ့နေရာက အလုပ်သမားတွေကို တနေ့ ဘတ် (၈၀)၊ (၉၀) အထိ ပေးထားပေမယ့် ကျန်တဲ့နေရာတွေက အလုပ်သမားအများစုကတော့ တနေ့ကို ဘတ် (၅၀)၊ (၆၀) လောက်ပဲရကြပါတယ်။ မီးဖုတ်သမားတွေက သူများတွေထက် ပိုရကြပေမယ့် အလုပ်မှာ တာဝန်ခံရပါတယ်။ ပျက်ရင် လျော်ပေးရပါတယ်။ သူ့နေရာနဲ့သူ အလုပ်သမားတွေကို အုပ်ချုပ်ရတဲ့ ၀ဏ္ဏတွေရှိကြပါတယ်။ ၀ဏ္ဏတွေကိုတော့ တနေ့ဘတ် (၁၀၀) ပေးထားပါတယ်။
အလုပ်ချိန်ကတော့ တနေ့ကို (၈) နာရီ အလုပ်လုပ်ရပါတယ်။ မနက် (၈) နာရီကနေ နေ့လယ် (၁၂) နာရီ၊ နေ့လယ် (၁) နာရီ ကနေ ညနေ (၅) နာရီထိ။ အဲဒီ (၈) နာရီထက်ကျော်သွားရင် အချိန်ပိုကြေး တနာရီကို (၇) ဘတ်နှုန်း ပေးထားပါတယ်။ ရွှံ့ဖျော်ရတဲ့ အလုပ်သမားတွေနဲ့ မီးထိုးအလုပ်သမားတွေ အလုပ်ချိန်မမှန်ကြပါဘူး။ အလုပ်အရေးကြီးရင် ကြီးသလို မနက် (၆) နာရီကနေ အလုပ်စ၀င်ရတာရှိသလို ညနေ (၃) နာရီတို့ ည (၁၂) နာရီတို့ အချိန်မတော် အလုပ်ဆင်းရတာတွေလည်း ရှိပါတယ်။ အလုပ်သမားအားလုံးလိုလိုကတော့ အလုပ်အရေးကြီးရင် နေ့ရော ညပါဆင်းရပြီး အလုပ်ချိန် (၈) နာရီထက်ကျော်ရင်တော့ ပိုသွားတဲ့ နာရီတွေကို အချိန်ပိုကြေး တနာရီ (၇) ဘတ်နှုန်းနဲ့ ရကြကြောင်း သိရပါတယ်။
၂၀၀၂ ခုနှစ်က အလုပ်စ၀င်ခဲ့တဲ့ အလုပ်သမတယောက်ကတော့ သူ အလုပ်စ၀င်တုန်းက တနေ့ကို (၄၅) ဘတ်ရကြောင်း၊ (၃) လလောက်လုပ်ပြီးတဲ့အခါမှာ (၅) ဘတ်တိုးပေးကြောင်း၊ ၂၀၀၆ ခုနှစ် စက်ရုံပြဿနာတက်တဲ့အချိန်မှာ (၆၃) ဘတ်သာ ရရှိကြောင်း ပြောပါတယ်။
အလုပ်သမားတွေ နေဖို့ စက်ရုံက လိုင်းခန်းတွေ ထားပေးထားပါတယ်။ လိုင်းခန်းခ မပေးရပေမယ့် ရေဖိုး၊ မီးဖိုး ဖြတ်ပါတယ်။ တလကို ရေဖိုး၊ မီးဖိုး (၁၀၀) ကျော်လောက် ပေးရပါတယ်။ တချို့မိသားစုတွေမှာ ညီအစ်ကိုမောင်နှမတွေ၊ သားသမီး၊ မိဘတွေ လာနေတာမျိုး ရှိပါတယ်။ အဲဒီလို စက်ရုံဝန်ထမ်းမဟုတ်တဲ့ မိသားစုဝင်တွေ လာနေတယ်ဆိုရင် အဲဒီအတွက် တယောက်ကို အိမ်လခအဖြစ် ဘတ် (၂၀၀) ပေးရပါတယ်။
အဲဒီလို အလွန်နည်းတဲ့ လုပ်အားခတွေနဲ့ အလုပ်လုပ်လာခဲ့ကြရာက ၂၀၀၆ ခုနှစ်မှာ အလုပ်ရှင်-အလုပ်သမားပြဿနာ ဖြစ်ပါတယ်။ စဖြစ်ပုံကတော့ စက်ရုံက အလုပ်သမားတဦးဖြစ်တဲ့ ကိုထွန်းအောင်ဆိုသူကို အလုပ်ချိန် (၈) နာရီကျော်လို့ အလုပ်နားနေတဲ့အချိန်မှာ အလုပ်ခေါ်ခိုင်းပါတယ်။ ကိုထွန်းအောင်ကလည်း သူ အရမ်းပင်ပန်းနေပြီဖြစ်လို့ မဆင်းနိုင်တော့တဲ့ အကြောင်း၊ အနားယူချင်တဲ့အကြောင်း ပြောရာက အလုပ်ရှင်နဲ့ အဆင်မပြေဖြစ်ပြီး အလုပ်ထုတ်လိုက်ပါတယ်။
အဲဒီနောက်နေ့မှာတော့ နဂိုကတည်းကမှ လုပ်အားခနည်းလို့ မကျေမနပ်ဖြစ်နေကြတဲ့ အလုပ်သမားတွေဟာ လုပ်အားခ တိုးတောင်းကြပါတော့တယ်။ သူတို့တောင်းတဲ့ လုပ်အားခတွေကလည်း ထိုင်းနိုင်ငံမှာ တရားဝင်ပြဋ္ဌာန်းထားတဲ့ ရပိုင်ခွင့်တွေအတိုင်း တောင်းဆိုကြတာမဟုတ်ပါဘူး။ လုပ်အားခတိုးပေးဖို့၊ ဘယ်လောက်ပဲဖြစ်ဖြစ် တိုးပေးဖို့၊ ကုန်ဈေးနှုန်းတွေ တက်လာတာနဲ့အမျှ စားဝတ်နေရေး အဆင်မပြေကြလို့ တိုးတောင်းကြတာပါ။
အလုပ်သမားတယောက်ရဲ့ ပြောပြချက်အရဆိုရင် “အဲဒီအချိန်မှာ သူဌေးက (၁၀) ဘတ်လောက် တိုးပေးလိုက်ရင်တောင် ကျနော်တို့ကျေနပ်ပါတယ်” လို့ ပြောပါတယ်။ အခုတော့ သူဌေးက လုပ်အားခလည်း တိုးမပေးနိုင်ဘူး၊ တိုင်ချင်တဲ့နေရာ သွားတိုင်လို့ ပြောလွှတ်လိုက်ပါတယ်။
အလုပ်သမားတွေလည်း မကျေနပ်တဲ့အတွက် ဆ၀ါဒီကန်ရုံးမှာ သွားတိုင်ကြပါတယ်။ အားလုံး (၅၂) ယောက်ပါ။ ဆ၀ါဒီကန်ရုံးက အလုပ်ရှင်သူဌေးနဲ့ ခေါ်ပြီး ညှိနှိုင်းပေးလိုက်ပါတယ်။ အလုပ်သမားတယောက်ကို တနေ့ အဲဒီအချိန်က တာ့ခရိုင် မဲဆောက်မြို့ အလုပ်သမားတယောက်ရဲ့ ရပိုင်ခွင့်ဖြစ်တဲ့ (၁၄၃) ဘတ် ပေးရန်၊ အချိန်ပိုဆင်းရပါက တနာရီကို (၂၅) ဘတ်နှုန်းနဲ့ ရှင်းပေးရန် ဆုံးဖြတ်ပေးလိုက်ပါတယ်။ သူဌေးရော အလုပ်သမားတွေပါ စာချုပ်မှာ လက်မှတ်ထိုးရပါတယ်။ အလုပ်သမားဥပဒေအရ သူဌေးက အလုပ်မပေးနိုင်ရင်လည်း လုပ်အားခရဲ့တ၀က် ရရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်။ တနင်္ဂနွေဆို လုပ်အားခရဲ့နှစ်ဆ အလုပ်ရှင်က ပေးရမှာပါ။ အလုပ်သမားတွေလည်း ဆ၀ါဒီကန်ရဲ့ အဆုံးအဖြတ်ကို လက်ခံပြီး ပြန်လာခဲ့ကြပါတယ်။
စက်ရုံတော်တော်များများ (အားလုံးလိုလို) ရဲ့အတွေ့အကြုံအရ အဲဒီလိုပြဿနာဖြစ်ပြီး အလုပ်သမားရဲ့ လုပ်အားခ အပြည့်အ၀ ပေးရပြီဆိုရင် လုပ်ငန်းရှင်တွေဘက်က နည်းလမ်းပေါင်းစုံနဲ့ ညစ်ပတ်တော့တာပါပဲ။ အခုလည်း ဒီပန်းကန်လုံး စက်ရုံအလုပ်သမားတွေကို ဆ၀ါဒီကန်က လုပ်အားခ အပြည့်အ၀ပေးဖို့ ဆုံးဖြတ်ပေမယ့် အပြည့်အ၀တော့ ပေးပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သူဌေးက ညစ်ပတ်လာပါတယ်။ အချိန်မတော် အလုပ်ဆင်းခိုင်းတယ်။ ဥပမာ- ညဘက်အချိန်မတော်မှာ အလုပ်သမားအားလုံး ဆင်းရတာမဟုတ်ဘဲ မိန်းကလေးတွေချည်း ဆင်းခိုင်းတယ်၊ တယောက်နှစ်ယောက်ပဲ ဆင်းခိုင်းတယ်။ စက်ရုံထဲကို အလုပ်ဆင်းရတာကလည်း အခါတိုင်းဆို အလုပ်သမားတွေနေတဲ့ တန်းလျားနဲ့ စက်ရုံကပ်နေတဲ့ အပေါက်ကနေ ၀င်လို့ရတယ်။ အခုတော့ စက်ရုံဝင်ပေါက်ကြီးကနေ ပတ်ပြီး ၀င်ခိုင်းတယ်။ ၀င်ပေါက်ကြီးကို ရောက်ဖို့အတွက် အဝေးပြေးလမ်းမကြီးကနေ ပတ်သွားရပါတယ်။
ညဘက်ဆို အန္တရာယ်ရှိပါတယ်။ တခါတလေ ရဲတွေ လိုက်လို့ ပြေးရတယ်။ နောက်ဆုံးတော့ အလုပ်သမားတွေနေတဲ့ တန်းလျားကိုပါ ရဲတွေ၊ တောမောလို့ခေါ်တဲ့ လ၀ကတွေနဲ့ စစ်တပ်တွေ ၀ိုင်းပြီး အလုပ်သမားတွေကို အလုပ်ကောင်းကောင်း လုပ်ကြ၊ ဘာညာနဲ့ အမျိုးမျိုး ခြိမ်းခြောက်သွားတာတွေရှိတဲ့အတွက် အလုပ်သမားတွေ ကြောက်လာကြပါတယ်။ ညဘက် အလုပ်မဆင်းဖို့ သူဌေးဆီမှာ တောင်းဆိုတော့လည်း သူဌေးက မလိုက်လျောနိုင်ဘူး။ ဆင်းချင်ဆင်း၊ မဆင်းချင်နေဆိုတာနဲ့ အလုပ်သမားတွေလည်း အလုပ်သမားရေး ကူညီဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့ ရောင်ခြည်ဦးအလုပ်သမားအဖွဲ့ရုံးမှာ သွားအကူအညီ တောင်းပြီး အမှုဖွင့်ရပါတော့တယ်။
တနေ့ကို (၁၄၃) ဘတ်နဲ့ ရက်ပေါင်း (၂၀) လောက်ပဲ အလုပ်ဆင်းလိုက်ရပါတယ်။ ရောင်ခြည်ဦးနဲ့ မက်ဖောင်ဒေးရှင်းရဲ့ အကူအညီနဲ့ပဲ ဆ၀ါဒီကန်ရုံးမှာ တိုင်ချက်ဖွင့်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ အသုတ်လိုက်ခွဲပြီး ဆ၀ါဒီကန်မှာ အလုပ်သမားရပိုင်ခွင့်တွေ ဖောင်ဖြည့်ကြရတယ်။ အဲဒီလို ဆ၀ါဒီကန်ရုံးမှာ ဖောင်ဖြည့်နေတုန်း အဖမ်းခံလိုက်ရတဲ့ အလုပ်သမားတယောက်အကြောင်းကို အတူတူလုပ်ခဲ့တဲ့ အလုပ်သမတဦးက အခုလိုပြောပြပါတယ်။
“အဲဒီအလုပ်သမားက ဘတ် (အလုပ်သမားလက်မှတ်) မရှိပါဘူး။ သူက ဆ၀ါဒီကန်ရုံးထဲမှာ သူများတွေလိုပဲ ဖောင်ဖြည့်ဖို့ သွားတာပါ။ အဲဒီအချိန်မှာ မော်တော်ပီကယ် (ယဉ်ထိန်းရဲ) ၀တ်စုံနဲ့ ရဲတယောက်က ၀င်လာပြီး မင်းကို ဖမ်းမှာ မကြောက်ဖူးလားလို့ မေးတယ်။ အဖမ်းခံရတဲ့သူကလည်း ခင်ဗျားက မော်တော်ပီကယ်ဖြစ်တဲ့အတွက် ကျနော့်ကို ဖမ်းမှာမဟုတ်လို့ မကြောက်ပါဘူးလို့ ပြန်ပြောတယ်။ အဲလိုပြန်ပြောပြီး ဖမ်းသွားတာပါပဲ။ နှစ်ထပ်ချုပ်ကို ရောက်သွားတယ်။ အဲဒီမှာ တညအိပ်ပြီး တောမောရုံးကို ပို့လိုက်တယ်။ တောမောရုံးကမှ ဟိုဘက်ကမ်းကို သွန်မှာလေ” လို့ ပြောပြပါတယ်။
တောမောရုံး (လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး) က ဖမ်းမိတဲ့ အလုပ်သမားတွေကို မြန်မာပြည်ဘက်ခြမ်းကို သွန်မယ့် သတင်းကြားတဲ့ အချိန်မှာ စက်ရုံက လူတွေကော အကူအညီပေးနေတဲ့ အဖွဲ့က လူတွေကော လိုက်ကြပါတယ်။ အဖမ်းခံရသူကိုလည်း သွန်မယ့် ကားပေါ်မှာ တွေ့ရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အဲဒီလူဟာ မြန်မာပြည်ဘက်ခြမ်းမှာလည်း စုံစမ်းလို့မရဘူး။ ဒီဘက်မှာလည်း မရှိတော့ပါဘူး။ နောက်ပိုင်းမှာမှ မြန်မာသတင်းစာနဲ့ ပြည်ပသတင်းဌာနတွေမှာ အဲဒီလူကို ဒီဘက်မှာရှိတဲ့ နိုင်ငံရေးအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ ဆက်သွယ်တယ်ဆိုပြီး ထောင်ချလိုက်တဲ့အကြောင်း ဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။
သူနဲ့အတူလုပ်ခဲ့တဲ့ သူ့သူငယ်ချင်းတယောက်ကတော့ “အဲဒီလိုဖြစ်ရတာ ကျနော်တို့သူဌေး ယုတ်မာလို့ပါ။ သူက အလုပ်သမား တယောက်ပါ။ ဘာနိုင်ငံရေးမှလည်း မသိဘူး။ ဘယ်သူနဲ့မှလည်း အဆက်အသွယ်မရှိပါဘူး။ ရိုးရိုးသားသား အလုပ်လုပ်စား နေတာပါ” လို့ ပြောပါတယ်။ ထိုင်းနိုင်ငံမှာ ရောက်နေတဲ့ အလုပ်သမားတွေဟာ မဲဆောက်ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ဘန်ကောက်ပဲဖြစ်ဖြစ် အဖမ်းခံရလို့ မြန်မာပြည်ဘက်ကို သွန်လိုက်တယ်ဆိုရင် နည်းအမျိုးမျိုးနဲ့ မဲဆောက်ဘက်ကို ပြန်ရောက်လာကြတာပါပဲ။
အဲဒီလို အလုပ်သမားတယောက် အဖမ်းခံလိုက်ရပေမယ့် ကျန်တဲ့သူတွေ အမှုဆက်တိုင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ဆ၀ါဒီကန်ကတဆင့် တရားရုံးအထိ ဆက်တက်ရပါတယ်။ အဲဒီကြားကာလတွေမှာ အမှုတိုင်ထားတဲ့ လူ (၅၀) ကျော်ရဲ့ဘ၀တွေကလည်း ကြမ်းတမ်းပါတယ်။ အရုပ်တွေကို ဆေးခြယ်တဲ့အလုပ် လုပ်ကြရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သူတို့အလုပ်လုပ်တဲ့ နေရာတိုင်းကို ရဲတွေက အမြဲတမ်း စောင့်ကြည့်တာ ခံရပါတယ်။ အဲဒီလိုနဲ့ အဲဒီဆေးခြယ်တဲ့ လုပ်ငန်းကိုပဲ နေရာတွေပြောင်းပြီး လုပ်လာခဲ့ကြတာ နောက်ဆုံးတော့ အားလုံးအဖမ်းခံလိုက်ရပါတယ်။ ထောင် (၁၂) ရက်စီ ကျသွားပါတယ်။ ထောင်ထဲမှာလည်း သူတို့အထဲက ခေါင်းဆောင်လို့ ယူဆသူတွေရဲ့ အမည်ကိုမေးကြောင်း၊ ဓာတ်ပုံတွေထုတ်ပြကြောင်း၊ ဓာတ်ပုံတွေက ကော်ပီကူးထားတာတွေဆိုတော့ သဲသဲကွဲကွဲ မမြင်ရလို့ တော်သေးကြောင်း၊ အခြားအဖမ်းခံရသူတွေနဲ့ ရောနေရကြောင်း ထောင်ကျခဲ့သူက ပြန်ပြောပြပါတယ်။
သူတို့ ထောင်ကလွတ်လာပြီး မဲဆောက်ရောက်မှ အကြောင်းစုံကို သိကြရတော့တယ်။ သူတို့ အလုပ်လုပ်ခဲ့တဲ့ ပန်းကန်လုံးစက်ရုံသူဌေးနဲ့ ဆေးခြယ်အလုပ်ပေးတဲ့ သူဌေးနဲ့ အဆက်အသွယ်ရှိကြောင်း၊ အဲဒါကြောင့် အမျိုးမျိုး လိုက်နှောင့်ယှက်နေတာဖြစ်ကြောင်း သိရတယ်။
၂၀၀၉ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလမှာတော့ ရောင်ခြည်ဦးနဲ့ မက်ဖောင်ဒေးရှင်းတို့ရဲ့ အကူအညီနဲ့ အထက်ပါ ပန်းကန်လုံးစက်ရုံ အလုပ်သမား (၅၀) ကျော်ဟာ နစ်နာကြေး (လျော်ကြေး) ရရှိခဲ့ကြပါတယ်။ စက်ရုံမှာ (၅) နှစ်လောက် အလုပ်လုပ်ခဲ့တဲ့ အလုပ်သမတဦးကတော့ “ကျမတို့ရတဲ့ လျော်ကြေးက (၅) ရာခိုင်နှုန်းလို့ ပြောပါတယ်။ ကျမက ဘတ် (၈,၀၀၀) လောက် ရပါတယ်။ ရှေ့နေခ တယောက်ကို ဘတ် (၅၀၀) စီ ပေးရပါတယ်။ အဲဒါကလည်း အရင်ကတည်းက ပြောထားတာပါ။ ပေးပါတယ်။ ကျမတို့ အခုလို သူဌေးကို အမှုနိုင်တယ်ဆိုရင်ပဲ ကျေနပ်ပါတယ်” လို့ ပြောပါတယ်။
(၅) ရာခိုင်နှုန်းဆိုတာကတော့ အလုပ်သမားတယောက်က အလုပ်ရှင်ထံမှာ အလုပ်သမားဥပဒေအရ ရစရာရှိတဲ့ နစ်နာကြေးငွေဟာ ဘတ် (၁၀၀) ဆိုရင် (၅) ဘတ်ပဲ ရတာဖြစ်ပါတယ်။ ပန်းကန်လုံးစက်ရုံဆိုတာ မဲဆောက်မှာ များများစားစား မရှိတဲ့အတွက် သိုးမွေးတို့ အထည်ချုပ်တို့က အလုပ်သမားတွေလို အလုပ်ပြန်ရှာရတာ မလွယ်ပါဘူး။ အဲဒီတော့ အခုအချိန်မှာ ပန်းကန်လုံးစက်ရုံက အလုပ်သမားတွေဟာ အလုပ်သမားတိုက်ပွဲမှာ (၅) ရာခိုင်နှုန်း ရခဲ့ကြပေမယ့် ဘ၀တိုက်ပွဲတွေကိုတော့ ဈေးရောင်းတဲ့သူ ရောင်း၊ မြန်မာပြည်ပြန်တဲ့သူ ပြန်၊ တချို့လည်း စက်ချုပ်သင်ပြီး အထည်ချုပ်စက်ရုံဝင်လုပ်၊ သိုးမွေးစက်ဆွဲ သင်ပြီး သိုးမွေးစက်ရုံဝင်လုပ်ကြရင်း ဆက်လက်ဆင်နွှဲနေကြရပါတယ်။ ။
မောင်တောမြို့တွင်း နစကများ သေနတ်ပစ်ခတ် သဖြင့် မြို့နေလူထု စိုးရိမ်မူပိုခဲ့ရ
ရခိုင်ပြည်နယ် မောင်တောမြို့တွင်းတွင် နစက တပ်ဖွဲ့ တဖွဲ့မှ ညအချိန်မတော် သေနတ် ပစ်ခတ်မူကြောင့် မြို့တခုလုံး ရုတ်ရုတ်သဲသဲ ဖြစ်သွားကာ မြို့နေလူထုအတွင်း စိုးရိမ်မူပိုခဲ့ရသည်ဟု သတင်း ရရှိသည်။
မောင်တောမြို့ထဲမှ အမျိုးသမီး တဦးက “ မနေ့ ညဉ့် ၉ နာရီ ခွဲခန့်မှာ သေနတ်သံက လေးချက်တိတိ ထွက်လာတယ်ဆိုတော့ တမြို့လုံး ဆူညံသွားပြီး မြို့နေလူထု အတွင်း ရုတ်ရုတ်သဲသဲ ဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်။ ဘာကြောင့် ခုလို ပစ်ခတ်တယ်ဆိ်ုတာကို အစပိုင်းမှာ မသိတဲ့အတွက် လူတွေသေနတ်သံကြားတာနဲ့ အထူးကို ထိတ်လန့်သွားခဲ့ကြပါတယ်” ဟု ပြောသည်။
အဆိုပါ ပစ်ခတ်မူကို မောင်တောမြို့ ရွှေဇားတံတားတွင် ကင်းကျနေသည့် တပ်ဖွဲ့ တဖွဲ့မှ အနီးအနားရှိ မူဆလင် ကျေးရွာသားများနှင့် ပြဿနာ ဖြစ်ပွားစဉ် လူများက တုတ်ဓါးများ ဖြင့် တိုက်ခိုက်ရန် ၀ိုင်းအုံလာသဖြင့် သေနတ်ပစ်ဖေါက်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်ဟု အောင်ဗလ ကျေးရွာသား တဦးက ယခုကဲ့သို့ ပြောသည်။
“ကျွန်တော်တို့ ကြားသိရသလောက်ဆိုရင် ရွှေဇားတံတားမှာ ကင်းတာဝန်ယူထားတဲ့ နစက တပ်သား ၆ ဦးထဲက ၄ ဦးဟာ အဲဒီ တံတားနားမှာ ရှိတဲ့ ဦးဘိုင်ဂျာဆိုင်ကို ကွမ်းယာနဲ့ ဆေးလိပ် ၀ယ်ဖို့ သွားကြတယ်။ အဲသလို သွားတဲ့ အချိန်မှာ ဘူကာနီလို့ ခေါ်တဲ့ မကောင်းမူ လုပ်ငန်းတွေနဲ့ အသက်မွေး ၀မ်းကျောင်းလုပ်တဲ့ အမျိုးသမီး တဦးကလည်း ဈေးဆိုင်မှာ ဈေးလာဝယ်တော့ နစကတွေက အဲဒီ အမျိုးသမီးကို အတင်း ဆွဲလား ငင်လားလုပ်တော့ ဦးဘိုင်ဂျာက ၀င်တားတယ်။ အဲသလို ၀င်တားတဲ့ ဦးဘိုင်ဂျာကို နစကတွေက ရိုက်တယ်။ အဲသလို ရိုက်တဲ့အခါ ရွာသားတွေက မခံရပ်နိုင်တာကြောင့် တုတ်တွေ ဓါးတွေကို ဆွဲပီး နစကတွေကို ရိုက်ဖို့ ၀ိုင်းလိုက်လာတဲ့ အခါ နစကတွေက မိုးပေါ်ထောင်ပြီး သေနတ် လေးချက်တိတိ ပစ်ခတ်လိုက်ရပါတယ်။ အဲသလို ပစ်ခတ်သံကြောင့် မြို့အတွင်းမှာ ရုတ်ရုတ်သဲသဲ ဖြစ်သွားခဲ့ရတာ ဖြစ်ပါတယ်။”
နစကများ သေနတ် ပစ်ခတ်မူကြောင့် မူဆလင် လူအုပ်မှာ ပြိုကွဲသွားပြီး ဦးဘိုင်ဂျာကို နစက တပ်ဖွဲ့မှ ဖမ်းဆီး ခေါ်ဆောင်သွားသည်ဟု သူက ဆက်ပြောသည်။
“အဲဒီ အဖိုးကြီးက အသက် ၆၀ နီးပါးရှိနေပါပြီ။ အခုသူ့ကို သေနတ်လုဖို့ကြိုးစားတယ်ဆိုပြီး နစကတပ်သားတွေက ဖမ်းဆီးသွားပါတယ်။ အမှုဖွင့်ပြီး တရားစွဲမလား ပြန်လွှတ်လိုက်ပီ လားဆိုတာကိုတော့ သတင်း မရသေးပါဘူး။”
ရွာသားများ၏ အဆိုအရ နစကများ ဆွဲငင်ခဲ့ကြသည့် အမျိုးသမီး ဘူကာနီ အသက် (၃၀) ကိုလည်း ဖမ်းဆီးရန် နစကမှ လိုက်ရှာနေသည်ဟု သိရသည်။
မရှိ၍ ရှိသူ….၊ ရှိ၍ မရှိသူ
ဆရာဇော်ဂျီ၏ ပုဂံဈေးဝတ္ထုတိုမှ … တရုတ်သံတမန်၏ အမေးပုစ္ဆာကိုပင်… ဆောင်းပါး၏ ခေါင်းစဉ်အဖြစ် ယူသုံးလိုက်၏။
ဆရာဇော်ဂျီ၏ ပုဂံဈေးဝတ္ထုတိုတွင် တရုတ်သံတမန်တို့ ပုဂံသို့ ရောက်၏။ ပုဂံနေပြည်တော်သို့ ဝင်ရောက်၍ ပုဂံပြည့်ရှင်အား ခစား၏။ ခစားရင်း… တရုတ်သံတမန်တို့က … အမေးပုစ္ဆာ ၂ ရပ်အား ပုဂံပြည့်ရှင်ထံ တင်လျှောက်ကြ၏။
တရုတ်သံတမန်များ တင်လျှောက်သည့် အမေးပုစ္ဆာ ၂ ရပ်က … “မရှိ၍ ရှိသူ” နှင့် “ရှိ၍ မရှိသူ” ဟူ၍ ဖြစ်သည်။
တရုတ်သံတမန်တို့၏ အမေးပုစ္ဆာအား ပုဂံသားသုခမိန်က … ပန်းချီကားချပ်များနှင့် ထိုးဇာတ်ခင်း၍ အဖြေပေးလိုက်၏။
“မရှိ၍ ရှိသူ…” ပန်းချီကားချပ်ရှိရာ တင်းတိမ်အား ဖွင့်၍ကြည့်လိုက်ပါက… ပန်းချီကားချပ်များအား တွေ့ရ၏။
ဆင်းရဲသားအသွင်ရှိသော လူယောက်ျား ၃ ဦး။
တယောက်လက်တွင် ကညစ်နှင့် ပေရွက်ကို ကိုင်ထားပြီး၊ လေးနက်စွာ စဉ်းစားနေသည်။ သူ့နောက်တွင် ဆွတ်စားမကုန်သော ပဒေသာပင်အောက်၌ လူတွေ ပျော်ရွှင်စွာ နေကြသည်။
တယောက်က ရဲရင့်၍ အံကြိတ်နေသည်။ သူ့နောက်တွင် ပြောင်လက်သူတို့က စုတ်နုပ်သူတို့ကို နွားကဲ့သို့ လှည်းတပ်မောင်းနေသည်။
တယောက်က မျက်လွှာချထားသည်။ သူ့နောက်တွင် စေတီတဆူ။ သစ်သီးဝလံပင် စိုက်ပျိုးနေကြသူများ။
“ရှိ၍ မရှိသူ” ပန်းချီကားချပ်ရှိရာ တင်းတိမ်အတွင်း၌ကား …
လှပသော တိုက်ခန်းရှေ့ရှိ ယောက်ျားကြီးကို မိန်းမ ၁ဝ ယောက် ဝိုင်းပြီး ပြုစုနေကြသည်။ သူ့ရှေ့တွင် စားကောင်းသောက်ဖွယ် ပွဲရံကြီး တည်ခင်းထားသည်။ သို့ရာတွင် ထိုယောက်ျား၏ မျက်နှာပေါ်တွင် လောဘအမူအယာ ရှိနေဆဲ…။”
၂ဝ၁ဝ ခုနှစ် မတ်လ ၈ ရက်နေ့တွင် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေ လက်မှတ်ထိုး၍ ထုတ်ပြန်ခဲ့သည့် နိုင်ငံရေးပါတီများ မှတ်ပုံတင်ခြင်းဆိုင်ရာ ဥပဒေအား အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်၏ ဗဟိုဦးစီးအဖွဲ့က တရားမျှတမှု ကင်းမဲ့သည့် ဥပဒေတရပ်ဟု သတ်မှတ်ပြီး … ဥပဒေအား အသိအမှတ်မပြု…၊ လက်မခံ…။ ဤအတွက် ဥပဒေတွင် ပါရှိပြဋ္ဌာန်းထားသည့်အတိုင်း ရက်ပေါင်း ၆ဝ အတွင်း နိုင်ငံရေးပါတီအဖြစ် စစ်အုပ်စု၏ ဆွဲခန့်ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်တွင် မှတ်ပုံတင်မည်မဟုတ်ဟူ၍ ၂ဝ၁ဝ ခုနှစ် မတ်လ ၂၉ ရက်နေ့တွင် ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြ၏။
ဤတွင် အမေးပုစ္ဆာက ရှိလာ၏။ ရက်ပေါင်း ၆ဝ လွန်သော်… အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်၏ တည်ရှိမှုက … မည်သို့ရှိမည်နည်း…။ စစ်အုပ်စု၏ တုံ့ပြန်မှုက မည်သို့ရှိလာမည်နည်း…။ စိတ်ဝင်စားစရာပင်….။
တရားအရမူ…. စစ်အုပ်စုမှ ထုတ်ပြန်လိုက်သည့် “နိုင်ငံရေးပါတီများ မှတ်ပုံတင်ခြင်းဥပဒေ” ဟူသည်ကပင် တရားမျှတမှုမရှိ…။ ဥပဒေသဘောအရ ကြောင်းကျိုးညီညွှတ်မှု ကင်းမဲ့၍နေသည်။ လွတ်လပ်မှု ဆိတ်သုဉ်းနေပြီး တဖက်သတ် ရေးဆွဲပြဋ္ဌာန်းထားသည့် ဥပဒေဖြစ်၏။
ထို့ကြောင့်ပင်… အဖွဲ့ချုပ်မှ ထိုဥပဒေနှင့်အညီ မှတ်ပုံမတင်ခြင်းဖြစ်၏။ သို့ဖြစ်၍ … ထိုသို့သော ဥပဒေနှင့်အညီ မှတ်ပုံတင်ခြင်းသည်လည်း တရားဝင်မှုအား မသက်ရောက်သကဲ့သို့ …. မှတ်ပုံမတင်ခြင်းသည်လည်း တရားမဝင်… ဟူ၍ မယူဆနိုင်…။ မူလအခြေခံဥပဒေ ‘စံ’ ကပင် ပျက်ယွင်းနေသည်ဖြစ်၍ … မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ မတင်ခြင်းက …. တရားဝင်ခြင်း၊ မဝင်ခြင်းအား တိုင်းတာ၍မရ…။ ပြဋ္ဌာန်း၍မရ…။ ဤသို့ … တရားအရ သတ်မှတ်၍ရ၏။ ထားတော့…။
စစ်အုပ်စုသည် ၂၂ နှစ်အတွင်း တရားမျှတမှု…။ ဥပဒေနှင့် ညီညွှတ်မှု… ဟူသည့် စံတန်ဖိုးများနှင့် လုပ်ဆောင်ခဲ့သည့် လူဆောင်ချက်များ ဟူသည်က … မရှိသလောက်ပင်…။ ဤအတွက် … စစ်အုပ်စုက တရားမျှတမှု ကင်းမဲ့သည့် “နိုင်ငံရေးပါတီများ မှတ်ပုံတင်ခြင်းဥပဒေ” ကိုပင် စံပေတံအဖြစ် ဆုပ်ကိုင်ပြီး ဆံတုတ်တိုက်ပေလိမ့်မည်။ လက်တွေ့အရ… စစ်အုပ်စုသည် ဤသို့ပင် လုပ်ဆောင်လိမ့်မည်ဖြစ်၏။
ရက် ၆ဝ လွန်သော်… စစ်အုပ်စုသည် အဖွဲ့ချုပ်၏ ရုံးခန်းများအား ပိတ်မည်။ အဖွဲ့ချုပ်၏ အလံ၊ ဆိုင်းဘုတ်၊ တံဆိပ်နှင့် အမှတ်အသားများအား သိမ်းမည်။ အဖွဲ့ချုပ်၏ စာရွက်စာတမ်းနှင့် ဖိုင်တွဲများအား သိမ်းမည်။ ထိုသို့ ပြုလုပ်လာလိမ့်မည်ဟု ယူဆရ၏။ သို့သော် ပြဿနာမရှိ…။ ထိုသို့သော စစ်အုပ်စု၏ ပြုကျင့်ဆောင်ရွက်မှုများအား အဖွဲ့ချုပ်သည် တရားဝင်တည်ရှိပါသည်ဟူသည့် ၂၂ နှစ်တာ ကာလအတွင်း၌လည်း အကြိမ်ကြိမ် ကြုံတွေ့ခဲ့ရဖူးပြီးဖြစ်၏။
‘ဤနေရာတွင် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ရုံးမရှိတော့ပါ’ ဟူ၍ ဆိုင်းဘုတ်ထောင်ပြီး ရွှေဂုံတိုင်ရုံးအား ချိတ်ပိတ်ခဲ့သည့် အဖြစ်မျိုးကိုလည်း အဖွဲ့ချုပ်သည် ကြုံခဲ့ဖူးလေပြီ။ မဆန်း….။ အမှတ် ၉၇/ခ ရွှေဂုံတိုင်တွင် မစုဝေးနိုင်လျှင် … အမှတ် ၅၄ တက္ကသိုလ်ရိပ်သာလမ်းရှိ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ နေအိမ်တွင် တွေ့ဆုံ၍ရမည်။ အမှတ် ၅၄ တက္ကသိုလ်ရိပ်သာလမ်း၌ မတွေ့ဆုံနိုင်လျှင် …. ဦးအောင်ရွှေ၊ ဦးတင်ဦးတို့၏ နေအိမ်များတွင် တွေ့နိုင်ကြမည်။ အဆုံး၌…. ရွှေတိဂုံစေတီ၏ ရင်ပြင်ပေါ်၌လည်း တွေ့ဆုံ၍ရ၏။ ဆွေးနွေး၍ရ၏။ ပြဿနာမရှိ….။ အဖွဲ့ချုပ် အဖွဲ့ဝင်များအားလုံး၏ နေအိမ်အဆောက်အအုံတိုင်းက… အဖွဲ့ချုပ်၏ ရုံးများဖြစ်၏။ ဒီမိုကရေစီလိုလားသည့် ပြည်သူတိုင်း၏ နေအိမ်အဆောက်အဦးများ အားလုံးက… အဖွဲ့ချုပ်၏ ရုံးများဖြစ်၏။ ထိုနေအိမ်များတွင် တွေ့ဆုံကြမည်။ ဆွေးနွေးကြမည်။ ဆုံးဖြတ်ကြမည်။
အဖွဲ့ချုပ်က ပြည်သူလူထု၏ ရင်ခွင်အတွင်းသို့ ရောက်ရှိသွားခြင်းဖြစ်၏။
ဤအတွက် …. ရက် ၆ဝ လွန်၍ စစ်အုပ်စုက အဖွဲ့ချုပ်၏ ရုံးများအား အဓမ္မပိတ်ပစ်လာခဲ့လျှင်လည်း …. ပြဿနာမရှိ….။
ဒုတိယက …. ခေါင်းဆောင်မှုဖြစ်သည်။
အဖွဲ့ချုပ်အဖွဲ့ဝင်များ အားလုံးက ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ ခေါင်းဆောင်မှုအောက်၌ တညီတညွတ်တည်း ရှိနေကြ၏ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ အဆုံးအဖြတ် လမ်းညွှန်ချက်အား တသွေးမတိမ်း လက်ခံကြ၏။ အဖွဲ့ဝင်များ အားလုံးက ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ ဦးဆောင်မှုအား မျက်လုံးအိမ်သဖွယ် စောင့်ထိန်း၍ ထားကြ၏။ အဖွဲ့ချုပ်အတွင်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ ခေါင်းဆောင်မှုဟူသည်က …. စာရွက်ပေါ်တွင် ရေးထားသည့် အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးဟူသည့် ခေါင်းဆောင်မှုမျိုးမဟုတ်…။ အဖွဲ့ဝင်ထု၏ နှလုံးသွေးကြောအတွင်း စီးမျော၍ ဦးဆောင်မှု အခန်းကဏ္ဍတွင် တည်ရှိနေသည့် ခေါင်းဆောင်မှုမျိုးဖြစ်၏။ ဤအတွက် …. အဖွဲ့ချုပ်အတွင်း ခေါင်းဆောင်မှု ပြဿနာဟူ၍ ရှိမလာနိုင်….။
တတိယက … မူဝါဒလမ်းစဉ်ဖြစ်၏။
အဖွဲ့ချုပ်တွင် ခိုင်ခံ့သည့် မူဝါဒသဘောထား ရှိ၏။ ၁၉၈၈ ခုနှစ်တွင် စတင်ဖွဲ့စည်းစဉ်ကတည်းက … မူဝါဒသဘောထားများအား ချမှတ်ခဲ့၏။
ပြီးလျှင် … အဖွဲ့ချုပ်အတွင်း … အကြောင်းအရာအလိုက်၊ ပြဿနာအဆစ်အပိုင်းအလိုက် ချမှတ်ထားသည့် မူဝါဒသဘောထားများ၊ လုပ်ငန်းလမ်းစဉ်များသည်လည်း အခိုင်အမာပင်ရှိ၏။
- တိုင်းရင်းသား လူမျိုးအရေးနှင့် ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စု တည်ဆောက်ရေး
- တွေ့ဆုံဆွေးနွေး အဖြေရှာရေး ….
- ရွှေဂုံတိုင်ကြေညာစာတမ်း …. စသဖြင့် အသေးစိတ် သဘောထားလမ်းညွှန်ချက်များ ရှိ၏။
ရက် ၆ဝ လွန်လျှင်လည်း ထိုမူဝါဒသဘောထား၊ လမ်းစဉ်များအတိုင်း မြဲမြဲခိုင်ခိုင် ဆုပ်ကိုင်၍ ချီတက်ရန်ပင်….။ စာရွက်ပေါ်တွင် ရေးထားသည့် မူဝါဒသဘောထား ကြေညာစာတမ်းများအား စစ်အုပ်စုက သိမ်းယူနိုင်သည်။ ဖျက်ဆီးပစ်၍ရသည်။
သို့သော် … အဖွဲ့ဝင်များ၏ နှလုံးအိမ်အတွင်း စွဲထင်နေသည့် အဖွဲ့ချုပ်၏ မူဝါဒသဘောထား၊ လမ်းစဉ်ကိုမူ သိမ်း၍မရ၊ ဖျက်၍မရ…။ ဤအတွက် …. အဖွဲ့ချုပ်တွင် မူဝါဒလမ်းစဉ် ပြဿနာအခက်အခဲဟူ၍ မရှိ…။
စတုတ္ထက … တပ်ပေါင်းစုဖြစ်သည်။
ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားပြုကော်မတီ CRPP ဟူသည်က … အမှန်စင်စစ်တွင် ဒီမိုကရေစီအရေး၊ တိုင်းရင်းသားအရေး တိုက်ပွဲ၏ တပ်ပေါင်းစုပင်ဖြစ်၏။ CRPP တွင် ပါဝင်ကြသည့် တိုင်းရင်းသား အင်အားစုများ အားလုံးကလည်း… အဖွဲ့ချုပ်၏ ရပ်တည်ချက်နှင့် တထပ်တည်းပင်…။ မှတ်ပုံမတင်ကြ ။ ရွေးကောက်ပွဲ မဝင်ကြ…။
CRPP က မဲဆန္ဒရှင် ပြည်သူလူထုကြီး၏ ၉ဝ.၁ဝ ရာခိုင်နှုန်းအား ကိုယ်စားပြုသည့် အဖွဲ့အစည်းဖြစ်သည်။ တပ်ပေါင်းစုကြီးလည်း ဖြစ်၏။
လူထုအား မျက်နှာမူပြီး၊ လူထုနှင့်အတူ နှလုံးရည်တိုက်ပွဲ ဆင်နွှဲမည့် အဖွဲ့အစည်းတရပ်အနေဖြင့် ….
- ခိုင်မာသည့် ခေါင်းဆောင်မှု ရှိရမည်။
- မှန်ကန်သည့် မူဝါဒသဘောထား လမ်းစဉ်ရှိရမည်။
- ညီညွှတ်သည့် ကျယ်ပြန့်သော တပ်ပေါင်းစု ရှိရမည်။
… စသည့် အင်္ဂါရပ်များနှင့် ပြည့်စုံရမည်ဖြစ်၏။ ထိုအင်္ဂါရပ်များနှင့် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်သည် ယခုလည်း ရှိ၏။ ရက် ၆ဝ လွန်လျှင်လည်း ရှိ၏။ ဤအတွက် …. မေ ၆ ရက်တွင် ပြဿနာဟူ၍ အဖွဲ့ချုပ်တွင်မရှိ…။
မျက်မှောက်အခြေအနေ၌ တရုတ်သံတမန်များ မြန်မာပြည်သို့ လာရောက်ပြီး … ဆရာဇော်ဂျီ၏ ပုဂံဈေးဝတ္ထုတိုထဲကအတိုင်း …. “ရှိ၍ မရှိသူနှင့် မရှိ၍ ရှိသူ” ဟူသည့် အမေးပုစ္ဆာအား ထုတ်ခဲ့လျှင် … မြန်မာပညာကျော်တို့ မည်သို့ဖြေကြမည်နည်း…။ မည်သည့်ရုပ်ပုံပန်းချီကားချပ်များအား ရေးဆွဲ၍ ထိုးဇာတ်ခင်း ပြကြမည်နည်း…။
နိုင်ငံရေးအရ ထိုးဇာတ်ခင်းပြရပါမူ …. ‘မရှိ၍ ရှိသူ’ တင်းတိမ်အား ဖွင့်၍ကြည့်မိလျှင်က … အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် ဒေါင်းအလံတလူလူအား တွေ့ရမည်ဟု မြင်မိ၏။
ယနေ့ မြန်မာ့ရေးရာ သတင်းများ April,30th,2010
( 50 )KIO meets junta officials; rejects BGF yet again
( 49 )မြစ်ဆုံဗုံးကိစ္စ ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များနှင့် ကေအိုင်အို မိသားစုဝင်အချို့ခေါ်ယူမေးမြန်းခံနေရ
( 48 )USDA Abolishes Township Committees in Arakan
( 47 )စစ်အစိုးရနှင့် ကေအိုင်အို အသွင်ကူးပြောင်းရေးအတွက် နားလည်မှုရ
( 46 )Burmese Premier Thein Sein Registers USDA for Polls
( 45 )နအဖကို NLDတရားစွဲ၊ တရားရုံးချုပ် လက်ခံ
( 44 )Nasaka Assault Causes Mounting Tension in Village
( 43 )ဒေါ်စု နေအိမ်ပြင်ခွင့် ရပြီ
( 42 )Bangladesh Yet to Contract for Gas Exploration in the Bay
( 41 )ထိုင်း-မြန်မာ နယ်စပ်တွင် စိတ်ကြွဆေး ၂ သိန်း ဖမ်းမိ
( 40 )အရပ်ဝတ်လဲ ဝန်ကြီးချုပ် ကြံ့ဖွံ့ပါတီ ဦးဆောင်
( 39 )PLA Deploys More Troops at Burma Border
( 38 )ပါတီမဖျက်ရေး တားဝရမ်းထုတ်ရန် အန်အယ်ဒီ တရားရုံးသို့ လျောက်ထား
( 37 )Supreme Court Processing NLD and Suu Kyi Lawsuits
( 36 )နှစ်ရှည် ထောင်ဒဏ်ကျ DVB သတင်းထောက် အယူခံ ပယ်ချခံရ
( 35 )Suu Kyi’s house plan approved
( 34 )NLD ခေါင်းဆောင်ပိုင်း အမြင်များ ကွဲပြားနေ
( 33 )Myanmar exposed 216 drug-related cases in March
( 32 )အင်တာနက်ဆိုင်များတွင် စစ်အစိုးရလူများ ထည့်သွင်းခိုင်း
( 31 )The politics of boycott
( 30 )၀န်ကြီးချုပ် ဦးသိန်းစိန် ဘိလပ်မြေစက်ရုံသစ် ဖွင့်လှစ်
( 29 )A chance to earn an income in Myanmar
( 28 )စစ်အစိုးရ၀န်ကြီးချုပ် ပါတီ မှတ်ပုံတင်
( 27 )Beggar children held in Malaysian camp
( 26 )တရုတ်လူမျိုးများ မဲထည့်နိုင်ရေး ဧည့်နိုင်ငံသားကတ် ထုတ်ပေးမည်
( 25 )Myanmar premier forming new election party
( 24 )စစ်ဖြစ်မည်ကို စိုးရိမ်၍ ရှမ်းပြည်ဒေသခံ ရာနှင့်ချီ ထွက်ပြေး
( 23 )Suu Kyi fights party dissolution
( 22 )အလုပ်သမားနေ့တွင် မြန်မာအလုပ်သမားများ နိုင်ငံရေး ဆွေးနွေးမည်
( 21 )Myanmar PM forms new party for election
( 20 )နာဂစ် ၂ နှစ်ပြည့်တော့မည့် အချိန် လှူဒါန်းသူ နည်းပါး
( 19 )ဒီကေဘီအေနှင့် နအဖတို့ အကြား စစ်ရေး ပြင်ဆင်မှုရှိနေ
( 18 )သင်္ကြန် ဗုံးပေါက်ကွဲမှုနှင့် ဆက်စပ်ပြီး မသင်္ကာမှုဖြင့် စစိဆေးမှုများ ရှိနေ
( 17 )Ceasefire between Burmese Army and ethnic rebels on brink of collapse
( 16 )ဘာသာရေး လွတ်လပ်ခွင့် ချိုးဖောက်ရာမှာ မြန်မာ ထိပ်ဆုံးက ပါဝင်
( 15 )Nay Phone Latt
( 14 )Troops kill3suspected Wa rebels
( 13 )တပ် အသွင်ကူးပြောင်းရေး ကိစ္စ နောက်ဆုံးနေ့ အခြေအနေ
( 12 )Myanmar's evil junta
( 11 )တာချီလိတ်မြို့တွင် ကုန်အ၀င် အထွက်မရှိ
( 10 )မနက်ဖြန်တွင် အန်အယ်လ်ဒီ အထူးအစည်းအဝေး ကျင်းပမည်
(9)Myanmar ceasefires onatripwire
( 8 )၀န်ကြီးချုပ် ဦးသိန်းစိန်နဲ့ ၀န်ကြီးများ ကြံ့ဖွံ့ပါတီဝင်ပြီး ရွေးကောက်ပွဲ ၀င်ကြမည်
(7)Myanmar's crushed opposition
(6)စစ်အစိုးရ တာဝန်မဲ့မှု NLD နဲ့ ဒေါ်စု တရားစွဲtarget="_blank"
(5)No obstacle to Rohingya repatriation
(4)တောင်အာရှ ထိပ်သီးညီလာခံ မြန်မာဝန်ကြီး လေ့လာသူအဖြစ် တက်ရောက်
(3)Myanmar aid barriers hinder cyclone recovery
(2)နာဂစ်ကူညီရေး စစ်အစိုးရ ပိတ်ဆို့နေဆဲ
( 1 )Myanmar's premier registers party to contest upcoming polls
DKBA နှင့် အစိုးရ ဆက်ဆံရေး တင်းမာ
သန်းထိုက်ဦး Thursday, April 29, 2010
စစ်အစိုးရနှင့် သူ၏ မဟာမိတ် အဖွဲ့ဖြစ်သော DKBA ခေါ် တိုးတက်သော ဗုဒ္ဓဘာသာ ကရင် အမျိုးသား တပ်မတော်သည် ယခုချိန်အထိ နယ်ခြားစောင့်တပ် အသွင် ပြောင်းရေး အစီအစဉ်အတွက် သဘောတူနိုင်ခြင်း မရှိသေးသဖြင့် နှစ်ဘက် တင်းမာနေကြသည်။
DKBA ကို ဦးဆောင်သူ မြိုင်ကြီးငူ ဆရာတော် ဦးသုဇနက နယ်ခြား စောင့်တပ် အစီအစဉ်ကို လက်မခံ သောကြောင့် DKBA တပ်ဖွဲ့ ၀င်များကို ၎င်းတို့၏ နေရာများ၌ ပြန်နေကြရန် မိန့်ကြား ထားကြောင်း DKBA နှင့် နီးစပ်သူ တဦးက ပြောသည်။
အောက်ခြေ တပ်မှူး တပ်သားများတွင် အယူအဆ အမျိုးမျိုး ဖြစ်နေသည်ဟု ဆိုသည်။
ကရင်ပြည်နယ် ဘုရားသုံးဆူ မြို့နယ်ရှိ DKBA အရာရှိ တဦးကမူ “ကရင် လူထု အပေါ်မှာ ကျောခိုင်း ပြီးတော့ ဘယ်တော့မှ သစ္စာ မဖောက်ဘူး၊ စောဘဦးကြီး မူအရ ကိုယ့်လက်နက်က ကိုယ့်လက် ထဲမှာပဲ ရှိရမယ်၊ ဒီမူကို ကိုင်ဆောင် ပြီးတော့ ရှေ့ဆက် တိုက်ပွဲ ၀င်သွားမယ်” ဟု ပြောသည်။
သို့သော်လည်း DKBA စစ်ဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ် ကျော်သန်းနှင့် ထင်ရှားသည့် ခေါင်းဆောင် တဦး ဖြစ်သည့် ဗိုလ်မှူးကြီး စောချစ်သူတို့က တပ်အသွင်ပြောင်းရေးကို လက်ခံကြောင်း အတည်မပြုနိုင်သော သတင်းများအရ သိရသည်။
DKBA သည် ၁၉၉၅ ခုနှစ်တွင် KNU မှ ခွဲထွက်ပြီးနောက် တဖြည်းဖြည်း အင်အား ကြီးမားလာသည့် လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့ ဖြစ်သည်။
ကရင်ပြည်နယ်ရှိ လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့များအနက် ဗိုလ်မှူးချုပ် ထိန်မောင် ဦးဆောင်သော KNU/ KNLA ငြိမ်းချမ်းရေး ကောင်စီ အမည်ရှိ အဖွဲ့ကလည်း နယ်ခြားစောင့်တပ် အစီအစဉ်ကို လက်မခံကြောင်း ထိုင်းမြန်မာ နယ်စပ်မှ လာသော သတင်းများအရ သိရသည်။
ငြိမ်းချမ်းရေး ယူထားသည့် ယခင် သူပုန်အဖွဲ့များ အားလုံး နယ်ခြားစောင့် တပ်ဖွဲ့များ အဖြစ် အသွင် ပြောင်းရန် စစ်အစိုးရက သတ်မှတ်ထားသည့် နောက်ဆုံးအချိန်မှာ ယမန်နေ့ကပင် ကုန်ဆုံးသွားပြီဖြစ်သည်။
အသွင်ပြောင်းခြင်း မပြုသည့်အဖွဲ့သည် စစ်ရေးအရ အရေးယူမှုနှင့် ကြုံတွေ့ရနိုင်သည်ဟု အကဲခတ်တချို့က ခန့်မှန်းကြသည်။
၁၉၈၉ ခုနှစ်မှ စတင်၍ အစိုးရနှင့် အပစ်အခတ် ရပ်ထားသော တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့ပေါင်း ၁၇ ဖွဲ့ ရှိသည်။
ရွေးကောက်ပွဲ ပြုလုပ်ရန် ပြင်ဆင်နေသည့် စစ်အစိုးရက နယ်ခြားစောင့်တပ်ဖွဲ့ အစီအစဉ်ကို ၂၀၀၉ ခုနှစ် ဧပြီလကတည်းက စတင်ခဲ့သည်။
ယခုအချိန်အထိ အသွင်ပြောင်းပြီးသည့် အဖွဲ့ ၃ ဖွဲ့ ရှိပြီ ဖြစ်သည်။
ဗုံးပေါက်ကွဲမှု ထပ်ဖြစ်နိုင်ဟု စစ်အစိုးရ သတိပေး
နရီလင်းလက် Thursday, April 29, 2010
ဗုံးပေါက်ကွဲမှုများ ထပ်မံဖြစ်ပေါ် လာနိုင်သည်ဟု ယူဆ၍ အာဏာပိုင်များမှ သတိပေး ကြေညာချက်များ ထုတ်ပြန်ခြင်း၊ လုံခြုံရေး တိုးမြှင့်ခြင်းများ ပြုလုပ်နေကြောင်း သိရသည်။
“ဒီနေ့ပဲ မြို့နယ် အေးချမ်း သာရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေး ကောင်စီနဲ့ မြို့နယ် ရဲတပ်ဖွဲ့ တွေကို ဗုံးဖောက်ခွဲမှာတွေ ရှိလို့ လူစည်ကားတဲ့ ပလာဇာ တွေနဲ့ ရှော့ပင်း စင်တာတွေမှာ လုံခြုံရေး တင်းတင်း ကျပ်ကျပ်နဲ့ စစ်ဆေးဖို့ တိုင်းအေးချမ်း သာယာရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေး ကောင်စီက ညွှန်ကြား ထားတယ်”ဟု မရမ်းကုန်း မြို့နယ် ရဲတပ်ဖွဲ့မှ ဒုရဲအုပ် တဦးက ပြောသည်။
ဗန္ဓုလ သယ်ယူ ပို့ဆောင်ရေး ကုမ္ပဏီ လီမိတက် လက်အောက်ရှိ ပါရမီ တက္ကစီ ယာဉ်ဂိတ်များတွင် ဗုံးပေါက်ကွဲမှု ရှိနိုင်သောကြောင့် လုံခြုံရေး ဂရုစိုက်ရန် သတိပေး ထားသည့် အပြင် ပါရမီ ယာဉ်ရပ်နား ၀င်းအတွင်း သတိပေးချက် ကပ်ထားကြောင်း ရန်ကုန် အခြေစိုက် Weekly Eleven ဂျာနယ်တွင် ဖော်ပြထားသည်။
၂၀၁၀ အတွင်း တပြည်လုံး ဗုံးပေါက်ကွဲမှု ၈ ကြိမ်ဖြစ်ပွားခဲ့ရာ ၁၃ ဦး သေဆုံးပြီး ဒဏ်ရာရသူ ဦးရေ ၂၀၀ ကျော် ရှိကြောင်း သိရသည်။
“ခရီးသည်အဆင်းအတက်တွေမှာ တက္ကစီထဲမှာ ဗုံးနဲ့ပက်သက်ပြီး သံသယဖြစ်စရာ ပစ္စည်းတစုံတခု ကျန်၊ မကျန်ကို အမြဲစစ် ဆေးခိုင်းထားတယ်" ဟု ပါရမီ တက္ကစီ ယာဉ်မောင်းတဦးက ဧရာဝတီသို့ပြောသည်။
“ပြည်သူ့ပြောက်ကျား တပ်ဦး ” အဖွဲ့မှ ဖောက်ခွဲရေးသမားများသည် ပါရမီတက္ကစီယာဉ်များအား ငှားစီး၍ ဗုံးဖောက်ခွဲရန် စီစဉ် နေကြောင်း သတင်း ရရှိထားသဖြင့် လုံခြုံရေးအထူးဂရုပြု၍ ယာဉ်အားရှာဖွေစစ်ဆေးကြရန်နှင့် ခရီးသည်ဆင်းတိုင်း ယာဉ် အတွင်း-အပြင်စစ်ဆေးရန်၊ ခရီးသည် မှတ်တမ်းထားရှိရန်တာဝန်ရှိသူများက ညွှန်ကြားထားကြောင်းလည်း Weekly Eleven ဂျာနယ်တွင် ဖော်ပြထားသည်။
“အခုလို ဗုံးသတင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ တက္ကစီ လုပ်ငန်းကို မထိခိုက်ပါဘူး။ ခရီးသည်တွေက တော့ လိုအပ်ရင် ကျနော်တို့ ဖုန်းတွေကိုခေါ်တုန်းပါပဲ။ စီးတဲ့ ခရီးသည်အရေအတွက် လျော့မသွားပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ခရီးသည် အတက် အဆင်းကိုတော့ စောင့်ကြည့်ဖို့ လိုတာပေါ့”ဟု ပါရမီ တက္ကစီ ယာဉ်မောင်း တဦးကပြောသည်။
တချိန်တည်းတွင် မေခ နှင့် မေလိခ မြစ်ဝှမ်း မြစ်ဆုံ ရေအားလျှပ်စစ် စီမံကိန်းဒေသ နေရာ ၄ ခုတွင် ပေါက်ကွဲမှုများ ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးနောက် ဧပြီ ၁၇ ရက်နေ့မှ စတင်၍ ဖမ်းဆီးစစ်ဆေးမေးမြန်းမှုများရှိနေခဲ့သည်။
“စစ်ဆေးမေးမြန်းမှုတွေ အရမ်းများတော့ ခုဆို ရွာသား အယောက် ၁၀၀ ကျော်လောက် ရှိသွားပြီ။ တချို့ရွာသားတွေ ဆို ရိုက်နှက်စစ်ဆေးခံနေရတာရှိတယ်”ဟု ကချင်ဖွံ့ဖြိုးရေး ကွန်ယက် (KDNG) မှ ဥက္ကဌ ဦးအောင်ဝါ ကပြောသည်။
မြစ်ဆုံရေကာတာ တည်ဆောက်မည့်နေရာအား လုံခြုံရေးတာဝန်ယူထားသည့် စစ်ဖက်ရေးရာလုံခြုံရေးအဖွဲ့ ၊ ရဲအထူး သတင်း တပ်ဖွဲ့၊ ရပ်ကွက်တာဝန်ရှိသူများမှ စစ်ဆေးဖမ်းဆီးမှုများအဓိက ပြုလုပ်နေပြီး တချိူ့ ရွာသားများမှာ ယခုချိန်အထိ မလွတ်သေးဘဲ အေးရှားဝေါလ်ကုမ္ပဏီရုံးခန်းများ အတွင်းဖမ်းဆီးထားကြောင်း ၎င်းကဆိုသည်။
ယင်းသို့ ရိုက်နှက်စစ်ဆေးနေခြင်းကြောင့် ဒေသခံများ ကြောက်ရွံ့စိုးရိမ်နေကြကြောင်း သူကပြောသည်။
ပြီးခဲ့သည့် ဧပြီ ၁၅ ရက်(သင်္ကြန် အကြတ်နေ့)က ရန်ကုန်မြို့တွင် ဗုံးဖောက်ခွဲခဲ့သည့် တရားခံ ဖမ်းမိရန် သတင်းပေးနိုင်ပါက ဆုငွေ ကျပ်(၁၀)သိန်း ချီးမြှင့်မည် ဖြစ်ကြောင်း ဧပြီ ၁၈ ရက်နေ့၌ စစ်အစိုးရက ထုတ်ပြန်ထားသည်။ [၂၀၁၀ အတွင်း ဗုံးပေါက်ကွဲမှုများ]
နာဂစ်သင့်ဒေသတွင် အာဏာ အလွဲသုံးစားလုပ် ကိုယ်ကျိုးရှာ
စိုးမိုး/ ၂၉ ဧပြီ ၂ဝ၁ဝ
နာဂစ်ဒဏ်သင့်ကျေးရွာများတွင် တာဝန်ကျရဲများနှင့် ကျေးရွာ အေးချမ်းသာယာရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီ ဥက္ကဋ္ဌများက အာဏာ အလွဲ သုံးစားလုပ် ကိုယ်ကျိုးရှာနေကြသောကြောင့် ဒေသခံများ အိုးအိမ်နှင့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ ဆုံးရှုံးနေကြကြောင်း သိရသည်။
နာဂစ်ဒဏ်သင့် ဧရာဝတီ မြစ်ဝကျွန်းပေါ်ဒေသ ကျေးရွာများတွင် လောင်းကစားဝိုင်းများကို သက်ဆိုင်ရာ ရဲတပ်ဖွဲ့များက ဆက်ကြေးယူကာ အကာအကွယ်ပေးထားပြီး နာဂစ်ကြောင့် ပျက်စီးခဲ့သည့် အိမ်ရာများ ပြန်လည်ဆောက်လုပ် အခြေချသူများကိုလည်း ငွေရှင်များနှင့် ကျေးရွာအာဏာပိုင်တို့က ပူးပေါင်းကာ ဆောက်လုပ်ခွင့် ချမပေးကြကြောင်း နာဂစ်လေဘေးဒုက္ခသည်များထံမှ သိရသည်။
“နာဂစ် မဖြစ်ခင်တုန်းက ကျနော့်အဒေါ်ရယ် ကျနော်တို့ မိသားစုရယ် မိသားစု (၂) စုနေခဲ့တာခင်ဗျ။ နာဂစ်ဖြစ်တော့ မိသားစု (၂) ခုလုံးမှာ ကျနော်တယောက်ပဲ အသက်ရှင်ကျန်ခဲ့ပါတယ်။ အဲဒါ ကျနော် အလုပ်လှည့်လုပ် ပိုက်ဆံစုပြီး အခု ကျနော့်ခြံမှာ အိမ်ပြန်ဆောက်တာကို ဘေးခြံချင်းကပ်လျက် အိမ်က သူတို့ခြံပါဆိုပြီး ရွာလူကြီးကလည်း ကျနော့်ခြံမှန်း သိလျက်နဲ့ စာထုတ်ပေးတယ်။ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးစိန်လွင်က အိမ်ကို တံဆိပ်တုံးရိုက်ပြီး ဖျက်ပေးရမယ်ဆိုပြီးတော့ အဲလိုတွေ လုပ်နေပါတယ်” ဟု နာဂစ်ဒဏ်သင့် ဘိုကလေးမြို့နယ် ပျဉ်ဖိုးကြီးရွာ ဒေသခံတဦးက ပြောသည်။
ယင်းကဲ့သို့ ဖြစ်ရပ်များ နာဂစ်သင့်ဒေသ ကျေးရွာများတွင် ဖြစ်ပေါ်နေသော်လည်း ဒေသခံ ငွေကြေးချို့တဲ့ အားနည်းသူများမှာ သက်ဆိုင်ရာမြို့နယ် မြေစာရင်းဦးစီးဌာန၊ မြို့နယ် အေးချမ်းသာယာရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီ၊ မြို့နယ်တရားရုံးတို့မှ တရားရေးဆိုင်ရာဌာနများသို့ အကူအညီ မတောင်းတတ်ဘဲ ရှိနေသည်ဟု သိရသည်။
“ကျနော် အခု အိမ်ဆောက်ပြီးကာစမှာ ဖျက်ပေးရမယ်ဆိုတဲ့ စာရတော့ ဘာလုပ်ရမှန်း မသိဘူးခင်ဗျ။ ဖျက်တော့မဖျက်ဘူး ဆိုပြီး အခု အသိတွေကို လျှောက်မေးနေတာ။ ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတာ။ ရွာလူကြီးကတော့ တံဆိပ်တုံးရိုက်ပြီး အိမ်ဖျက်ရမယ် ပြောတယ်။ ကျနော့်မှာ အဲဒီစာရှိတယ်” ဟု ဘိုကလေးမြို့နယ် ပျဉ်ဖိုးကြီးကျေးရွာ ဒေသခံက ပြောသည်။
ထို့အပြင် နာဂစ်အပြီး ပြန်လည်ထူထောင်ကာစ ကျေးရွာများတွင် တာဝန်ကျ ရဲတပ်ဖွဲ့များက ဆက်ကြေးကောက်ကာ ချဲဒိုင်၊ နှစ်လုံးထီဒိုင်များ လုပ်ကိုင်လာမှုကြောင့် ဒေသခံများက တပိုင်တနိုင် မွေးမြူထားသည့် ကျွဲ၊ နွား၊ ၀က်၊ ဘဲများကို ရောင်းချကာ နှစ်လုံးထီထိုးမှု များပြားလာနေကြောင်း ဘိုကလေးမြို့နယ် ကျွန်းညိုကြီးကျေးရွာအုပ်စု ဒေသခံက ပြောသည်။
၎င်းက “နယ်ထိန်းရဲ ဦးအောင်ဘနဲ့ ရယကပေါင်းပြီး နှစ်လုံးထီ ဒိုင်တခုကို တလ ကျပ် (၄) သောင်း တောင်းတယ်ခင်ဗျ။ ဒိုင် (၅) ခုရှိတယ်ခင်ဗျ။ ရဲတွေကိုယ်တိုင် လုပ်နေတာဆိုတော့ ကျနော်တို့ရွာကလည်း ဘယ်သူ့ကို တိုင်ရမှန်း မသိဘူး” ဟု ပြောသည်။
ယင်းသို့ အာဏာအလွဲသုံးစားလုပ် စီးပွားရှာနေမှုများကို နာဂစ်ဒဏ်မှ ပြန်လည်ထူထောင်ကာစ ကျေးရွာဒေသခံများအနေဖြင့် မြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့သို့လည်း မတိုင်ရဲဘဲ အခက်အခဲများ ဖြစ်နေကြောင်း သိရှိရသည်။
လက်နက်ကိုင် အပစ်ရပ် တပ်ဖွဲ့များအားလုံး အသွင်ပြောင်းရမည်ဆိုသည့် နအဖ၏ တဘက်သတ် အစီအစဉ်ကြောင့် ပြည်တွင်းစစ် တကျော့ပြန်ဖြစ်လာနိုင်သည်ဟု လွယ်တိုင်းလျဲန်းအခြေစိုက် SSA ခေါင်းဆောင် စ၀်ယွက်စစ်က ပြောကြား လိုက်ပါသည်။
ပေါ်တာဆွဲရန် အာဏာပိုင်များ ကြိုတင်စီစဉ်
နယ်ခြားစောင့် တပ် သတ်မှတ်ရက် နောက်ပိုင်း ဖြစ်ပေါ်လာနိူင်သည့် စစ်ပွဲများ အတွက် ကြိုတင်ပြင် ဆင်သည့် အနေဖြင့် အထမ်း သမား ခေါ်ရန်ကိစ္စကို သျှမ်းပြည် (မြောက်ပိုင်း) မူဆယ်ခရိုင် ကြူကုတ်(ပန်ဆိုင်း) မြို့နယ် မုံးပေါ်ကျေးရွာ အုပ်စု အာဏာပိုင်များ အတွင်း ဆွေးနွေး ထားကြောင်း သတင်း ရရှိသည်။
ဧပြီလ ၂၇ ရက်နေ့ နံနက်ပိုင်းက မုံးပေါ်ရွာ၌ ပြုလုပ်သည့် အစည်းအဝေးတွင် မုံးပေါ်ကျေးရွာအုပ်စုမှ ရဲစခန်း မှူး ဦးဆန်း လွင် ဋ္ဌာနေပြည်သူ့စစ်ခေါင်းဆောင် ဦးမိုက်ကယ်တို့ တက်ရောက်ခဲ့ပြီး အထမ်းသမား ခေါ်ရန်ကိ စ္စ ဆွေးနွေးခဲ့သဖြင့် ဒေသခံ တချို့ ထွက်ပြေး တိမ်းရှောင်မှုရှိခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
အဆိုပါ အစည်းအဝေးအပြီးတွင် မုံးပေါ်ပြည်သူ့စစ်အင်အား ၂၀ ခန့်သည် မုံးပေါ်ကျေးရွာမှ ကားဖြင့် တစ်နာ ရီကျော်ခန့် သွားရသည့် ကချင်ပြည်လွတ်လပ်ရေး တပ်မတော်(KIA) တပ်မဟာ(၄)လက်အောက်ခံ တပ်စ ခန်းရှိရာ လွယ်ကန်ဒေသသို့ ထွက်ခွာသွားကြောင်း အာဏာပိုင်များနှင့်နီးစပ်သည့် ဒေသခံတစ်ဦးက သျှမ်း သံတော်ဆင့်သို့ ပြောသည်။
“သူတို့က (အာဏာပိုင်) နယ်ခြားစောင့်တပ်လက်မခံလို့ တိုက်မယ်ဆိုရင် ဒေသခံတွေကို ပေါ်တာဆွဲဖို့လို တယ် လို့ အဲဒီ အစည်းအဝေးမှာ ပြောတယ် မနေ့က မနက် ၈ နာရီလောက်မှာ ပြည်သူ့စစ်အဖွဲ့တွေ မထွက် ခင် ပေါ်တာဆွဲမယ်ဆိုပြီး ရွာ မှာ သတင်းထွက်လာတော့ ရွာသားတချို့တော့ ရှောင်သွားကြတယ် ပေါ်တာ ဆွဲတာတော့မရှိပါဘူး” ဟု နီးစပ်သူက ပြောသည်။
ယနေ့နေ့လည်ပိုင်းအထိ တစ်စုံတစ်ရာ ထူးခြားမှုမရှိပဲ ထွက်ခွာသွားသည့် ပြည်သူ့စစ်တပ်ဖွဲ့ဝင်များ ယနေ့နံနက်ပိုင်းတွင် ပြန်လည်ရောက်ရှိလာကြောင်း သူကဆိုသည်။
ဧပြီလ ၁၉ ရက်နေ့ခန့်က မြန်မာစစ်တပ် လှုပ်ရှားစစ်ကြောင်းများ ကြူကုတ်(ပန်ဆိုင်း) မြို့နယ် ၀မ့်အင်နှင့် ကျိန်းယန်း ကျေးရွာများတွင် တပ်စွဲလှုပ်ရှားလျှက်ရှိပြီး ပန်ဆိုင်းတစ်ဘက်ကမ်း တရုတ်ခြမ်း ၀မ်တိန်မြို့ဘက် တွင် တရုတ်စစ်တပ်များ တိုးချဲ့နေရာယူနေကြောင်း သိရသည်။
နအဖဟာ နယ်စပ်တွေကို ဖိအားပေးနေတုန်း ရန်ကုန်မြို့လယ်ခေါင်မှာ ဗုံးတွေကွဲ
ဒါပေမယ့် ရက်စက်ရှည်ကြာတဲ့ အုပ်စိုးမှုတခုကို မခံနိုင်လွန်းလို့ ဖြစ်တဲ့နည်းနဲ့ ဆန့်ကျင်တဲ့လူတွေကိုတော့ နားလည်ဖို့ လိုပါတယ်။ နိုင်ငံတိုင်းလိုလိုမှာ အမျိုးသားတော်လှန်ရေး၊ လူတန်းစားတော်လှန်ရေး စတာတွေ ဖြစ်လာတယ်ဆိုရင်၊ အထူးသဖြင့် အစပိုင်းမှာ ဒီလိုပဲ တဦးချင်းစွန့်စား လုပ်ကြတဲ့၊ မဆိုင်သူတွေကို ထိခိုက်စေတဲ့ လုပ်ရပ်တွေ ပေါ်လာလေ့ရှိကြတယ်ဆိုတာကို သတိပြုဖို့လိုပါတယ်။ အယူအဆ မကြည်လင်တာကြောင့်မို့ မင်းလောင်းပုံစံနဲ့ အင်္ဂလိပ်ကို ထ’ချကြတာကို မြန်မာပြည်ရဲ့ မဝေးလှတဲ့ သမိုင်းမှာ လှမ်းတွေ့နိုင်ပါတယ်။ ကျေးလက်တွေမှာ ဓားပြဂိုဏ်းလိုလို၊ သူပုန်အဖွဲ့လိုလိုဆိုတာတွေကလည်း ဒီသဘောပါပဲ။ မြန်မာပြည်က ‘ရော်ဘင်ဟု’ တွေဟာ ခေတ်မီနိုင်ငံရေး အတွေးအခေါ် မတပ်ဆင်နိုင်တဲ့ လယ်သမား သူပုန်တွေသာ ဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ရဲ့လုပ်ရပ်တွေမှာ လွန်ကျွံတယ်လို့ ထင်မြင်စရာရှိတာ၊ မဆိုင်သူကို ထိခိုက်တာတွေ ပါလာတတ်ပါတယ်။ နိုင်ငံရေးအားနည်းသေးလို့သာ ဖြစ်ပါတယ်။
တောင်ပိုင်း ၀ နယ်မြေ ကျေးလက်လူထုထောင်ချီ ဆက်လက်ထွက်ပြေး
ဧပြီ ၂၈ ရက်နေ့ ၀ တပ်ဖွဲ့အား နအဖ ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်မည် ဆိုသည့်သတင်းကြောင့် တောင်ပိုင်း ၀ လှုပ်ရှားနယ်မြေ အတွင်းရှိ ကျေးလက်လူထုထောင်ချီ ထိုင်းနယ်စပ်သို့ ဆက်လက်ထွက်ပြေးနေသည်ဟု စုံစမ်းသိရှိရပါသည်။
သင်္ကြန်မတိုင်ခင်ကတည်းက ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေတာ ၀ လူထုဘဲ၊ အခု သျှမ်း၊ လားဟူ၊ ကိုးကန့် တရုတ် တွေပါ ဂယက်ရိုက်လာတယ်။ နယ်စပ်ဘက်မှာ ထောင်ချီတယ်။ ထိုင်းနိုင်ငံ ချင်းမိုင်ခရိုင် ချင်းဒေါဝ်မြို့နယ် တွန့်ခေါဝ့်ပုံးကျေးရွာ အုပ်စုဘက်ရောက်နေတာ ရာဂဏန်းရှိတယ်” - ထိုင်းနယ်စပ်နေ စိုင်းအိုက်ကပြောပါသည်။
နယ်ခြားစောင့်တပ်အသွင်ပြောင်းရန် နအဖ ဖိအားပေးထားသည်မှာ ယနေ့နောက်ဆုံးဖြစ်၏။ နအဖ၏ ဖိအားများကြောင့် ၀ ကေဒါ တပ်သားများလည်းမခံမရပ်ဖြစ်နေသဖြင့် နအဖ အရင်မတိုက်ပါက ၀ ဘက်မှ စတိုက်ဖွယ် ရှိကြောင်း - တပ်မှူးများ၊ အရာရှိငယ်များ၊ ရဲဘော်များကြား သတင်းပျံ့နှံ့နေသည့်အပေါ် ဒေသခံသျှမ်း၊ ၀၊ လားဟူ၊ ကိုးကန့်တရုတ်တို့ကလည်း ကျီးလန့်စာစားဖြစ်နေရပြီး ကလေးသူငယ် သက်ကြီးရွယ်အိုပါမကျန် တခြားဒေသသို့ နေရပ်မှတိမ်းရှောင်နေကြခြင်း ဖြစ်သည်။
“နားကောင်းမူးကျေးရွာအုပ်စုဝင် မိုင်းဟန် အနောက်တောင်ဘက်ကရွာတွေ၊ မြောက်ဘက်ခြမ်းက ကျောင်း တောရွာ၊ နောင်ယာ့ဆိုင်း၊ နမ့်ဟူးနိုင်းဆိုင်၊ ဟွေ့အွမ့် ရွာတွေကလဲ ထပ်ထွက်ပြေးကြတယ်။ နားကောင်းမူး တောင်ပိုင်းကဆို နမ့်ဟူးခွန် ရွာ ကနေ နမ့်ယွန်းဒေသ အထိက အိမ်ခြေ ၁၆၀၀ လောက်ရှိမယ်၊ အခု အိမ်အလွတ် တွေ ဘဲကျန်တော့တယ်၊ ၀ တွေ အကာအကွယ်ပေးနိုင်မယ့် ၀မ့်ဖိုင် နဲ့ ၀မ့်နောင်ဝိန်းဘက် တိမ်းရှောင် ကြတာ တွေထောင်ချီတယ်”- ဟု နားကောင်းမူး ဒေသခံ တဦးက ပြောပါသည်။
၀ အရာရှိမိသားစုများ၊ ၀ ခေါင်းဆောင်ပိုင်း ဇနီးသားသမီးများက ၀ ဌာနချုပ်မိုင်းကျွတ်ဘက် ပြောင်းရွှေ့နေ ကြသော်လည်း သာမာန်ရဲဘော်မိသားစုဝင်များက ရွာသားအုပ်စုများနှင့်အတူ ထွက်ပြေးနေကြသည်ဟု အမည် မဖေါ်လိုသည့် ၀ အရာရှိ အသိုင်းအ၀ိုင်းကပြောပါသည်။
၂၈ ရက်နေ့ နောက်ဆုံးထားပြီး တောင်ပိုင်း ၀ လူထုအပါအ၀င် တပ်ဖွဲ့များအားလုံး တပ်ရုပ်ပြန်ရန်၊ တပ်ရုပ်ခြင်း မပြုက လက်နက်ချ ပြည်သူ့စစ်လုပ်ရန်၊ သို့မဟုတ် နယ်ခြားစောင့်တပ်အသွင်ပြောင်းပြီး သျှမ်းပြည်တပ်မတော် အား ထိုးစစ်ဆင် တိုက်ခိုက်ရန် နအဖ ကဖိအားပေးထားသည်။ ထိုဖိအားအတိုင်း တောင်ပိုင်း ၀ တပ်ဖွဲ့ ခေါင်းခါ ငြင်းဆန်နေသောကြောင့် နှစ်ဘက်တိုက်ခိုက်တော့မည့် အခြေအနေကြောင့် ပြည်သူများ တုန်လှုပ်ခြောက်ခြား နေကြခြင်းဖြစ်သည်။
ဧပြီ ၂၃-၂၄ က နအဖ၏ ရန်စတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်လည်း တိုက်ပွဲကြီးဖြစ်လာနိုင်မည်မှာမလွဲကြောင်း ၀ တပ်ဖွဲ့ အရာ ရှိများ ကပြောဆိုနေကြပါသည်။
တရားဥပဒေစိုးမိုးမှု မရှိရင် လူမှုလွတ်လပ်မှုအခွင့်အရေးများ (Civil Liberties) ဘယ်တော့မှ ပေါ်လာမှာ မဟုတ်သလို ဒီမိုကရေစီရဲ့ အနှစ်သာရကိုလည်း ဘယ်တော့မှ တွေ့နိုင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ တိတိကျကျဆိုရင် အရပ်သားလူ့အဖွဲ့စည်း (Civil Society) ကို အကာအကွယ်ပေးရမယ့် ရဲ၊ အစိုးရရှေ့နေ၊ တရားသူကြီးတွေက စစ်အာဏာရှင်တွေ အလိုကျ အမိန့်နာခံပြီး၊ တရားရုံးတွေက လူတစုရဲ့ အသုံးချခံ လက်ကိုင်ဒုတ်ဘဝ ရောက်နေသမျှ ကာလပတ်လုံး ဘယ်တော့မှ တရားဥပဒေစိုးမိုးမှု ရှိလာမှာ မဟုတ်ပါဘူး။
အဲဒီလို တရားဥပဒေစိုးမိုးမှု မရှိတဲ့ အခြေအနေမျိုးမှာ တမတ်သားလေးပဲရရ၊ တပဲသားလေးပဲရရ ပါတီထောင်ပြီး အမတ်ဝင်ရွေးမယ်လို့ စိတ်ကူးရှိနေတဲ့ သူတွေဟာ ကံကောင်းလို့ အရွေးချယ်ခံရရင်တောင် လွှတ်တော်ထဲ မရောက်ခင်မှာ ထောင်နန်းစံရမယ် ဒါမှမဟုတ် အကြောင်းအမျိုးမျိုးပြပြီး ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရဲ့ လုပ်ပိုင်ခွင့် ဘောင်ထဲကနေ အမတ်အဖြစ်က ရုပ်သိမ်းခံရအောင်လုပ်ဖို့က သေချာသလောက်ပါပဲ။
ဘာကြောင့်သေချာနေရသလဲဆိုရင် ၂ဝ၁ဝ မတ်လက ထုတ်ပြန်ထားတဲ့ နိုင်ငံရေးပါတီများ မှတ်ပုံတင်ရေးဥပဒေရဲ့ ပုဒ်မ၂ဝ (က) အရ ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်သည် အပြီးအပြတ် ဖြစ်စေမည်။ (ခ) မည်သည့် တရားရုံးတွင်မှ တရားစွဲဆိုပိုင်ခွင့် မရှိစေရ။ လို့ ထည့်သွင်းဖော်ပြထားတာဟာ ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရဲ့ လုပ်ပိုင်ခွင့်တွေကို အလွန်အကျွံ ပေးရာရောက်နေတာမို့ ဥပဒေအရ ဘယ်လိုမှ ခုခံချေပခွင့်၊ စောဒကတက်ခွင့် မရှိဘူးဆိုတာ ထင်ရှားနေပါတယ်။
“တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုတွေ ဘာတွေ နားမလည်ဘူး၊ ငါတို့လုပ်ချင်ရာ လုပ်မယ်၊ ဘယ်သူ့ကိုမှ ဂရုမစိုက်ဘူး။ အမြင်ကပ်တဲ့ သူတိုင်းကို အချိန်မရွေး၊ နေရာမရွေး၊ အမှုမျိုးစုံနဲ့ ထောင်ကျအောင် လုပ်လို့ရတယ်” ဆိုတာကို ဒီရက်ပိုင်းမှာ ဗကသ ခေါင်းဆောင် ကိုကျော်ကိုကို ထပ်ခါတလဲလဲ တရားစွဲခံနေရတာက သက်သေပြနေပါတယ်။
၂ဝဝ၇ မျိုးဆက် ဗမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ကျောင်းသားသမဂ္ဂများ အဖွဲ့ချုပ် - ဗကသ ဥက္ကဋ္ဌ ကိုကျော်ကိုကိုက နိုင်ငံတော် ငြိမ်ဝပ်ပိပြားမှုကို ပျက်ပြားအောင် လုပ်ဆောင်တယ်ဆိုတဲ့ စွပ်စွဲချက်နဲ့ ၂ဝ၁ဝ ခုနှစ် ဧပြီလ ၇ ရက်နေ့မှာ ကျောက်တံတား တရားရုံးက နောက်ထပ်အခါခါ တရားစွဲဆိုတယ်ဆိုတဲ့ သတင်းကိုကြားလိုက်ရတော့ ဗကသ ခေါင်းဆောင် ကိုကျော်ကိုကိုနဲ့ ကိုဥာဏ်လင်းအောင်တို့ကို ၂ဝဝ၇ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလအတွင်းက သံဃာလှုပ်ရှားမှုမှာ ပါဝင်ပတ်သက်နေတယ်ဆိုတဲ့ အကြောင်းပြချက်နဲ့ ၂ဝဝ၈ ခုနှစ် မတ်လ ၁၇ ရက်နေ့က စတင်ဖမ်းဆီးခဲ့ပြီး မရမ်းကုန်းတရားရုံးမှာ ဗီဒီယိုအက်ဥပဒေပုဒ်မ ၃၂ (ခ) နဲ့ ၂ဝဝ၈ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလက စတင်ရုံးထုတ်ခဲ့တာကို ပြန်ပြောင်းသတိရစေခဲ့ပါတယ်။
မရမ်းကုန်းမြို့နယ် တရားရုံးမှာ တပတ်တကြိမ် ရုံးထုတ်ခဲ့ပေမယ့် ၉ ကြိမ်၊ ၃ လလောက် ရုံးထုတ်ခဲ့ပြီး လုံးဝ စစ်ဆေးမေးမြန်းခြင်း မလုပ်ခဲ့ဘဲ မင်္ဂလာတောင်ညွန့်မြို့နယ် တရားရုံးကို ပြောင်းရွှေ့ခဲ့ပါတယ်။ စတင်ဖမ်းဆီးခဲ့တဲ့ အချိန်ကနေ ၁ဝ နှစ်နီးပါး ကြာမြင့်လာခဲ့တဲ့ ဒီဇင်ဘာလ ၂၁ ရက်နေ့ကျမှ မင်္ဂလာတောင်ညွန့်မြို့နယ် တရားရုံးက မြို့နယ်တရားသူကြီး ဦးတင်လတ်ရှေ့မှာ အမှုမှာ ပါဝင်ခဲ့တဲ့ သက်သေ ၆ ယောက်စလုံးကို တနေ့ထဲနဲ့ အပြီးစစ်ဆေးခဲ့ပါတယ်။
ရှာဖွေသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ VCD အချပ်ထဲမှာ ဗိုလ်မှူးချုပ်ကျော်ဇောရဲ့ ကိုယ်ရေးအတ္ထုပတ္တိနဲ့ ဒီမိုကရေစီ အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်တွေ ပါနေတာမို့ ဗီဒီယိုဥပဒေ ပုဒ်မ ၃၃ (ခ) နဲ့ တရားစွဲဆိုခဲ့တာပါ။
ဗီဒီယိုအက်ဥပဒေ ပုဒ်မ ၃၃ (ခ) ရဲ့ အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်မှာ စီးပွားရေးအလို့ငှာ ရိုက်ကူး၊ ထုတ်လုပ်ဖြန့်ချိ၊ ငှားရမ်း၊ ပြသခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ အထောက်အထား တခုခုနဲ့ ငြိစွန်းမှသာ ဥပဒေအရ ပြစ်မှုမြောက်တယ်လို့ ယူဆနိုင်မှာ ဖြစ်ပေမယ့်၊ ရိုက်ကူးခဲ့တယ်၊ ထုတ်လုပ်ဖြန့်ချိခဲ့တယ်၊ ပြသခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ အထောက်အထားတွေ တစုံတရာ မပြနိုင်ဘဲ အရေးယူအပြစ်ပေးပိုင်ခွင့် မရှိပါဘူး။ တကယ်လို့ ရိုက်ကူးခဲ့တယ်၊ ထုတ်လုပ်ဖြန့်ချိခဲ့တယ် ဆိုရင်တောင် ဒါဟာ စီးပွားရေးအလို့ငှာ ရိုက်ကူးထုတ်လုပ် ဖြန့်ချိပြသတာ ဟုတ်၊ မဟုတ် ဥပဒေပြဿနာ ပေါ်လာပြီး ထပ်မံအငြင်းပွားရဦးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်တဲ့အခါမှာလည်း ထောင်ဒဏ် ၃ နှစ်သော်လည်းကောင်း၊ ဒဏ်ငွေ ကျပ် ၁ဝဝဝဝ သော်လည်းကောင်း၊ ပြစ်ဒဏ် ၂ မျိုးစလုံးသော်လည်းကောင်း ချမှတ်နိုင်သည်လို့ ပြဋ္ဌာန်းထားပေမယ့် ဆင်ဆာမဲ့ ဗီဒီယိုအခွေတခွေ လက်ဝယ်တွေ့ရှိတယ်ဆိုရုံနဲ့ မညှာမတာ ထောင်ဒဏ် ၃ နှစ် ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီအဖြစ်အပျက်ကို သုံးသပ်ကြည့်ရင် ဒါဟာ နိုင်ငံရေးနဲ့ ဆက်စပ်ပတ်သက်နေတယ်ဆိုတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တဦးဦးကို နိုင်ငံရေးအမှုနဲ့ တရားမစွဲဘဲ အခြားအမှုတခုခုနဲ့ အချိန်မရွေး ထောင်ချလို့ ရတယ်ဆိုတာကို သက်သေပြလိုက်တာပါပဲ။
မင်္ဂလာတောင်ညွန့်မြို့နယ် တရားသူကြီး ဦးတင်လတ်ဟာ ကျောင်းသားခေါင်းဆောင် ကိုကျော်ကိုကို မတိုင်ခင်တုန်းကလည်း ရွှေတောင်ကျောင်းတိုက်ဝင်းအတွင်းက ပြည်ကျော်ကျောင်း ကျောင်းထိုင်ဆရာတော် ဦးပဏ္ဍဝံသကို ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင် ဒါရိုက်တာ ဦးဇာဂနာ ဓာတ်ပုံ လက်ဝယ်တွေ့တယ်၊ ဗဟန်းမြို့နယ် သိပံ္ပကျောင်းတိုက်ဝင်းအတွင်းမှာ ကျင်းပတဲ့ ၈၈၈၈ နှစ်ပတ်လည် ၁၉ နှစ်ပြည့် ဆွမ်းကပ်လှူပွဲကို ၈၈ မျိုးဆက် ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်တွေ ဖြစ်ကြတဲ့ ကိုမင်းကိုနိုင်နဲ့ ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်တွေနဲ့အတူ တက်ရောက်ခဲ့တယ်ဆိုတာ အမှုမှာ ပေါ်ပေါက်နေတဲ့အတွက် နိုင်ငံရေးနဲ့ စပ်ဆက်ပတ်သက်နေတာကြောင့်မို့ အငြှိုးအတေးထားပြီး နိုင်ငံရေးအမှုနဲ့ တရားမစွဲဘဲ ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင်တယောက်ရဲ့ ဝစ်လစ်စလစ်ခွေ ဘုန်းကြီးမွေ့ယာအောက်က တွေ့လို့ဆိုပြီး ထောင်ဒဏ် ၃ နှစ် ချမှတ်ခဲ့ဖူးတဲ့ တရားသူကြီးတဦးလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
နိုင်ငံရေးနဲ့ ဆက်စပ်ပတ်သက်နေတဲ့ ဘုန်းတော်ကြီးတွေကို နိုင်ငံရေးအမှုနဲ့ တရားမစွဲဘဲ သေးသိမ်အောင် အဲဒီဆင်ဆာမဲ့ ဗီဒီယိုအခွေ ဘုန်းတော်ကြီးရဲ့ မွေ့ယာအောက်က တွေ့တယ်လို့ တရားရုံးမှာ သက်သေအားလုံးက တညီတညွတ်ထဲ ထွက်ဆိုစွပ်စွဲခဲ့ကြပေမယ့် အမှုမှာ ပေါ်ပေါက်တာက မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဘုန်းတော်ကြီးတွေဟာ ဝိနည်းတော်အရ မွေ့ယာနဲ့ မကျိန်းစက်ဘူးဆိုတာကြောင့် မွေ့ယာအောက်မှာ ဗီစီဒီအချပ်နဲ့ လောင်းကစား လုပ်တယ်ဆိုတဲ့ ငွေ ၅ သိန်းကျော်ကို တွေ့ရှိခဲ့တယ်ဆိုတာ ဘယ်လိုမှကို ယုတ္တိမရှိတဲ့ စွပ်စွဲချက်တွေ ဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကို သိလျက်နဲ့ အဲဒီတရားသူကြီး ဦးတင်လတ်ဟာ ဆင်ခြင်တုံတရား ကင်းမဲ့စွာ ၃ နှစ် ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခဲ့ဖူးသူပါ။
စွပ်စွဲခံရတယ့် ဦးဇင်းဦးပဏ္ဍဝံသဟာ ၁၉၉ဝ ခုနှစ် ပထမအကြိမ် ပတ္ထနိက္ကုဇနကံဆောင်စဉ်တုန်းက အခမ်းအနားမှူးအဖြစ် ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီး၊ ထောင် ၇ နှစ် ကျခံခဲ့ရဘူးသူမို့၊ အခုတကြိမ် ၂ဝဝ၇ ခုနှစ် ဖြစ်တဲ့အခါမှာ နည်းပေးလမ်းပြ လုပ်တယ်ဆိုတဲ့ စွပ်စွဲချက်နဲ့ ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတာပါ။ အမှုမှာ ဆရာတော် ဦးပဏ္ဍဝံသ ကျောင်းထိုင်တဲ့ ပြည်ကျော်ကျောင်းကို စတင်ဖမ်းဆီးခဲ့တဲ့ နေ့ကစပြီး ချိတ်ပိတ်ထားခဲ့တယ်ဆိုတာ ပေါ်ပေါက်ပါတယ်။
အမှုမှာ အကြောင်းချင်းရာ ပြဿနာပေါ်ပေါက်တဲ့ မွေ့ယာနဲ့ သီတင်းသုံးခြင်း ရှိမရှိ သိရှိစေဖို့ အခင်းဖြစ်နေရာကို တရားသူကြီးကိုယ်တိုင် သွားရောက်ကြည့်ရှုပြီးမှ ဝိနည်းနဲ့မညီဘဲ မွေ့ယာနဲ့ သီတင်းသုံးခြင်း မရှိရင် အမှုမှ အပြီးပြတ်လွှတ်ပေးဖို့ လျှောက်ထားတောင်းဆိုခဲ့ပေမယ့် သွားရောက်ကြည့်ရှုခြင်း မရှိဘဲ အပြစ်ပေးခဲ့တာကိုကြည့်ရင် တရားသူကြီးတွေဟာ ရဲကသာ ဖမ်းခဲ့၊ တရားစွဲဆိုခဲ့ရင် အမှုမှာ သက်သေအထောက်အထား ရှိရှိ၊ မရှိရှိ ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်လေ့ရှိတယ်ဆိုတာ ပေါ်ပေါက်နေပါတယ်။
မွေ့ယာနဲ့ သီတင်းသုံးတယ်၊ ဖျာနဲ့သာ သီတင်းသုံးတယ်ဆိုတဲ့ ပြဿနာကို အမှုမှာ အကြီးအကျယ် အငြင်းပွားနေရသလဲဆိုရင် ဗီစီဒီဓာတ်ပြားအချပ်ဟာ ဖျာအောက်မှာသာ ထားပြီး သီတင်းသုံးခဲ့တယ်ဆိုရင် ဘယ်လောက်ကောင်းတဲ့ ဗီစီဒီအချပ်ဖြစ်ဖြစ် အစင်းရာတွေထင်ပြီး ဖွင့်မရဘဲ ဘာအခွေမှန်းကို သိစရာအကြောင်း မရှိပါဘူး။ မွေ့ယာအောက်မှာ ထားပြီး သီတင်းသုံးတယ်ဆိုရင်တော့ ဖွင့်ကြည့်လို့ရနိုင်တဲ့ စီဒီအချပ် ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ပိုဆိုးတာက မွေ့ယာအောက်ကနေ တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်ဆိုတဲ့ ငွေကျပ် ၅ သိန်းနီးပါးကို လောင်းကစားငွေအဖြစ် သိမ်းဆည်းခဲ့တယ် ဆိုတာပါပဲ။
အဘယ်ဆင်ခြင်တုံတရားနည်းတဲ့သူမှ ဖျာအောက်မှာ ငွေ ၅ သိန်းကျော် ထားပြီး သီတင်းသုံးမှာ မဟုတ်ဘူး။ ဒါကြောင့် အာဏာရှိတဲ့သူ တဦးဦးနဲ့ ဆွေမျိုးနီးစပ်တော်စပ်မနေရင်၊ တံစိုးလက်ဆောင် ပေးမထားရင် တရားသူကြီးတွေဟာ ဥပဒေနဲ့အညီ စီရင်ဆုံးဖြတ်ဖို့ ဝန်လေးနေကြတာ အစဉ်အလာဖြစ်နေပါပြီ။
ဥပဒေအတိုင်း စီရင်ဆုံးဖြတ်ပြီး ပြစ်မှုမထင်ရှားလို့ လွှတ်ပေးလိုက်မယ်ဆိုရင် အထက်ကို ဘာကြောင့်လွှတ်ပေးရသလဲဆိုတဲ့ ထုချေလွှာတင်ကြရတာမို့ ငွေမရတဲ့ အမှုတွေမှာ အလုပ်ရှုပ်ခံပြီး ထုချေလွှာ တင်လေ့မရှိကြပါဘူး။ နိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ အမှုဆိုရင်တော့ အများဆုံး ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်လေ့ရှိပြီး လွတ်တဲ့အမှုဆိုတာ မရှိသလောက်ကို ရှားပါတယ်။ နိုင်ငံရေးအမှုတွေထဲမှာ တမှုတော့ ရှားရှားပါးပါး ရှိပါတယ်။ အဲဒါက ၂ဝဝ၇ ကျောင်းသားခေါင်းဆောင် ကိုဒီငြိမ်းလင်းကို သင်းဖွဲ့ဥပဒေ ပုဒ်မ ၆ နဲ့ ဒဂုံမြို့နယ် တရားရုံးမှာ တရားစွဲဆိုခဲ့တဲ့ အမှုမှာ ပြစ်မှုမထင်ရှားသဖြင့် အပြီးအပြတ် လွှတ်ပေးလိုက်သည်ဆိုတဲ့အမိန့် ရှားရှားပါးပါး ချခဲ့တာပါ။ ကာယကံရှင် မိသားစုမှာတော့ တရက်ကလေးသာပဲ ဝမ်းသာရရှာတာပါ။ နောက်တနေ့မှာတော့ နောက်ထပ် တရားရုံးတရုံးဖြစ်တဲ့ ဒဂုံမြို့သစ်တောင်ပိုင်း မြို့နယ်တရားရုံးက သင်းဖွဲ့ဥပဒေ ပုဒ်မ ၆ နဲ့ပဲ တရားထပ်စွဲထားတယ်ဆိုတာ ကြားလိုက်ရတော့တာပါပဲ။
တကယ်တော့ ၁၉၉၆ ခုနှစ်က ပြဋ္ဌာန်းထားတဲ့ ရုပ်မြင်သံကြားနဲ့ ဗီဒီယိုဥပဒေမှာ ဆင်ဆာမဲ့ ဗီစီဒီအချပ် လက်ဝယ်တွေ့ရှိလျှင် ထောင်ဒဏ် ၃ နှစ်ဆိုတာ မပါပါဘူး။
၁၉၉၆ ခုနှစ်မှာ ပြဋ္ဌာန်းတဲ့ တယ်လီဗေးရှင်းနဲ့ ဗီဒီယိုဥပဒေဆိုတာ မူးယစ်ဆေးဝါးဥပဒေလို လူ့အဖွဲ့စည်းကို တိုက်ရိုက်ထိခိုက်နိုင်တဲ့ ရာဇဝတ်မှုမျိုး မဟုတ်ပါဘူး။ တိုးတက်လာတဲ့ လူ့အဖွဲ့အစည်းမှာ မင်္ဂလာဆောင်၊ ရှင်ပြု အခမ်းနားတို့လို အခမ်းနားမျိုးတွေမှာ ကိုယ့်မိသားစု၊ ဆွေမျိုးချင်း အမှတ်တရ ရိုက်ကူးကြတဲ့ အခါမျိုးတွေမှာ ဘယ်သူမှ ဆင်ဆာအဖွဲ့ကိုတင်ပြီး ခွင့်ပြုချက် တောင်းမနေကြပါဘူး။ ဥပဒေအရ တောင်းဖို့လည်း မလိုပါဘူး။
ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေသမီး မင်္ဂလာဆောင်အခွေကို တနိုင်ငံလုံးနီးပါး ကြည့်ဖူးကြမှာပါ။ ဒါတောင် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးကိုယ်တိုင် ခွင့်ပြုချက် တောင်းခံခဲ့မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ “ငါက … တိုင်းပြည်မှာ အကြီးဆုံးပဲ။ ဘယ်သူ့ဆီမှ ခွင့်ပြုချက် တောင်းစရာမလိုဘူး။ ငါ့သဘောနဲ့ငါ လုပ်ချင်ရာ လုပ်မယ်” ဆိုတာမျိုး တရားဥပဒေစိုးမိုးတဲ့ နိုင်ငံမှာ မရရပါဘူး။ နိုင်ငံသားအားလုံး တပြေးညီထဲ သာတူညီမျှ အခွင့်အရေးရပြီး၊ ပြဋ္ဌာန်းဥပဒေတွေကို လေးစားလိုက်နာတဲ့ လူ့အဖွဲ့အစည်း ပေါ်ပေါက်လာမှသာ ဥပဒေစိုးမိုးမှု ရှိလာမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဥပဒေကို လေးစားလိုက်နာဖို့ကလည်း ပြည်သူကို ကိုယ်စားပြုတဲ့ ဥပဒေပြုအဖွဲ့က ပြည်သူလူထု အကျိုးစီးပွားကို ကာကွယ်ပေးမယ့် ဥပဒေတွေ ပြဋ္ဌာန်းထားမှာသာ ပြည်သူလူထုတရပ်လုံးက လေးစားလိုက်နာကြမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ပုံ၊ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေဆိုပြီး ကိုယ့်ကိုယ်ကို ကာကွယ်တဲ့ ဥပဒေပြဋ္ဌာန်းထားမှတော့ ဥပဒေစိုးမိုးမှုဆိုတာ ဘယ်လိုမှ ပေါ်ပေါက်လာမှာ မဟုတ်ပါဘူး။
ပြည်သူလူထုက ရွေးချယ်တင်မြှောက်ထားတဲ့ ဥပဒေပြုလွှတ်တော်က ထုတ်ပြန်ထားတဲ့ ဥပဒေမျိုးမဟုတ်ဘဲ လူတဦးက အချိန်မရွေး ဥပဒေထုတ်ပြန်လိုက်၊ သူကပဲ အရင်က ပြဋ္ဌာန်းထားတဲ့ ဥပဒေတွေကို လိုသလို ဖျက်လိုက် လုပ်နိုင်နေသရွေ့ ဘယ်တော့မှ တရားဥပဒေစိုးမိုးမှု ပေါ်ပေါက်လာမှာ မဟုတ်ပါဘူး။
ဗမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ကျောင်းသားသမဂ္ဂများ အဖွဲ့ချုပ်ကို ကိုကျော်ကိုကိုက ဦးဆောင်ပြီး၊ ၂ဝဝ၇ ခုနှစ်အတွင်း ဖွဲ့စည်းခဲ့စဉ်က ပါဝင်ခဲ့တယ်လို့ တရားရုံးတွေပေါ်မှာ အတိအကျ စွပ်စွဲပြီး အသက် ၁၈ နှစ် မပြည့်သေးတဲ့ ပထမနှစ် သင်္ချာကျောင်းသား ကိုရဲမြတ်ဟိန်း အပါအဝင် ကိုဒီငြိမ်းလင်း၊ ကိုစည်သူမောင်၊ ကိုရဲမင်းဦး၊ မဟန်နီဦး၊ ကိုကြည်ဖြူတို့ကို ၂ဝဝ၈ ခုနှစ်အတွင်းက သင်းဖွဲ့ဥပဒေ ပုဒ်မ ၆ နဲ့ ရာဇသတ်ကြီးပုဒ်မ ၁၄၃၊ ၁၄၄၊ ၁၄၅၊ ၁၄၇၊ ၂၉၅၊ ၂၉၅ (က)၊ ၅ဝ၅ (ခ) တို့နဲ့ တရားရုံးပေါင်းများစွာက ထောင်ဒဏ်များစွာ ချမှတ်ပြီးခဲ့ပါပြီ။
အဲဒီအချိန်တုန်းကတည်းက ဘာကြောင့်များ ကိုကျော်ကိုကိုအပေါ် တရားမစွဲခဲ့ဘဲ၊ အခု ၂ဝ၁ဝ ခုနှစ်ကျမှ တောင်ကြီးထောင်ကနေ ပြန်ခေါ်ပြီး၊ ၅ဝ၅ (ခ) နဲ့ ပုဒ်မ ၆ တို့နဲ့ တရားထပ်စွဲရသလဲဆိုရင် တရားဥပဒေစိုးမိုးမှု မရှိဘူးဆိုတာကို သက်သေပြလိုက်တာပါပဲ။ အဲဒီလို တရားဥပဒေစိုးမိုးမှု ကင်းမဲ့နေတာကြောင့် လူမှုလွတ်လပ်မှု အခွင့်အရေးတွေလည်း ပျောက်ကွယ်နေတဲ့ ရွေးကောက်ပွဲဟာ တရားမျှတမှု ဘယ်တော့မှ ပေါ်ပေါက်လာမှာ မဟုတ်သလို၊ ရွေးကောက်ပွဲအောင်နိုင်ပြီး အစိုးရဖွဲ့နိုင်ဖို့ဝေးစွ၊ လွှတ်တော်တွေထဲမှာ တပဲသား အတိုက်အခံ၊ တရွေးသား အတိုက်အခံတောင် မရှိရအောင် စီစဉ်ထားတဲ့ ရွေးကောက်ပွဲဖြစ်ကြောင်း သုံးသပ်ရင်း နိဂုံးချုပ်အပ်ပါတယ်။
ယနေ့ မြန်မာ့ရေးရာ သတင်းများ April,29th,2010
( 40 )ပါတီအမည်မခံဘဲ တရားဝင် လူမှုရေးလုပ်မည်ဟု NLD ပြောဆို
( 39 )မြစ်ဆုံဗုံးလက်သည် ရွာသားများကို စစ်ဆေး
( 38 )Suu Kyi asks court to stop party dissolution
( 37 )ဗုံးထိတ်လန့်မှု ကုန်စည်ပြပွဲ လူဝင်နည်း
( 36 )US Report Blasts Burma's Record on Religious Freedom
( 35 )စာနယ်ဇင်းလွတ်လပ်ခွင့် အဆိုးရွားဆုံးနိုင်ငံ မြန်မာဆက်လက်ပါဝင်
( 34 )Trade hit by border guard furore
( 33 )ပြင်းအားကောင်း ငလျင် ရခိုင်တွင် လှုပ်ခတ်
( 32 )Karen fleeing to border in their ‘thousands’
( 31 )ဒီဗီဘီသတင်းထောက် အယူခံ ပလပ်
( 30 )It's like locking up Burma's Billy Bragg
( 29 )မြန်မာ့ရေတပ် အဓမ္မ စီးပွားရှာ
( 28 )Myanmar Cajoles SAARC, Eyes Memberrhip
( 27 )နေဘုန်းလတ် လွတ်လပ်စွာ ထုတ်ဖော် ရေးသားခွင့် ဆုရ
( 26 )Burmese junta ‘politicising post-Nargis aid’
( 25 )အမျိုးသားချင်း လက်ထပ်သူ လူမှုရေးအဖွဲ့မှ အထုတ်ခံရ
( 24 )Strong wind causes more casualties, damage in Myanmar
( 23 )ကျန်းမာရေး ဆေးကုစရိတ် ပိုများလာ
( 22 )New Political Parties' Biggest Challenge
( 21 )အမျိုးသမီးရေးရာအဖွဲ့ချုပ် နိုင်ငံရေးပါတီ ပြောင်းရန် ဖွဲ့စည်းပုံပြင်
( 20 )Burmese getawhiff of UK elections
( 19 )ရိုးမ ၃ သတင်းဌာန အယ်ဒီတာချုပ် ကွယ်လွန်
( 18 )Myanmar: Bomb Wounds Officers
( 17 )စိတ်ကြွဆေးပြား (၂) သိန်း ဖမ်းဆီးရမိ
( 16 )US mulls more sanctions on Myanmar
( 15 )Moderate earthquake jolts Myanmar
( 14 )ကျောက်စိမ်းတွင်း ဒေသတွင် လူငယ်များ ဖမ်းဆီးမှုရှိနေ
( 13 )Rights group seeks probe of U of Ottawa
( 12 )စစ်ဖြစ်မှာစိုးလို့ ၀ တိုင်းရင်းသားတွေ တိမ်းရှောင်
( 11 )Activists say Myanmar still too repressive
( 10 )ရန်ကုန် သင်္ကြန်၌ ဗုံးပေါက်ကွဲပြီးနောက် လွိုင်ကော်တွင် လုံခြံရေး တင်းကြပ်ကာ ပိုမိုစစ်ဆေး
(9)Bomb in Myanmar police station
( 8 )အေးရှားဝေါလ် ဆည်စီမံကိန်း လုပ်သား ၄ ဦး ဒဏ်ရာရ
(7)Burmese generals quit army to contest election
(6)စစ်တပ်နောက်ခံ ပါတီတွေကြောင့် အရပ်ဘက် နိုင်ငံရေးပါတီတွေ ယှဉ်ပြိုင်မှု အားနည်းနိုင်
(5)Detainee bombs Myanmar police station, kills self
(4)လွိုင်ကော် ရဲဌာန ဗုံးကွဲလို့ လူတဦး သေဆုံး
(3)Suicide Blast in Burma
(2)ကာတွန်းဆရာ ဟန်လေး လူ့အခွင့်အရေးဆု ချီးမြှင့်ခံရ
( 1 )Burmese blogger wins top US award
ကျော်ခ | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့၊ ဧပြီလ ၂၈ ရက် ၂၀၁၀
ချင်းမိုင် (မဇ္ဈိမ)။ ။ ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း ကွတ်ခိုင်မြို့အခြေစိုက် ခြေလျင်တပ်ရင်း - ခလရ ၄၅ သို့ ဗုံးခွဲတိုက်ခိုက်မှုဆိုသော ခြိမ်းခြောက်စာတစောင် ပို့ခံရသည်ဟု တပ်နှင့်နီးစပ်သူတဦးက ပြောသည်။
ဗျူဟာမှူး ဗိုလ်မှူးကြီးကြည်ဝင်း အမည်ဖြင့် စာအိတ်တအိတ်ကို အသက် ၁၉ နှစ်ခန့်ရှိ လူငယ်တဦးက တပ်ရင်းဂိတ်ဝရှိ ဂိတ်စောင့်အား ယခုလ ၂၆ ရက်နေ့က လာရောက်ပေးသွားခဲ့သည်။ စာထဲတွင် တပ်ဝင်းကို ဗုံးခွဲတိုက်ခိုက်မည်ဟု ရေးသားထားသည်ဟု သိရသည်။
“ဂိတ်စောင့်ကလည်း စာလာပေးတဲ့လူကို တခါမှ မမြင်ဖူးဘူးလို့ ပြောတယ်။ ဗျူဟာမှူးကို သွားပေးတော့ သူလည်းဖတ်ပြီး တပ်ဝင်းတဝင်းလုံး ဗုံးခွဲမယ့် သတင်းရလို့ လုံခြုံရေး ဂရုစိုက်ဖို့ မှာထားတယ်လို့ ပြောတယ်” ဟု သတင်းရပ်ကွက်က မဇ္ဈိမကို ပြောသည်။
ဗျူဟာမှူးက တပ်မိသားစုများနှင့် ဝန်ထမ်းများအား သတိထားနေကြရန်နှင့် တပ်တွင်း အဝင်အထွက်ကို ပိုမိုစိစစ်ရန် မှာကြားထားသည်။
ခြိမ်းခြောက်စာလာပို့သူကို ရှာဖွေလျက်ရှိပြီး ကွတ်ခိုင်မြို့အထွက်ရှိ မူဆယ်၊ နမ့်ခမ်းဘက်သို့သွားသည့် စစ်ဆေးရေးဂိတ်တွင် မြို့တွင်းသို့ ဝင်ရောက်လာသူများကို မှတ်ပုံတင်နှင့်တကွ အိတ်များကိုပါ ဖွင့်စစ်ဆေးမှုများ ပိုမိုပြုလုပ်လျက်ရှိသည်။
စာပို့ခြိမ်းခြောက်သူမှာ အစိုးရဆန့်ကျင်ရေးအဖွဲ့များ သို့မဟုတ် အခွန်အကောက် ပြိုင်ကောက်နေကြသော နီးစပ်ရာရှိ အခြားသော တပ်မတော် တပ်ရင်းများက ဖြစ်နိုင်သည်ဆိုသော တွက်ဆနေကြသည်။
ယခုလ ၁၅ ရက်နေ့မှစတင်၍ ဗုံးပေါက်ကွဲသော သတင်းများ မကြာခဏ ပေါ်ထွက်နေရာ အင်္ဂါနေ့က ကယားပြည်နယ် လွိုင်ကော်မြို့တွင် အသက် ၃ဝ နှစ်ခန့် သံသယရှိသူတဦးကို ရဲက စစ်ဆေးနေစဉ် ဗုံးဖောက်ခွဲလိုက်သဖြင့် ထိုသူသေဆုံးသွားပြီး ရဲ ၄ ဦး ဒဏ်ရာရသွားခဲ့သည်ဟု AFP သတင်းတပုဒ်တွင် ပါရှိသည်။
၂၃ ရက်နေ့က မနက်ပိုင်းက ရန်ကုန်မြို့ရှိ ရန်ကုန်ဆေးရုံကြီး အရေးပေါ်ဌာနရှေ့တွင် ဗုံးဟု ထင်ဟပ်စေနိုင်သော အထုပ်တထုပ်ကို တွေ့ရှိခဲ့သဖြင့် ရုတ်ရုတ်သဲသဲ ဖြစ်သွားကာ နယ်မြေခံရဲများ ဦးစွာရောက်ရှိလာခဲ့ပြီး ဆေးရုံကြီး အရေးပေါ်ဌာန ရှေ့တည့်တည့်ရှိ ဧရိယာအား ပိတ်ဆို့ရှာဖွေခဲ့သည်။
မိုင်းရှင်းလင်းရေးအဖွဲ့များ ရောက်ရှိလာပြီး စစ်ဆေးကြည့်သည့်အခါ တရုတ်နိုင်ငံထုတ် တိုင်ကပ်နာရီတလုံးဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ယခုလအစောပိုင်းက ကချင်ပြည်နယ်တွင် မြစ်ဆုံဆည်စီမံကိန်းတွင် ဗုံးပေါက်ကွဲမှုများကြောင့် အင်ဂျင်နီယာတဦး ဒဏ်ရာရခဲ့သည်။
ယခုလ ၁၅ ရက်နေ့က ရန်ကုန်သင်္ကြန်ပွဲတွင် ဗုံး ၃ လုံး ပေါက်ကွဲရာ ၅ နှစ်အတွင်း အဆိုးရွားဆုံးဖြစ်ခဲ့ပြီး ၁ဝ ဦး သေဆုံးပြီး၊ ၁၇ဝ ခန့် ဒဏ်ရာရရှိခဲ့သည်။
ရဲရင့်/ ၂၈ ဧပြီ ၂ဝ၁ဝ
ဗိုလ်ချုပ်ကြီးကို ၀န်ကြီးချုပ် ဦးသိန်းစိန်အဖြစ် နအဖ ပွဲထုတ်
စိုးမိုး/ ၂၈ ဧပြီ ၂ဝ၁ဝ
နအဖစစ်အစိုးရက ဗိုလ်ချုပ်ကြီးသိန်းစိန် စစ်တပ်မှ နုတ်ထွက်ပြီး အရပ်သားအဖြစ် ၀န်ကြီးချုပ် ဦးသိန်းစိန်ဟု ယနေ့ထုတ် နိုင်ငံပိုင်သတင်းစာများမှတဆင့် ဖော်ထုတ်ပြောကြားလိုက်သည်။
နအဖစစ်အစိုးရ ၀န်ကြီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်ကြီးသိန်းစိန်နှင့် ၀န်ကြီး (၂၂) ဦးတို့သည် လာမည့်ရွေးကောက်ပွဲအတွက် စစ်ရာထူးများမှ နုတ်ထွက်ကြောင်း ပြည်ပသတင်းဌာနများက ယမန်နေ့တွင် ရေးသားဖော်ပြခဲ့ကြပြီးနောက် စစ်အစိုးရက ယခုကဲ့သို့ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး သိန်းစိန်မှ ဦးသိန်းစိန်အဖြစ် ပြောင်းလဲလိုက်ကြောင်း တရားဝင် ဖော်ပြလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။
“အရပ်ဘက် ပြောင်းတာကတော့ အဓိက ရွေးကောက်ပွဲ ၀င်ပြိုင်ဖို့ပေါ့နော်။ ရွေးကောက်ပွဲမှာ သိန်းစိန်က စစ်တပ်က ဖွဲ့မယ့်ပါတီမှာ ဥက္ကဋ္ဌ လုပ်ရဖို့များတာကိုး။ အဲဒီအတွက် ကြိုပြင်တာပါ” ဟု စစ်ရေးနိုင်ငံရေး လေ့လာသူ ဦးဝင်းမင်းက ပြောသည်။
ကြံ့ဖွံ့ နာယကအဖွဲ့ဝင်ဖြစ်သော ဗိုလ်ချုပ်ကြီးသိန်းစိန် ရာထူးမှ အနားယူပြီးနောက်ပိုင်းတွင် စစ်တပ် နိုင်ငံရေးပါတီတခု ဖွဲ့စည်းရန်ရှိနေသည်ဟုလည်း ဦးဝင်းမင်းက ပြောသည်။
“မေလလောက်ဆိုရင် သူတို့ ပါတီဖွဲ့မယ့် သဘောရှိတယ်။ မေလ (၆) ရက်နေ့ အန်အယ်လ်ဒီက စာရင်းမသွင်းဘူးဆိုလို့ရှိရင် သူတို့လိုချင်တဲ့ပုံစံ သူတို့ လုပ်တော့မှာပေါ့နော်။ အဲဒီအတွက် အဆင်သင့်ဖြစ်အောင် ဦးသိန်းစိန် ဆိုပြီးတော့ စစ်တပ်က နားလိုက်တာပေါ့နော်။ အဲဒီအတွက် ပြင်တာပါ” ဟု ၎င်းက ပြောသည်။
၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံဥပဒေအရ စစ်တပ်မှ လွှတ်တော်သုံးရပ်တွင် အမတ်နေရာ (၂၅) ရာခိုင်နှုန်းစီ ရယူမည်ဟု အတိအလင်း ဆိုထားသည့်အပြင် ယခု ရွေးကောက်ပွဲဝင်ရန် စစ်ဗိုလ်ချုပ်များက အရပ်သားအဖြစ် ထပ်မံ အသွင်ပြောင်းလာခြင်းဖြစ်သည်။
“ကြံ့ဖွံ့က ပါတီပြောင်းဖွဲ့မှာပဲ။ အခုလဲ ကြံ့ဖွံ့အမှုဆောင် ၀န်ကြီးတွေ အကုန်စစ်တပ်က ထွက်လာတာပဲ။ စစ်တပ်က ထွက်တာပဲ ပါပြီး ၀န်ကြီးနေရာက ထွက်မထွက်၊ ရွေးကောက်ပွဲ ဘယ်လို ၀င်မလဲဆိုတာတော့ မသိသေးဘူးပေါ့ဗျာ။ ဒါပေမယ့် နယ်တွေ ခွဲပေးပြီးသွားပြီလို့တော့ ကြားတယ်” ဟု ပြည်တွင်းမှ သတင်းဂျာနယ် အယ်ဒီတာတဦးက ပြောသည်။
နအဖ ပြုလုပ်မည့်ရွေးကောက်ပွဲကို အဓိက အတိုက်အခံပါတီ အန်အယ်လ်ဒီအပါအ၀င် ၁၉၉၀ ပြည့်နှစ် ရွေးကောက်ပွဲအနိုင်ရ တိုင်းရင်းသားပါတီများကလည်း ၀င်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ခြင်း မပြုဟု ယတိပြတ် ကြေညာထားပြီးနောက် စစ်အစိုးရရွေးကောက်ပွဲ ၀င်ရောက်ရန် ပါတီမှတ်ပုံတင် လျှောက်ထားသည့်အဖွဲ့ပေါင်း (၂၅) ဖွဲ့ရှိပြီဖြစ်သည်။ ယင်းအဖွဲ့များအနက် (၅) ဖွဲ့ကို နိုင်ငံရေးပါတီ တည်ထောင်ခွင့်ပြုလိုက်ပြီဖြစ်ပြီး ကျန် (၄) ပါတီမှာ နိုင်ငံရေးပါတီအဖြစ် ဆက်လက်လျှောက်ထားသည့် ပါတီများဖြစ်သည်။
နအဖ၏ ပြည်ထောင်စု ကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးအသင်းကို ပါတီအဖြစ် အသွင်မပြောင်းသေးသော်လည်း ယခုအခါ ကြံ့ဖွံ့အသင်းတွင် ပါရှိသည့် အမှုဆောင်များက စစ်တပ်ရာထူးမှ အနားယူလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။
နာမည်ကြီး စီးပွားရေး လုပ်ငန်းရှင်ကြီးများ ရွေးကောက်ပွဲ ၀င်ရန်ရှိ
လာမည့် ရွေးကောက်ပွဲတွင် စစ်အစိုးရနှင့် နီးစပ်သည့် နာမည်ကြီး စီးပွားရေး လုပ်ငန်းရှင်ကြီးများ ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင် လိမ့်မည်ဟု ရန်ကုန် စီးပွားရေး လုပ်ငန်းရှင်များ အသိုင်းအ၀န်းတွင် ပြောဆိုနေ ကြကြောင်း သိရသည်။
ပြည်ထောင်စု မြန်မာနိုင်ငံ ကုန်သည်များနှင့် စက်မှုလက်မှု လုပ်ငန်းရှင်များ အသင်းချုပ် (UMFCCI) ဥက္ကဋ္ဌ ဦးဝင်းမြင့်နှင့် ထူး ကုမ္ပဏီပိုင်ရှင် ဦးတေဇ၊ မက်စ်မြန်မာ ကုမ္ပဏီပိုင်ရှင် ဦးဇော်ဇော်၊ ယုဇန ဦးဌေးမြင့်တို့ ရွေးကောက်ပွဲ ၀င်လိမ့်မည်ဟု စီးပွားရေး လုပ်ငန်းရှင် တဦးက ဧရာဝတီသို့ ပြောသည်။
“ဦးဝင်းမြင့်နဲ့ သူ့အဖွဲ့ကတော့ ၀င်လိမ့်မယ်၊ တသီးပုဂ္ဂလပဲဝင်မလား၊ ကြံ့ဖွံ့နဲ့ပဲ သူ့ဇာတိ စစ်ကိုင်းတိုင်း တန့်ဆည်ကပဲ ၀င်မလား မသိဘူး”ဟု ၎င်းက ဆိုသည်။
UMFCCI ဥက္ကဋ္ဌ နှင့် စစ်အစိုးရနှင့် စီးပွားရေးသမားကြီးများက စုပေါင်းပြီး “အမျိုးသားဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေးကုမ္ပဏီ” ဟု ဖွဲ့စည်း ထား ကြောင်း၊ ယမန်နေ့က ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်တွင် မှတ်ပုံတင်သည့် အမျိုးသားဖွံဖြိုးတိုးတက်ရေးနှင့် ဒီမိုကရေစီပါတီသည် အဆို ပါစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များ ဖွဲ့စည်းထားသည့် ပါတီဟုထင်မြင်ကြောင်း ရန်ကုန်စာနယ်ဇင်း အသိုင်းအ၀န်းတွင် ပြောဆိုနေကြသည် ဟု ရန်ကုန်အခြေစိုက် စာနယ်ဇင်းသမားတဦးက ပြောပြသည်။
UMFCCI အဖွဲ့ကို စစ်အစိုးရ အာဏာသိမ်းပြီးနောက် ၁၉၈၉ ခုနှစ်တွင် ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းစဉ်က ထည့်သွင်းရေးဆွဲထားသည့် နိုင်ငံရေးနှင့် မပတ်သက်ရ ဟူသော စည်းကမ်းချက်ကိုလည်း ယခုအခါ ပယ်ဖျက်ထားသည်။
စစ်အစိုးရက လာမည့် ရွေးကောက်ပွဲကို စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်ကြီးများနှင့် လူသိ ထင်ရှားသည့် မြို့မိမြို့ဘများကို ၀င်ရောက် ယှဉ်ပြိုင်ခိုင်းသည်ဟု သိရသည်။
ပြည်တွင်းအခြေစိုက် စီးပွားရေးပညာရှင် တဦးကလည်း စစ်အစိုးရက ရွေးကောက်ပွဲတွင် ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံဖြိုးရေး အသင်း အပြင် ၎င်းတို့နှင့် နီးစပ်သည့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်ကြီးများကိုလည်း ငွေအား လူအားဖြင့် အနိုင်ရရှိရန် ၀င်ရောက် ယှဉ်ပြိုင်စေပြီး လွှတ်တော်တွင် နေရာရယူလိမ့်မည်ဖြစ်သည်ဟု ပြောဆိုသည်။
အတည်မပြုနိုင်သေးသည့် သတင်းများအရ ဦးတေဇ က ကချင်ပြည်နယ်၊ ဦးဌေးမြင့် က ၎င်း၏ ဆီအုန်းလုပ်ငန်းများ ရှိသည့် တနင်္သာရီတိုင်း၊ ဦးဇော်ဇော်က ဧရာဝတီတိုင်းအတွင်းရှိ မြို့နယ်တချို့မှ ၀င်ရောက်လိမ့်မည်ဟု သိရသည်။
ရတနာပုံ အက်ဖ်စီ ဘောလုံးအသင်းပိုင်ရှင် ဒေါက်တာ စိုင်းဆမ်ထွန်းသည်လည်း မန္တလေးမြို့နယ်တခုမှ ၀င်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်မည်ဟု မန္တလေးမြို့ခံတဦးက ပြောသည်။ ၎င်းသည် Alpine သောက်ရေသန့်လုပ်ငန်းနှင့် ဖျော်ရည်လုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်နေသူ စီးပွားရေး လုပ်ငန်းရှင်တဦး ဖြစ်သည်။
မကြာသေးမီက ပဲခူးတိုင်း သာဂရမြို့နယ်ရှိ မက်စ်မြန်မာ ကုမ္ပဏီ ပိုင် ဘိလပ်မြေစက်ရုံဖွင့်ပွဲတွင် ဦးဇော်ဇော်က ယခုလောလော ဆယ်တွင် ရွေးကောက်ပွဲ ၀င်ရောက်မည့် အစီအစဉ်မရှိသေးကြောင်း ၎င်းတို့၏ မေးမြန်းချက်ကို ဖြေဆိုသွားသည်ဟု စာနယ်ဇင်း သမားတဦးက ဆိုသည်။
ဦးဇော်ဇော်မှာ လက်ရှိ မြန်မာနိုင်ငံဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ် ဥက္ကဋ္ဌ အဖြစ်ဆောင်ရွက်နေပြီး ငွေကျပ်သိန်းပေါင်းများစွာ အသားတင်စိုက် ထုတ်၍ ဘောလုံးကလပ်အသင်း ၈ သင်းကို တည်ထောင်ပေးခဲ့ သူဖြစ်သည်။ ဟိုတယ်လုပ်ငန်း၊ စက်ယန္တရားတင်သွင်းခြင်း လုပ် ငန်း၊ မွန်ပြည်နယ်ရှိ ဘီးလင်းမြို့နယ်တွင် ရော်ဘာခြံ ဧက ၃၀၀၀ စိုက်ပျိုး နေပြီး၊ မက်စ် ဘိလပ်မြေ(Max Cement) ထုတ်လုပ်ရေး စက်ရုံများ၊ ရန်ကုန်- ပဲခူး ကားလမ်းမပိုင်းတွင် လမ်းအခွန် ကောက်ခံရေး လုပ်ငန်း၊ မော်တော်ယာဉ်တင်သွင်းသည့် လုပ်ငန်း၊ နေပြည်တော် တည်ဆောက်ခြင်း လုပ်ငန်း၊ ဖားကန့်ကျောက်စိမ်း တူးဖော်ရေးလုပ်ငန်းများကိုလုပ်ကိုင်နေကာ နေပြည်တော်ရှိ နိုင်ငံတကာ အဆင့်မီ အားကစားကွင်း ၂ကွင်း ဆောက်လုပ်ခွင့် ရရှိထားသူဖြစ်သည်။
ဦးတေဇသည် ထူး ကုမ္ပဏီကို တည်ထောင်ထားပြီး သစ်စက်၊ ဆန်စက်၊ မော်တော်ယာဉ်နှင့် စက်ယန္တရားများ တင်သွင်းခြင်း၊ စိုက်ပျိုးရေးနှင့် ရေထွက်ပစ္စည်း ထုတ်လုပ်တင်ပို့သည့် လုပ်ငန်း၊ကျောက်မျက်လုပ်ငန်း၊ အိမ်တွင်းအလှဆင်လုပ်ငန်း၊သွင်းကုန်ထုတ် ကုန် လုပ်ငန်းအတွက် လိုအပ်သည့် ကွန်တိန်နာ၊ ယန္တရားများ ၀န်ဆောင်မှုပေးသည့်လုပ်ငန်းများကို လုပ်ကိုင်သည်။
၎င်းသည် ပြည်တွင်းနှင့် ပြည်ပနိုင်ငံများကိုပြေးဆွဲနေသည့် အဲ ပုဂံ(Air Bagan)လေကြောင်းလိုင်းကို တည်ထောင်ထားပြီး မကြာသေးမီက ရေအားလျှပ်စစ်ထုတ်လုပ်ရေး လုပ်ငန်းကြီး နှစ်ခုကိုလည်း စစ်အစိုးရနှင့် ဖက်စပ်လုပ်ကိုင်ခွင့် ရရှိခဲ့သည်။
ဦးတေဇ က မြန်မာနေရှင်နယ်လိဂ်(MNL)ဟုထင်ရှားသည့် ဘောလုံးလောကတွင်လည်း ရန်ကုန်ယူနိုက်တက်ကလပ် အသင်းကို တည်ထောင်ထားပြီး ပြည်တွင်းပြည်ပကစားသမားများကို ခေါ်ယူကာ တနှစ်လျှင် လစာ ကျပ် သိန်းထောင်ချီပေးထားသည်။
ယုဇန ဦးဋ္ဌေးမြင့်မှာ ယခင် ထောက်လှမ်းရေးအကြီးအကဲ ဒုတိယ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး ခင်ညွန် နှင့်နီးစပ်သူ စီးပွားရေးသမားတဦးအဖြစ် လူသိများပြီး ယခုအခါ တနင်္သာရီ တိုင်းတွင် ဆီအုန်းခြံ လုပ်ငန်း၊ ဟိုတယ်လုပ်ငန်း၊ ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းများ လုပ်ပိုင်ခွင့် ရရှိ ထားသူဖြစ်သည်။
လွိုင်ကော် ရဲစခန်းမှာလည်း ဗုံးကွဲ
သန်းထိုက်ဦး Wednesday, April 28, 2010
ကယားပြည်နယ် လွိုင်ကော်မြို့ရှိ ရဲစခန်းတွင် ယမန်နေ့က ဗုံးပေါက်ကွဲမှု ဖြစ်ပွားခဲ့ရာ ဒေသခံတဦး သေဆုံးသွားကြောင်း သိရသည်။
လွိုင်ကော်မြို့ရှိ တောင်ဈေးထဲတွင် ဗုံးခွဲရန် စီစဉ်နေသူ ၂ ဦးမှ တဦးကို ဖမ်းဆီး၍ ရဲစခန်းသို့ ခေါ်ဆောင်ရာ ၎င်း ရဲစခန်း အတွင်း ပေါက်ကွဲခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်ဟု ဒေသခံတဦးက ဧရာဝတီသို့ ပြောသည်။
“ဈေးထဲမှာ သူတို့ ဗုံးခွဲဖို့ စီစဉ်တာ၊ ရဲက တွေ့ပြီး လိုက်ဖမ်းတော့ တယောက်လွတ်သွားတယ်၊ တယောက်မိတယ်၊ အဲဒီ မိတဲ့လူကို ရဲစခန်းကို ခေါ်သွားတယ်၊ ရဲစခန်းရောက်မှပဲ အဲဒီလူက ဗုံးခွဲလိုက်တယ်”ဟု ၎င်းက ပြောသည်။
လွတ်မြောက်သွားသော ပေါက်ခွဲရေး သမားဟု ယူဆ ရသူ တဦးကိုလည်း လိုက်လံဖမ်းဆီးနေကြောင်း၎င်းက ဆိုသည်။ ထို့အပြင် ဗုံးပေါက်ကွဲပြီးနောက် လွိုင်ကော်မြို့ ရဲစခန်းကို ယာယီပိတ်ထားကြောင်း သိရသည်။
ဗုံးပေါက်ကွဲမှုကြောင့် တဦးသေဆုံးသွားပြီး တခြားသော ရဲဝန်ထမ်းများလည်း ဒဏ်ရာရရှိကြောင်း၊ ဒဏ်ရာရရှိသူ မည်မျှ ရှိသည်ကို မှု မသိရသော်လည်း လွိုင်ကော်မြို့ဆေးရုံတွင် ဆေးကုသခံယူနေကြောင်း ယင်းဆေးရုံမှ တာဝန်ရှိသူများ က ပြောသည်။
ယမန်နေ့ကလည်း ပဲခူးတိုင်း၊ တောင်ငူမြို့နယ်အတွင်း တည်ဆောက်လျက်ရှိသော သောက်ရေခပ် ရေအားလျှပ်စစ် စီမံကိန်းအား တာဝန်ယူထား သည့် နအဖ စစ်အစိုးရတပ်များကို ကရင်အမျိုးသား လွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် (KNLA) တပ်မဟာ ၂ တပ်ရင်းမှ တပ်သားများ က သွားရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့သည်။
KNU တွဲဖက်အတွင်းရေးမှူး ဖဒိုစောလှငွေက“တိုက်ပွဲ နှစ်ဘက်ပစ်ကြ ခတ်ကြဆိုတော့၊ သူလက်နက်ကြီး ကိုယ်လည်း လက်နက် ကြီးနဲ့ ပစ်ကြတယ် ဆိုတော့၊ ဘယ်သူ့ လက်နက်လဲတော့ မသိဘူး၊ တိုက်ပွဲကြားမှာတော့ လူထု ဒဏ်ရာရမှုတွေရှိတယ်”ဟု ဧရာဝတီသို့ ပြောသည်။
ယင်းဒေသအတွင်း စစ်ဆင်ရေး ကွပ်ကဲမှု ဌာနချုပ် (စကခ ) ၇ လက်အောက်ခံ တပ်ရင်းများက လှုပ်ရှားနေကြောင်း ၎င်းက ဆို သည်။
သောက်ရေခပ် ဆည်စီမံကိန်းသည် အမှတ်(၁)လျှပ်စစ်စွမ်းအား ဝန်ကြီးဌာနမှ သီးခြား တာဝန်ယူလုပ်ကိုင်လျက် ရှိပြီး မဂ္ဂါဝပ် ၁၄၀ ထုတ်လုပ်နိုင်သော စိုက်ပျိုးရေးအတွက် ဆည်ရေပေးဝေနိုင်သည့် စီမံကိန်း ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
သောက်ရေခပ် ဆည်ဆောက်လုပ်ရေးကို အနာဂတ်စွမ်းအား ကုမ္ပဏီလီမိတက်နှင့် မင်းအနော်ရထာ အုပ်စု ကုမ္ပဏီ လီမိတက် တို့က တာဝန်ယူထားပြီး B.O.T (တည်ဆောက်၊ မောင်းနှင်၊ လွှဲပြောင်း စနစ်) ဖြင့် လက်ခံတည်ဆောက်ရန် သဘောတူထား ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း Eleven Media Group ၏ အင်တာနက် စာမျက်နှာတွင် ဖော်ပြထားသည်။
ကချင်ပြည်နယ် မြစ်ဆုံ ရေးအားလျှပ်စစ် စီမံကိန်း နေရာ ၄ ခုတွင်လည်း ဧပြီလ ၁၇ ရက်နေ့က ဗုံးပေါက်ကွဲခဲ့ရာ အဆောက်အအုံ နှင့် ယာဉ်များ ပျက်စီးခဲ့ပြီး လူတဦး ဒဏ်ရာ ရခဲ့သည်။
ဧပြီလ ၁၅ ရက် သင်္ကြန်အကြတ်နေ့တွင်လည်း ရန်ကုန်မြို့ ကန်တော်ကြီးပတ်လမ်းရှိ X2O မဏ္ဍပ်တွင် ဗုံး ၃ လုံးပေါက်ကွဲ မှု ကြောင့် ၁၀ ဦးသေဆုံးပြီး ၁၇၀ ကျော် ဒဏ်ရာရခဲ့ကြောင်း အစိုးရက တရားဝင် ထုတ်ပြန်ထားသည်။
ထို့အပြင် တရုတ်-မြန်မာနယ်စပ်ရှိ မူဆယ် ၁၀၅ မိုင် အေးရှားဝေါလ် ဂိတ်၌ ဧပြီလ ၁၄ ရက်နေ့တွင် ဗုံးပေါက်ကွဲမှု ဖြစ်ပွား ခဲ့သော်လည်း အသေအပျောက် မရှိဘဲ ထိခိုက် ပျက်စီးမှုများသာ ရှိခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
အပစ်ရပ် SSA ဌာနချုပ် တပ်ဖွဲ့ နအဖလက်အောက်ခံ စိန်ကျော့ဌာနေ ပြည်သူ့စစ်အဖြစ်ပြောင်း
ဧပြီ ၂၂ ရက် နောက်ဆုံးထား အမည်စာရင်း ပေးပို့၍ ၂၈ ရက် မနက်ဖြန်အပြီး အသွင် ပြောင်းရမည် ဆိုသည့် နအဖ ၏ ဖိအားကြောင့် ဗဟိုကော်မတီအဖွဲ့ရုံးစိုက်ရာ မြောက်ပိုင်းအပစ်ရပ် SSA ဌာချုပ်အား အခမ်းအနားဖြင့် စိန်ကျော့ ဌာနေပြည်သူ့စစ်အဖြစ် တနင်္ဂနွေ နေ့က အသွင် ပြောင်းပေး လိုက်ကြောင်း စုံစမ်း သိရှိရ ပါသည်။
နအဖ ဖိအားကြောင့် မလွဲသာလို့ ပြောင်းလိုက်ရတဲ့သဘော၊ ဧပြီ ၂၅ ရက်နေ့တုန်းက ရမခ ဒုတိုင်းမှူးက အ သွင်ပြောင်း အခမ်းအနားတက်ရောက်တယ်။ လူသူလက်နက်တွေကို စစ်ဆေးပြီး ပြည်သူ့စစ်ကဒ်ပြားတွေ၊ ဌာနေပြည်သူ့စစ်တံဆိပ် တွေ တခါထဲအပ်နှင်းသွားတယ်” - ဟု ဌာနချုပ်နေ ပြည်သူတဦးက ပြောပြပါသည်။
သျှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်း လားရှိုး အခြေစိုက် ရပခ ဒုတိုင်းမှူးက မြောက်ပိုင်း အပစ်ရပ် သျှမ်းပြည်တပ်မတော် ဌာနချုပ် တပ်ဖွဲ့ဝင်များအား စိန်ကျော့ (ဆိုင်ကျောဝ့်) ဌာနေပြည်သူ့စစ်အဖြစ်အသွင်ပြောင်းပေးလိုက်ခြင်းဖြစfသည်။
“ဌာနချုပ်က ဥက္ကဌ ဗိုလ်ချုပ်လွယ်မောဝ်း၊ အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး ဗိုလ်မှူးစိုင်းအွမ်၊ ဗိုလ်မှူးလိန်ဇင့်တို့ ဦး ဆောင်တဲ့ အင်အား ၁၀၀ နီးပါးကပေါ့ အသွင်ပြောင်းတာ၊ အခုအခြေအနေအရ သုံးသပ်ရင် သူတို့အဖွဲ့က ထိုင်းနယ်စပ်က ဂျပီးကွယ်လားဟူတပ်ဖွဲ့တို့လောက်တောင်အဆင့်မရှိတော့ဘူး” - ဟု လားရှိုးဒေသခံ အကြား အမြင်များသူ တဦးက ပြောပါသည်။
ထို့အတူ ဧပြီ ၂၆ ရက်နေ့ကလည်း ဗိုလ်မှူးကြီးလှမြင့် ဦးဆောင်သည့် မြောက်ပိုင်း အပစ်ရပ် SSA တပ်မဟာ ၃ တပ်မှူးက လူအင်အား ၁၀၀ ကျော်ဦးဆောင်၍ စိန်ကျော့(ဆိုင်ကျောဝ့်) ဌာနချုပ်လာကာ ပြည်သူ့စစ် အသွင်ထပ်ပြောင်းခဲ့သေးသည် ဟု ခိုင်လုံသည့်သတင်းရပ်ကွက်ကလည်းပြောပါသည်။
“အခုကျနော်တို့ ထပ်ကြားသိရတာက တောင်ကြီးက ရာပြည့် လက်ထောက် (ရပခ ဒုတိုင်းမှူး) လဲ ကာလိ လာ မယ် (တပ်မဟာ ၇ ) အသွင်ပြောင်းပေးမယ်လို့ကြားတယ်၊ တပ်မှူး ကေဒါ တပ်သားတွေက အသွင်ပြောင်းဖို့ လက်မခံသေး ဘူး၊ တပ်မဟာ ၇ ပေါ် သြဇာညောင်းတဲ့ ဒု ဥက္ကဌ ဗိုလ်ချုပ်ကိုင်ဖှ လဲမရှိဘူး၊ တခြားတပ်မဟာမှူး တွေဆီသွားပြီး အစည်းအဝေးထိုင်နေတယ်ပြောတယ်”- ဟု ကွန်ဟိန်းမြို့နယ် ကာလိဒေသခံတဦးက ပြော၏။
တပ်မဟာ ၁ ဌာနချုပ် ၀မ့်ဟိုင်းရှိ အရာရှိတဦးက - ဥက္ကဌ ဗိုလ်ချုပ်လွယ်မောဝ် ဦးဆောင်သည့် ဌာနချုပ် တပ်ဖွဲ့၊ သီပေါမြို့နယ် မိုင်းခေးအခြေစိုက် ဗိုလ်မှူးလှမြင့် ဦးဆောင်သည့် တပ်မဟာ ၃ တပ်ဖွဲ့ အသွင်ပြောင်း သွားသည်မှာ မြောက်ပိုင်းအပစ်ရပ်သျှမ်းပြည်တပ်မတော်အင်အား အားလုံး၏ ၄ % သာရှိကြောင်း၊ လက်ရှိ တပ်မဟာ ၇ နှင့် တပ်မဟာ ၁ တို့မှာ အသွင်ပြောင်းရေး လုံးဝလက်မခံကြောင်း၊ လက်မခံနိုင်ကြောင်းကိုလည်း ယခုလ ၉ ရက်နေ့ကအစည်းအဝေး ထိုင်ပြီး ဌာနချုပ် စိန်ကျော့သို့ တင်ပြခဲ့ဖူးကြောင်း - သျှမ်းသံတော် ဆင့်သို့ သုံးသပ်ပြပါသည်။
“အပစ်ရပ် SSA နယ်မြေက တခြားအပစ်ရပ်အဖွဲ့တွေလို နယ်စပ်နဲ့ မထိစပ်ဘူး၊ တဘက်ကလဲ အမျိုးသား အကျိုးထက် ကိုယ်ကျိုးဘဲ ဦးစားပေးတော့ သေရေးရှင်ရေးဖြစ်လာရင် ဗိုလ်ချုပ်စိုင်းရီတို့၊ ဗိုလ်မှူးအောင်မြတို့လို နိုင်ငံရေးဦးတည်ချက် အမျိုးသားရေး ဦးတည်ချက်အတွက် တချီတမောင်းနွှဲဦးမယ်ဟေ့ ဆိုတဲ့ ခိုင်မာပြတ်သားတဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်လဲမချနိုင်ဘူး ပေါ့”- ဟု မန္တလေးရောက် ခေတ်ပညာတတ်လူငယ်တဦး ကပြောပါသည်။
မြောက်ပိုင်း အပစ်ရပ် သျှမ်းပြည်တပ်မတော် လူသူလက်နက် အင်အား ၆၀၀၀ ခန့်ရှိကြောင်း၊ အင်အားအားလုံး အနက် အသွင်ပြောင်းရေးလက်မခံသည့် တပ်မဟာ ၁ တွင် အင်အားထက်ဝက်ကျော်ရှိနေသကဲ့သို့ ကွန်ဟိန်း မြို့နယ် ကာလိ အခြေစိုက် တပ်မဟာ ၇ လည်း ဒုတိယ အင်အားအများဆုံးတပ်မဟာ တခုဖြစ်သည်ဟု သျှမ်းပြည်စစ်ရေးလေ့လာသည့် အဆိုပါလားရှိုးမြို့ခံက ပြောပါသည်။
ယခုလလယ်ပိုင်းက အပစ်ရပ် UWSA ,KIA ,NDAA , SSA တို့ ၄ ဖွဲ့ ပန်ဆန်းမြောက်ဘက် တနေရာ၌တွေ့ဆုံ၍ သဘောတူညီမှု ရယူခဲ့သေး၏။ အပစ်ရပ်တပ်ဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဖွဲ့အား နအဖမှ စတင်ပစ်ခတ်/ကျူးကျော်လာခဲ့လျှင် နေရာအသီးသီးမှာလည်း တန်ပြန်တိုက်ခိုက်ရမည်၊ အချိန်ကိုက် တိုက်ပွဲကျင့်သုံးသွားမည်။ နေရာအားလုံး သတိရှိရမည်။ Command, Control, Communication Center တနေရာ တည်းထားမည်ဟူသည့် သဘောတူညီမှု ရယူစဉ်ကလည်း မြောက်ပိုင်း အပစ်ရပ် SSA လည်းပါဝင်သည်။
မွန်ပြည်သစ်ထိန်းချုပ်ဒေသအတွင်း စစ်အစိုးရက လုံခြုံေ...
(၀)နှင့် မိန်းလားအဖွဲ့အတွင်းရှိ ဒေသခံများ စစ်ရေးပြ...
လိုင်ဇာ ကုန်ကားအ၀င်နည်း ၊ အခြားနေရာများ ပုံမှန်ရှိ...
ဖူးကစ်ဆရာမီ ပန်းကန်လုံးစက်ရုံ အလုပ်သမားအခွင့်အရေးတ...
မောင်တောမြို့တွင်း နစကများ သေနတ်ပစ်ခတ် သဖြင့် မြို...
နာဂစ်သင့်ဒေသတွင် အာဏာ အလွဲသုံးစားလုပ် ကိုယ်ကျိုးရှ...
တောင်ပိုင်း ၀ နယ်မြေ ကျေးလက်လူထုထောင်ချီ ဆက်လက်ထွက...
ကရင်ငြိမ်းချမ်းရေးကောင်စီ စခန်းအနီး နအဖတပ်များ စစ်...
ဗိုလ်ချုပ်ကြီးကို ၀န်ကြီးချုပ် ဦးသိန်းစိန်အဖြစ် န...
နာမည်ကြီး စီးပွားရေး လုပ်ငန်းရှင်ကြီးများ ရွေးကောက...
အပစ်ရပ် SSA ဌာနချုပ် တပ်ဖွဲ့ နအဖလက်အောက်ခံ စိန်ကျေ...
လုံခြုံရေး တိုးမြှင့်ရန် လုံထိန်းတပ်သား ၁၀၀ ကျော် ...
နယ်ခြားစောင့်တပ် ဆွေးနွေးပွဲ အဆုံးသတ်ပြီလော
ယနေ့ မြန်မာ့ရေးရာ သတင်းများ April,28th,2010
သောက်ရေခပ် ရေအားလျှပ်စစ် စီမံကိန်းတွင် ဗုံးကွဲ
နေပြည်တော် ၀န်ထမ်းများ မိသားစုစရိတ် မဖြေရှင်းနိုင်...
စစ်ဗိုလ်ချုပ်အချို့ ယူနီဖောင်းချွတ်မှု ပြည်သူများ စ...
ဒီကေဘီအေနှင့် နအဖ ထိပ်တိုက်တွေ့နယ်မြေမကျော်ရန် သတိ...
ကယားပြည်နယ် ရဲစခန်းတွင် ဗုံးပေါက်ကွဲ
အင်္ဂပူမြို့နယ်အတွင်း ဗုံးဖောက်ခွဲမှုနှင့် ကျေးရွာအာဏ...
၀န်ကြီးချုပ် သိန်းစိန် ခေါင်းဆောင်သည့် ကြံ့ဖွံ့ နု...
ကျိုင်းတုံစစ်ဒေသ သျှမ်းပြည်တပ်မတော် နှင့် နအဖတပ် ဆ...
ယနေ့ မြန်မာ့ရေးရာ သတင်းများ April,27th,2010
နယ်ခြားစောင့်တပ် လက်မခံသည့် ကရင်အဖွဲ့၏ စီးပွားရေးလ...
NLD အလံနှင့် ဆိုင်းဘုတ် ဖြုတ်လိမ့်မည်မဟုတ်
ရန်ကုန်မြို့ခံများ ကျီးလန့်စာစား ဖြစ်နေ
တရုတ်နယ်စပ် ဖြတ်သူများထံမှ စစ်တပ်ငွေတောင်း
မုန်တိုင်း ဖြစ်ပေါ်နိုင်ကြောင်း ပညာရှင်တို့ သတိပေး
နယ်စပ် ခြံစည်းရိုးကာရံမူ အပေါ် မြန်မာဘက်က အိမ်နီးချ...
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် (သို့မဟုတ်) သဇင်နီ အပိုင်း - ၆၀...
ယနေ့ မြန်မာ့ရေးရာ သတင်းများ April,26th,2010
စစ်တပ်အများဆုံး အခြေစိုက် နယ်မြေ ဓါးပြတိုက်မှုများ ...
စစ်တပ်ရေးတဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံကြောင့် ထိုင်းနိုင်ငံရေး မ...
ခြံစည်းရိုး ကာရံနေသည့် စစ်တပ် စခန်းများမှ ဖမ်းမိသည...
ငြမ်းပြိုသည်ကို ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်သည်ထင်၍ ထိတ်လန့်နြေ...
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် (သို့မဟုတ်) သဇင်နီ အပိုင်း - ၅၉...
ယနေ့ မြန်မာ့ရေးရာ သတင်းများ April,25th,2010
စစ်တွေ အမျိုးသမီးများ ဆန္ဒပြမူ နောက်ဆက်တွဲ သတင်း
မြစ်ဆုံဗုံးပေါက်ကွဲမှု သံသရှိသူ အဖမ်းခံရ
နကသ ခွင့်ပြုသည့် ကုန်ပစ္စည်းများကို စုပေါင်းဂိတ်က လ...
နအဖ ဖိအားကြောင့် တောင်ပိုင်း ၀ လူထုနေရပ်မှရှောင်တိ...
ယနေ့ မြန်မာ့ရေးရာ သတင်းများ April,24th,2010
သတ်မှတ်ရက် ကျော်လွန်သော်လည်း မိုင်းလားတပ်ဖွဲ့ ရပ်တ...
ကေအိုင်အိုတပ်ဖွဲ့၏ တိုက်နယ်ရုံး စစ်ဆေးခံရနှစ်ဖက်စစ...
“ကျွန်မတို့ရပ်ကွက်မှာ စစ်အစိုးရာ အာဏာပိုင်တွေက ဖွဲ...
စစ်တွေတွင် အမျိုးသမီးများက လျှပ်စစ်မီး ရရှိရေး တော...
နေပြည်တော်၌ စစ်တပ်အဆင့်မြင့် အရာရှိများ သွားလာခွင်...
ရွေးကောက်ပွဲအတွက် လူငယ်များ၏ နာမည်စာရင်း အာဏာပိုင်...
ဗုံးခွဲတာ ဟိုကောင်တွေ၊ ဟိုကောင်တွေ၊ ပြီးတော့ ဟိုကေ...
နယ်ခြားစောင့် လက်မခံဟု နောက်ဆုံးရက်မှာ KIO တုံ့ပြန...
ယနေ့ မြန်မာ့ရေးရာ သတင်းများ April,23rd,2010
ခေတ်သစ်ပြည်သူ့ပါတီကို နောက်ကွယ်မှ ကြံ့ဖွံ့အကူအညီပေ...
ပြည်သူပိုင်တိုက်ခန်းများကို အထပ်ပိုဆောက်ရန် လုပ်ဆေ...
ပုဂ္ဂလိက မီဒီယာများကို ဗုံးသတင်း အကျယ်တဝင့် ဖော်ပြခ...
နယ်ခြားစောင့်တပ်အသွင်ပြောင်းရေး အကြောင်းပြန်ရန် ရက...
စစ်အစိုးရ အပေါ် အမေရိကန် မူဝါဒ မပြောင်း
ကေအိုင်အို ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ မြစ်ကြီးနားသို့ ထွက်ခ...
လေပြင်းကြောင့် မူစယ်တွင် ပျက်ဆီးမှုများပြား
ယနေ့ မြန်မာ့ရေးရာ သတင်းများ April,22nd,2010
Air Bagan မဏ္ဍပ်မှာ ပျော်ပါးသည့် ဦးတေဇ သား ပုံများ ...
ဥရုချောင်းတွင် ရွှေရှာသည့်လုပ်ပိုင်ခွင့် ထူးကုမ္ပဏီက...
နမ့်ခမ်းရောက် နေပြည်တော် ဆရာဝန်မကြီးခွဲစိတ်သည့် မေ...
နအဖ ပေးသည့် ဒက်လိုင်း အဖြေပေးဖို့ ၀ တပ်ဖွဲ့အစီအစဉ်...